porn အသုံးပြုမှုကို memory နဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုကိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သလား? - Porn တွင်သင့်ဦးနှောက်
“ ပိုမိုကောင်းမွန်သောအာရုံစူးစိုက်မှု”၊ “ ဦး နှောက်မှေးမှိန်သွားခြင်း၊ ပိုမိုရှင်းလင်းသောအတွေးအခေါ်များ” နှင့်“ တိုးတက်လာသောမှတ်ဉာဏ်” တို့သည် reboot လုပ်သူများ၏ဖော်ပြသောအသုံးအများဆုံးအကျိုးကျေးဇူးများဖြစ်သည်။ ဒီမှာတစ်ခုပါ
ကျွန်ုပ်၏စိတ်စွမ်းရည်သည်လွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်ခွဲမှသာတိုးတက်ခဲ့သည်။ ငါကနှလုံးရောဂါတစ်ခုလိုလေးနက်တယ် ငါကပိုပြီးအေးဆေးတည်ငြိမ်တယ်၊ ငါ့ရဲ့ဂီတစွမ်းရည်ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ခဲ့တယ်။ (ရာစုနှစ်ဝက်လောက်ကစားနေပြီလို့မင်းစဉ်းစားမိတဲ့အခါတစ်ခုခုပြောတာ) ။ “ Don Jon” ကိုဇာတ်ညွှန်းရေးသူတိုင်းကသူတို့ပြောတာကိုသိတယ်။ သူစိတ်ပျက်မိပြီးဒေါသထွက်တတ်ပုံကိုသတိရမိသည်။ သူသည်သူ၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကိုင်တွယ်သောအခါတိုးတက်လာပုံရသည်။ ဒီဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးကကျွန်တော့်ဘဝကိုပြောင်းလဲစေခဲ့တယ်။
ကြည့်ဖူး က Man ပြတ်တောက် Zimbardo & Coulombe မှအွန်လိုင်းဂိမ်းနှင့်ညစ်ညမ်းမှုများ၏အကျိုးဆက်များကိုလူငယ်အမျိုးသားများ၏ပညာရေးစွမ်းဆောင်မှုနှင့်အောင်မြင်မှုအပေါ်စေ့စေ့စပ်စပ်ဆွေးနွေးမှုအတွက်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ပထမလေ့လာမှု (၃) ခုကနာတာရှည်ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်း (သို့) လိင်မှုဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများကြောင့်လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုသည်လူတစ် ဦး ၏ဆန္ဒပြည့်ဝမှုကိုနှောင့်နှေးစေနိုင်သည်ဟုဖော်ပြသည်။ မှတ်စု: ကြွက်များ၏အကျိုးကို circuitry အတွက် dopamine receptors လျှော့ချပိုကြီးတဲ့အနာဂတ်အကျိုးသည်ဆန္ဒပြည့်နှောင့်နှေးဖို့သူတို့ရဲ့စွမ်းရည်ကိုလျော့ချ.
ညစ်ညမ်းမှုကိုစွန့်လွှတ်ပြီးနောက်သုံးစွဲသူများမကြာခဏတွေ့မြင်ရသည့်အလျင်အမြန်တိုးတက်မှုများအပေါ် မူတည်၍ လူတစ် ဦး သည်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်ရန်စွဲလမ်းစရာမလိုဟုထင်ရသည်။ သက်ဆိုင်ရာသုတေသနကိုမသုံးသပ်ခင်အသုံးပြုသူများအနေဖြင့်ညစ်ညမ်း Post-porn ပြောင်းလဲမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ မည်သည့်သတင်းပို့သည်ကိုသုံးသပ်ကြည့်ကြစို့။ (ဤတင်ပြချက်၏အဆုံးတွင်မိမိကိုယ်ကိုအစီရင်ခံစာများပိုမိုတွေ့ရှိနိုင်သည်။ ):
“ ဒီနေ့ငါ (တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုရှောင်ခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများကိုရှောင်ခြင်း) ပြန်လည်စတင်စဉ်အတွင်းမှတ်ဥာဏ်တိုးတက်မှုများအကြီးအကျယ်ခံစားရတယ်။ ကျွန်ုပ်ဘဝ၌ပထမဆုံးအကြိမ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွင့်ထားခြင်းခံရသည်ဟုခံစားရသည်။ ယခုငါအာရုံစူးစိုက်မှုသက်တမ်းရှိသည်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်လုံးလုံးငါအာရုံစိုက်လို့မရဘူး၊ ဘာမှမမှတ်မိတော့ဘူးလို့ခံစားရတယ်။
2019 ၏အဖြစ်မျိုးစုံလေ့လာမှုများဆင်းရဲတဲ့သိမြင်မှုရလဒ်များကိုမှ porn အသုံးပြုမှုလင့်ထားသည်: ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနှင့်ပိုမိုညံ့ဖျင်းသောသိမြင်မှုရလဒ်များနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည့်လေ့လာမှုများ။ ထိုမှတပါး, စွဲအာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်အကြိမ်ကြိမ်ပြခဲ့ကြ အင်တာနက်စွဲ အချို့သောအသုံးပြုသူများသည်အတွက်တည်မြဲ memory နဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုပြဿနာကိုထုတ်လုပ်ပေးသည်။
အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်ထိုကဲ့သို့သောလျော့နည်းသွားအဖြစ်သိမြင်မှုချို့ယွင်းမှုအတွက်အကောင့်နိုင်ကြောင်းစွဲ-related ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲခွဲထုတ်ဖို့စတင်ပါပြီ မီးခိုးရောင်ကိစ္စ ထဲမှာ တိုကျရိုကျ cortex နှင့်စနစ်တကျ အဖြူကိစ္စ။ မရအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်, ဦးနှောက်လေ့လာမှုများ အင်တာနက်ကိုစွဲထံမှခံရကွောငျးတငျပွ ချို့ယွင်း inhibitory ထိန်းချုပ်မှု နှင့် တိုးမြှင့် Impulse။ (အင်တာနက်ကိုစွဲလေ့လာမှုများအချို့ကိုဤအပိုင်းကိုမှာဆှေးနှေးစဉ်သတိပြုပါ ပါဝင် အွန်လိုင်း erotica အသုံးပြုမှု, အဘယ်သူမျှမက-မတူပဲခွဲထုတ်ဒီ post ရဲ့အဓိကဘာသာရပ်သောအလုပ်လုပ်နေမှတ်ဉာဏ်စမ်းသပ်ချက်။ )
ဒါဟာ ((အလှည့်အတွက်မှတ်ဥာဏ်ချို့ယွင်းသော) inattention တကယ်လှုံ့ဆျောမှုမရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ကြောင်းပေါ်လာသည်လျှော့ချ D2 dopamine receptors) ။ လုပ်ငန်းများသည်ပျင်းစရာကောင်းပြီးစိတ်ဝင်စားစရာမကောင်းဟုထင်ရသည်။ ဦး နှောက်၏ဆုလာဘ်ပတ် ၀ န်းကျင်တွင် dopamine အချက်ပြမှုလျော့ကျခြင်းသည်ထူးခြားချက်တစ်ခုဖြစ်သည် အားလုံး စှဲ။ သုတေသီများတိုင်းတာခြင်း dopamine သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး အင်တာနက်စွဲနှင့်အတူလူ said:
porn အသုံးပြုသူများသည် / လိင်စွဲအပေါ်မကြာမီကအာရုံကြောလေ့လာမှုများ အင်တာနက်စွဲခြင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးစွဲတွင်တွေ့မြင်ကဲ့သို့တူညီသောဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများကိုများစွာကိုဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ dopamine receptors porn စွဲအတွက်အကဲဖြတ်ခံရဖို့ရှိသေးပေမယ့်, အာရုံကြော desensitization နှင့်လေ့ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ခြောက်လလေ့လာမှုများ porn အသုံးပြုသူများသည်အတွက် desensitization အစီရင်ခံတင်ပြကြပါပြီအမျိုးမျိုးသောနည်းစနစ်ကိုသုံးပြီး (1, 2, 3, 4, 5, 6).
ဤသည်ပြင်းထန်စွာဆုချသည့်စနစ် dopamine အချက်ပြစနစ်ကျဆင်းခြင်းကိုညွှန်ပြသည်။ ထို့အပြင်လေ့လာမှုမြောက်မြားစွာကအုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာထိန်းချုပ်မှုအားနည်းနေသည်ဟုအစီရင်ခံတင်ပြကြသည် အလုပ်မဖြစ် prefrontal ဆားကစ် ပုံမှန် porn အသုံးပြုသူများသည်သို့မဟုတ် porn စွဲများတွင်: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16။ desensitization နှင့်ချို့ယွင်းအလုပ်အမှုဆောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာနှစ်ဦးစလုံးဆင်းရဲတဲ့သိမြင်မှုလုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။
အခုတော့ ၁၃ ရက်လောက်ရှိမယ်ထင်တယ်။ ယခု Ifeel သည်အလွန်အာရုံစိုက်ပြီးပုံမှန်ထက်ပိုမိုအာရုံစူးစိုက်နိုင်သည်။ ဒီနေ့လူတွေနဲ့စကားပြောတဲ့အခါငါမျက်လုံးချင်းစောင့်နေပြီးလူမှုရေးကပိုပြီးတည်ငြိမ်တယ်။ ကျွန်ုပ်၏အသံသည်ပိုမိုနက်ရှိုင်းပြီး ပို၍ စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စရာကောင်းပြီးပိုမိုရှင်းလင်းလာသည်ဟုထင်သည်။
30 နေ့ရက်များနှင့်ဦးနှောက်မြူကြှနျုပျ၏စိတျနှလုံးကျန်ရစ်ခဲ့ပါသည် !!!
ငါဒီနှစ်ကုန်သို့မရောက်မှီတိုင်အောင်သွားပေါ်စီစဉ်တာပါ။ ငါမ PMO ၏ 100 ရက်ပေါင်းဖြစ်လိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။
ရုံအားကစားရုံထဲကရတယ်နှင့်ပြင်းထန်သောလေ့ကျင့်ခန်းရှိခဲ့သည်။ ပင်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းအစာရှောင်ခြင်းအကျင့်ကိုကျင့်စဉ်းစား။ ငါလျော့နည်းဆာလောင်မွတ်သိပ်ဖြစ်ကြောင်းကိုကိုသတိပွုမိ။ ကြွက်သားတွေပိုပြီးခဝါသည်ဖြစ်ကြသည်။ ဖြစ်မယ်, ဒါပေမယ့်ငါအချို့သိပ်သည်းဆကိုပြန်ရတဲ့တာတူခဲ့သည်။
“ ကျွန်တော်ခံစားခဲ့ရသောကောင်းကျိုးအချို့ - ကျွန်ုပ်သည်ပိုမိုပေါင်းသင်းနိုင်ခြင်း၊ သတင်းအချက်အလက်များကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာသိမ်းဆည်းခြင်းနှင့်မှတ်မိခြင်းခံရနိုင်သည်။ ငါ့အတိတ်ဘဝမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေအများကြီးကိုပိုပြီးမှတ်မိသေးတယ်။ ငါစိတ်တိုလို့မရဘူး၊ အလုပ်တွေအများကြီးပိုလုပ်နိုင်တယ်။ ”
နေ့ ၇၉ ရက်၊ NoFap Hardmode နှင့်အာရုံစူးစိုက်မှု၊ ဤလတွင်ကျွန်ုပ်သည်နာရီ ၄၀ အတွင်းစာမျက်နှာ ၁၂၀၀ ကိုဖတ်နိုင်ခဲ့သည်! 79 နှစ်အတွင်းပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်။
No fapping ၏အကျိုးကျေးဇူးများအနက်မှတစ်ခုမှာရှင်းလင်းပြတ်သားသောအာရုံစိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်အတွက်သက်သေပြနိုင်သည်။ လွန်ခဲ့သောတစ်လတာကာလအတွင်းကျွန်ုပ်ဖတ်ခဲ့ပြီးသောနှစ်များ၊ ယခုလသည်ကျွန်ုပ်၏စိတ်ကိုတိုးချဲ့ရန်နေ့စဉ်နာရီပေါင်းများစွာဖတ်နိုင်ခဲ့သည်။
အလေ့အကျင့်၏စွမ်းအားသည်သင်၏ psyche နှင့်သင်၏ fapping များကိုနားလည်ရန်အတွက်မှတ်သားလောက်ဖွယ်စာအုပ်တစ်အုပ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏အလေ့အထအနည်းငယ်ကိုပြောင်းလဲရန်ကျွန်ုပ်အားများစွာကူညီပေးခဲ့သည်။ သူတို့ထဲကတစ် ဦး သည်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဖတ်နေသည်။
ငါ 15 + နှစ်ပေါင်းတစ်ဦးညစ်ညမ်းစှဲလမျးသူရောက်ခဲ့ဖူး (ငါ Pre-မြီးကောင်ပေါက်များတွင်စတင်ပြောပါလိမ့်မယ်) နှင့်လမ်းတစ်လျှောက်အချို့သောမိလဲရှိနေသော်လည်းငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်တိုးတက်လာဖို့နည်းလမ်းတွေသင်ယူပါတယ်။ ငါ, ငါ့စိုးရိမ်မှုတွေကျော်လာပြီငါ့ကိုယ်ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်း, ငါ၏စိတ်ကိုဆုံးမပဲ့, အချို့ရက်ပေါင်းသားရဲ၏တိုက်ပွဲအနိုင်ရရှိပင်သော်လည်း, ငါစစ်ပွဲအနိုင်ရမယ့်သူတဦးတည်းရယ်ပေါ့။
ငါနောက်ကျောဖြစ်လိမ့်မယ်သေချာပါတယ်, ဒါပေမယ့်တိုင်းခြေလှမ်းရှေ့ဆက်မယ့်ခြေလှမ်းဖြစ်ပါတယ်, သင့်ထောက်ခံမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
"ငါသည်အခြားအမှုအရာလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ငါကတခြားအရာတွေခံစားရတယ် ထိုအခါငါအခြားအရာချင်တယ်နှင့်အလိုရှိကြသည်။ ကျွန်ုပ်၏နောက်ပြင်ဆင်မှုကိုအမြဲတမ်းရှာဖွေနေတော့မည်မဟုတ်ပါ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများသည်တစ်ချိန်ကကျွန်ုပ်အပေါ်လွှမ်းမိုးခဲ့သောစွမ်းအားမရှိကြပါ။ ကျွန်ုပ်သည်တနေ့လုံးတပ်မက်သောဘောလုံးလည်းမဟုတ်ပါ။ ငါနောက်ဆုံးတော့လိင်အပြင်တခြားအရာတွေကိုစဉ်းစားဖို့အာရုံစူးစိုက်ထားတဲ့စိတ်တစ်ခုရတော့တယ်။ ”
မရပ်မနားဘဲ, ငါ shit ပို့စ်တင်ဘယ်မှာဤကဲ့သို့သောအားလပ်ချိန်နှင့်အတူ။ သို့သော်လည်းငါသည်အများကြီးပြုမိတယ်။ ငါနောက်ထပ်ဘာလုပ်မလဲ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေ? နံပါတ်
ရက်ပေါင်း ၁၅၀ ကငါ့ရဲ့အတွေးတွေကိုပြီးအောင်ပြီးလေ့လာခဲ့တယ်
ဤခရီးတွင်အတက်နှင့်အပြောက်များရှိသော်လည်းအကျိုးရှိသည်။ ၃.၉ / ၄ GPA ရခဲ့တယ်။ အကျိုးကျေးဇူးတွေအများကြီးရှိတယ်။ အကျိုးခံစားခွင့်များအကြောင်းသင်ဖတ်သမျှသည်မှန်ကန်သည်။ ဘယ်တော့မှပြန်မလာပါ ငါပြိုင်ဘက်စာမေးပွဲများအတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြင်ဆင်နေငါဒီခရီးစဉ်ငါ့ကိုကဲ့သို့အများကြီးကူညီလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါတယ် ကြီးမားတဲ့လှုံ့ဆော်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါရချင်သမျှကိုငါရတယ်ငါအံ့သြမိပါတယ်ကြောင့်ဤခရီးမတိုင်မီမသွားဘူးသောကွောငျ့။ ငါ့ကိုဒီဆေးဖြတ်ရန်ကူညီပေးခဲ့သည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘုရား။ ငါဘယ်တော့မှမကောင်းတဲ့အကျင့်ကိုပြန်သွားတော့မှာမဟုတ်ဘူး။
Nofap နှင့် GMAT ။ ပိုကောင်းအာရုံစိုက်လာသောအခါစမ်းသပ်ဆည်းပူးနေ။ အခြားသူမည်သူမဆို?
ငါလာမယ့်သီတင်းပတ်အတွင်းရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့စိတ်ကိုအတူယူဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ကြောင်းကိုယုံကြည်မှုဖြစ်၏နီးပါး2နှစ်ပေါင်းများအတွက် GMAT စာမေးပွဲနှင့်အတူရုန်းကန်နေနှင့်နောက်ဆုံးတော့ Nofap ၏ 36 ရက်အကြာမှာနှင့်အလေ့အကျင့်စမ်းသပ်မှုနောက်ဆုံးညဥ့်လုပ်နေတာပါပြီ။
Fapping ဆက်ဆက်စမ်းသပ်မှုအပေါ်မှာငါ့အာရုံနဲ့ performance ပျက်စီးခဲ့သည်။ ငါသည်ငါ၏ဘွဲ့ကြိုများအတွက်ထိပ်တန်းစီးပွားရေးကျောင်းသို့ သွား. ဂုဏ်ထူးနဲ့ငါ့ဒီဂရီပြီးစီးခဲ့ပေမယ့်ငါတစ်လျောက်ပတ်ရမှတ်ရတဲ့စမ်းသပ်မှု3ကြိမ်ယူပြီးနှင့်မပြီးနောက်ကိုမကျေနပ်ခဲ့သည်။ ငါစာသားစမ်းသပ်ကာလအတွင်းထုတ်ဇုန်များနှင့်အာရုံဆုံးရှုံးလိမ့်မယ်။ ငါ Nofap စတင်ခဲ့သည့်အကြောင်းပြချက်၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သောကြောင့်ဦးနှောက်မြူသည်နဲ့ကျွန်မရှင်းရှင်းလင်းလင်းယခုခြားနားချက်ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
နီးပါး MBA ဘွဲ့ pursing ပေါ်တက်ပေးခြင်းပြီးနောက်, ငါနောက်ဆုံးတော့အတူတူငါ့အ shit တယ်နှင့် nofap အသိုင်းအဝိုင်းငါ့ကိုလမ်းကြောင်းအပေါ်နေဖို့ကူညီပေးခဲ့တယ်။ စမ်းသပ်မှုပေါ်မှာငါ့ကိုကံဆန္ဒရှိ!
သင်၏ ဦး နှောက် ၁၀၀% သည်သင့်အတွက်အလုပ်လုပ်နေပြီးနောက်ခံမှညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများကိုပြန်မဖွင့်သောအခါ Focus သေချာသည်။ ဒါဟာရလဒ်များအရအိပ်ယာအကျိုးသက်ရောက်မှုမဟုတ်ပါဘူး ဒါကအစစ်ပဲ။
Fapstronauts ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၊ ၃ ပတ်ကြာပြီးနောက်၊ ယခုငါအသက် ၁၂-၁၃ နှစ်အရွယ်ဖြစ်ချိန်မှစပြီးပထမဆုံးအကြိမ်အနေနဲ့ M  ဟာငါ့ ဦး နှောက်မှေးမှိန်နေသလိုခံစားရတယ်။ ငါရှင်းပြဖို့ဘယ်တော့မှခဲ့ပေမယ့်ကိုယ့်ကိုယ့်အတန်ငယ်အဖြစ်မှန်အပေါ်ငါ့အအာရုံဆုံးရှုံးခဲ့ရတစ်နေရာရာမှာကဲ့သို့ခံစားရတယ်။ ငါကမ္ဘာပေါ်မှာတစ် ဦး ကြည့်ရှုသကဲ့သို့ဖြစ်သကဲ့သို့ငါ့ ဦး နှောက် fogged ခံရ။ ကောင်းပြီ၊ အခုတော့မရှိတော့ဘူး၊ ဒါမှမဟုတ်အနည်းဆုံးတော့အရမ်းပျက်စီးသွားပြီ။ ပြီးတော့ငါကဒီထက်ပိုပြီးပျော်ရွှင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။
အနည်းဆုံးတစ်ပတ်နှစ်ပတ် / တစ်ကြိမ်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတတ်တဲ့သူ ၁၇ ယောက်။ ငါ NoFap ကိုမင်းလုပ်သမျှကာလပတ်လုံးငါလုပ်နေတယ်၊ ​​ငါလည်းထပ်တူသက်ရောက်မှုတွေခံစားရတယ်။ ကမ္ဘာကြီးနှင့်အဆက်ပြတ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင်၏ဖော်ပြချက်သည်ကျွန်ုပ်၏လွန်ခဲ့သောသုံးနှစ်တာကာလကိုဖော်ပြသည်။ NoFap ကိုစကတည်းကငါကျောင်းမှာပိုပြီးအလုပ်များခဲ့တယ်၊ ငါအရင်တုန်းကလိုပဲပြန်လာခဲ့တာနဲ့တူတယ်။ ဆက်သွားပါ
ရပါတယ် နေ့တိုင်းလိုလိုအိမ်ကိုဘယ်သူမှမအော်ချင်ဘူး၊ “ ငါ့ ဦး ထုပ်ဘယ်မှာလဲ!” "ငါ့ဖိနပ်ဘယ်မှာလဲ !!!"
“ ငါ့ရဲ့သော့ကိုဘယ်သူ့ကိုမှတွေ့လား ကျွန်တော့်သော့တွေပျောက်သွားပြီ!” ကျွန်ုပ်ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ် NoFap သို့တစ်ပတ်အကြာကျွန်ုပ်၏ shit ကိုဘယ်ကရုတ်သိမ်းလိုက်သည်နှင့်ကျွန်ုပ်မိဘများကကျွန်ုပ်အားလုပ်ခိုင်းသည့်အရာများကိုသတိရမိသည်။ အရမ်းမိုက်တယ်။
အတိအကျ။ ငါ့အဘို့အလွန်အကျွံတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ, ထိုကဲ့သို့သောမျက်စိ floaters, လက်တုန်တုန်ယင်ယင်, ဆင်းရဲသောမှတ်ဉာဏ်, ဝက်ခြံ, ဦးနှောက်မြူ, ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုတစ်ခုမရှိခြင်းအဖြစ်ရောဂါလက္ခဏာတွေဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသည်။ ဒီရောဂါလက္ခဏာတွေငါသည်ကိုယ်အဘို့ထိုသူတို့တွေ့ကြုံစတင်ခဲ့သည်သည်အထိ၎င်းတို့၏ထုတ်ကုန်ရောင်းချနိုင်ရန်အတွက်အများအပြားက်ဘ်ဆိုက်များအားဖြင့် Scan ကိုခဲ့ကြသည်ထင်ခဲ့တယ်။
အစဉ်အဆက်မကြာသေးမီကငါ၏အရှည်ကြာဆုံး Streak ခဲ့: 19 ရက်နှင့်ငါသည်ငါ့မှတ်ဉာဏ်နှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုနှစ်ခုလုံးအတွက်တိုးတက်မှုသတိပြုမိလို့ပြောရပေမည်။ ငါသည်လည်းလူအပေါင်းတို့သည်အချိန်လျော့နည်းအတန်ငယ်ခံစားရတယ်။
ငါ 12 နှစ်အရွယ်ကတည်းက avid fapper ခဲ့ကြပြီးရက်အနည်းငယ်အကြာဈ nofap စတင်ခဲ့သည်။ သုံးရက်ကြာပြီးတဲ့နောက်ဒီ“ ဦး နှောက်မြူ” ကတဖြည်းဖြည်းပျောက်ကွယ်သွားတယ်။
ငါထဲကရတော့မှကိုယ်ကအမြဲကပြီးပြည့်စုံသောငရဲခဲ့, ဖွစျလိမျ့မညျဘယျလိုအတိုင်းဤလက်ခံခဲ့သည်ရှိသည်ဟုယူဆသောအတိတ်31 /2နှစ်ပေါင်းတစ်ဆိုးရွားစွာသိပ်သည်းမြူကြောင့်ကြပြီ။ လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ငါကပိုသတိပေးချက်ဖြစ်ကြောင်းကိုနှင့်စိတ်ကိုငါ့ပုံမှန်ပြေးဆင်းပြည်နယ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အံ့သြဖွယ်ခံစားဈအာရုံစူးစိုက်နိုင်ပါတယ်, ငါ၏အသက်တာ၏အပျော်ရွှင်ဆုံးခဲ့ကြပြီ။
သို့သော်မြူမှုန်သွားခြင်းများသောအားဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်ဘာမျှမတတ်နိုင်သောအရာဖြင့်စိတ်ရှုပ်ထွေးနေခဲ့သည်။ ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်သည်ကွန်ပြူတာသော့များထဲမှအမျက်ဒေါသကြောင့်ဒေါသထွက်နေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ငါတကယ်တကယ်စာရိုက်နေတယ်၊ ​​ဒါကြောင့်မင်းကယောက်ျားတွေဆီကအကူအညီအချို့ရနိုင်တယ်။ ဒါကြောင့်ငါဟောင်းနွမ်းတဲ့အကျင့်ဟောင်းကိုပြန်မသွားဘူး
တစ်ရက် 50, အကြိုးခံစားခှငျ့, nofap တကယ်တော့-စစ်ဆေးခြင်းကိုအပေါ်မူဆယ်။
ဦး နှောက်မြူတည်ရှိခြင်း - အငွေ့တထောင်းထောင်းတစ်ခုစီတိုင်းမှာ ဦး နှောက်တွေဖြစ်ပေါ်နေတာကိုငါခံစားရတယ်။ အားနည်းချက်များနှင့် MO ၏လုပ်ရပ်များအတွက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာမြင်တွေ့ခဲ့ရသည်၊ သို့မဟုတ်မြူပြန်လာရန်အနားမလိုခြင်း။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့်၎င်းခံစားချက်များကိုဖြတ်သန်းစီးဆင်းစေခြင်းသာဖြစ်သည်။ အချိန်တစ်ခုစီသည်ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်ရန်ရက်ပေါင်းများစွာကြာသော်လည်းအချိန်တိုင်းတွင်ပိုမိုမြန်ဆန်သောအရာတစ်ခုဖြစ်ပုံရသည်။ ငါပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ် 40 ရက်ဒီသို့အဘို့ငါကိုလည်းအမာခံဘာမှမြင်နေခြင်းနှင့်အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ရင်တောင်ဒါဟာနှိုးဆော်ခြင်းမစိတ်ဝင်စားဖို့ရှိသည်မဟုတ်ကြောင်းသတိပြုမိကြပါပြီ။
ငါနှစ်ပေါင်းများစွာစုဝေးစေတော်မူသော (နှိုးဆွမဟုတ်) နှိုးဆော်ခြင်းတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောအရာများစွာကိုခဲ့ငါ့ ဦး နှောက်နာတာရှည်နီးပါးသူတို့ကတဆင့်စက်ဘီးစီးခဲ့ကြောင်းပြောပြနိုင်ဘူး။ ယခုကျွန်ုပ်၏ ဦး နှောက်သည်တပ်မက်သောအရာသည်အပျော်တမ်းမိန်းကလေးများ၏ဓာတ်ပုံများသာဖြစ်ပြီး softcore သာဖြစ်သည်။ ငါ့မှာအားနည်းချက်တွေရှိခဲ့တာကအစောပိုင်း Edging နဲ့အတူအရာအားလုံးကပိုပြီးထိခိုက်လွယ်တယ်ဆိုတာသေချာတယ်။ ငါဒီရက်တာရှည်လိမ့်မည်မဟုတ်ကြောင်းမှန်းဆစွလိမ့်မယ်။
ရုံဖြင့်စတင်ရန်နောက်ခံအနည်းငယ်။ ၁၆ နှစ်ကနေငါ PMO ကိုတစ်နေ့ ၃ ကြိမ် (မကြာခဏဆိုသလိုများများစားစား) သုံးလေ့ရှိတယ်။ ငါဟာထူးခြားတဲ့အဆင့်ကိုရောက်ခဲ့ဖူးပေမယ့်အမျိုးသမီးတွေ၊ ထိုအခါငါတက္ကသိုလ်သို့ရောက်သောအခါ, ငါ့ဟုန်းဟုန်းဟုန်းဟုန်းတိတ်ငြိမ်သကဲ့သို့ငါ PMO'ing မကျင့်။
ဒါကတစ်နည်းနည်းနဲ့အမျိုးသမီးတွေအပါအ ၀ င်အရာအားလုံးကိုကျွန်တော့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်တက်ကြွမှုမရှိအောင်လှုံ့ဆော်ပေးခဲ့တယ်။ ဆိုလိုတာကတော့အကျိုးဆက်တွေကိုဂရုမစိုက်တဲ့အတွက်ငါလိုချင်တာကိုပြောချင်တာကငါလိုချင်တာကိုပြောချင်တာကိုဆိုလိုတာပါ။ (PMO'ing တစ်လျှောက်လုံး ဦး နှောက်ကိုရေတွက်ခြင်းကြောင့် - မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကငါ့ကိုငြင်းပယ်လျှင်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ pixel က 10x လောက်ပိုကောင်းတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ထက်ငါပိုရှာနိုင်လို့) ။
ဒါကြောင့်ကျွန်တော့်ရဲ့မရည်ရွယ်ဘဲစိတ်အပြောအဆိုနဲ့သဘောထားအပေါ်ယုံကြည်မှုကြောင့်အမျိုးသမီးတွေကကျွန်တော့်ကိုဆွဲဆောင်လာတယ်။ ငါမှာပြသဖို့စိတ်သဘောထားမရှိဘူး၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့အရင်ကဖော်ပြခဲ့သလိုပဲ pixel တွေရှိတယ်၊ အဲ့ဒီ့မှာငါလုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် PIV ပျော်စရာကောင်းတဲ့ PIV ရှိဖို့မလွယ်ဘူး။ ဒီလိုဖြစ်လာတာနဲ့အမျှကျွန်မရဲ့အဆင့်တွေကချော်ထွက်လာတယ်။ အရာရာကိုမှတ်မိဖို့အခက်တွေ့နေတယ်။ အဲဒါကငါ့ ဦး နှောက်ဟာ static ဖြစ်သွားသလိုပဲ။ လူတွေရဲ့နာမည်တွေကိုမေ့သွားတဲ့ပုံ - အနီးကပ်ဓာတ်ပုံမှတ်ဉာဏ်ရှိခဲ့ဖူးတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀ ရက်က NoFap ကိုစပြီးကတည်းကကျွန်တော့် ဦး နှောက်ဟာခြားနားဥာဏ်ရည်ထက်မြက်မှုမရှိခဲ့ဘူးလို့ခံစားမိတဲ့အထိကျွန်တော့် ဦး နှောက်ကရယ်စရာကောင်းတဲ့ပြတ်သားမှုဖြစ်လာတယ်။ ငါကြာကြာအာရုံစူးစိုက်နိုင်သည်ပိုမှတ်မိနှင့်ငါ (ရက်ပေါင်း 20 ပြီးနောက်!) အထက်တန်းကျောင်းနီးပါးအဖြစ်ကောင်းစွာသတင်းအချက်အလက်စုပ်ယူနိုင်ပါတယ်။ လူမှုရေးဘက်မှာ၊ ငါသည်လည်းအထက်တန်းကျောင်းသို့ပြန်သွားသည်။ ငါလူမှုရေးအရအဆင်မပြေ, အာရုံကြောရှုပ်ထွေးဖြစ်ပြန်သွားပြီ။ ငါဟာကိစ္စရပ်တွေအပေါ်အလိုလိုပြုမူဆောင်ရွက်မည့်အစားစကားစမြည်ပြောဆိုမှုများကိုအလွန်အမင်းစဉ်းစားမိသည် (သေးငယ်သောစကားလုံးဖြစ်စဉ်တွင်ကျွန်တော်သိသိသာသာတိုးတက်လာသည်) မဖြစ်နိုင်သလောက်ဖြစ်သည်။
TL; NoFap ခင်မှာ DR = ကောင်းသောလူမှုရေးမိန်းမနှင့်ကောင်းသောကျွမ်းကျင်မှု, (သို့သော်ကိုလိုက်ရန်မလှုံ့ဆျောမှု) နှင့်ကြောက်မက်ဘွယ်သောဦးနှောက်။ NoFap အမျိုးသမီးများနှင့်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ဦးနှောက်နှင့်အတူကြောက်မက်ဘွယ်သောကြောက်မက်ဘွယ်သောလူမှုရေးကျွမ်းကျင်မှု, = ပြီးနောက်။
ဒီမှာအခြေအနေတူ။ ငါ ၁၁ ရက်ပဲရှိသေးတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါနှေးနေသလိုခံစားရတယ် (ငါဝမ်းသာတယ်) ငါ့ ဦး နှောက်မသန်တဲ့အထက်တန်းကျောင်းစိတ်ကိုပြန်ပြောင်းနေတယ်။
ကျွန်ုပ်၏အာရုံစူးစိုက်မှုပိုမိုကောင်းမွန်သော၊ ကျောင်းတွင်ကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်ရန်လှုံ့ဆော်မှုပြန်ရလာသည်နှင့်အရေးအကြီးဆုံးမှာပေါင်းသင်းလိုသောကျွန်ုပ်၏ဆန္ဒက ပို၍ ကောင်းသည်။ ဒါပေမယ့်ဟုတ်တယ်၊ ငါလည်းအဲဒီအချိန်ကစပြီးစဉ်းစားတွေးခေါ်သူတစ်ယောက်ပါ၊ ပျောက်သွားလိမ့်မယ် ယုံကြည်မှုနဲ့အချိန်နဲ့တိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်တယ်၊ ဦး နှောက်မြူသည်တကယ့်ပြproblemနာဖြစ်သည်။ အဲဒါကိုရှောင်ရှားပါ၊ ခင်ဗျားမှာလူမှုရေးကျွမ်းကျင်မှုပြhandleနာကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့သင့်တော်တဲ့လူတစ်ယောက်ရှိတယ်။
ကျွန်ုပ်၏ဒုတိယဘာသာစကားဖြစ်သောပြင်သစ်စကားကိုကျွမ်းကျင်စွာပြောနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုကျောင်းတွင်နှစ်ပေါင်းများစွာလေ့လာသင်ယူခဲ့ပြီးအဓိကဘာသာစကားဖြစ်သောနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံတွင်နေထိုင်သော်လည်း၎င်းသည်စကားပြောသောအခါအမြဲတမ်းထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ဖြစ်ခဲ့ပြီး ဦး နှောက်မှေးမှိန်ခြင်းကြောင့်စကားလုံးများနှင့်အသုံးအနှုန်းများကိုအမြဲမေ့သွားသောကြောင့်ကျွန်ုပ်ကောင်းစွာပြောဆိုနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ အင်္ဂလိပ်စကားပြောတာကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတိပြုမိလို့အဲဒီလိုပြောနေတာလည်းမသေချာဘူး။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်စာသားအတိုင်းလူများကိုယခုပင်ကျွန်ုပ်၏မိခင်ဘာသာစကားနှင့်ပြောဆိုနိုင်သည်။ စကားလုံးများကငါ့လျှာကိုလှိမ့်ချလိုက်ပြီးငါထစ်ထစ်မပြောတတ်တော့ပါ။ မယုံ။ တကယ်ပဲ ပြီးတော့လူတွေဟာ nofap ဟာမှော်ဆန်တာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောရဲတဲ့သတ္တိရှိတယ်။
Nofap ငါ့ကို valedictorian ဖန်ဆင်းတော်မူပြီ။
ငါသည်ငါ၏အသားရိုက်နှက်ငါ့အချိန်ဖြုန်းထားရှိမည်ဆိုပါကရိုးရှင်းစွာအထား, ငါကပြုမိပါပြီနိုင်ဘူး။ ဒါဟာမနက်ဖြန်ငါ့စကားဖြစ်ပါသည်, သငျသညျယောက်ျားတွေအကြားဖြစ်ဂုဏ်အသရေဖြစ်၏။ ငါ့ကိုကံယောက်ျားတွေဆန္ဒရှိ!
အဘယ်သူသည် derealization / depersonalization / ဦးနှောက်မြူပျောက်ကင်းအောင်ကုသခဲ့သလဲ
ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းက ဦး နှောက်မြူတွေအဆက်မပြတ်ခံစားခဲ့ရတယ်။ အမှန်ကတော့ကျွန်တော့်ရဲ့နောက်ဆုံးနှစ်အထက်တန်းကျောင်းဆီသို့ယခုအထိလမ်းမလျှောက်နိုင်တော့ပါ။ တစ်ခါတလေတကယ်တော့ဒါက ဦး နှောက်မြူလို့လား၊ တကယ်လားငါလား၊
လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့်အဖြစ်အပျက်များကို ဦး နှောက်မှေးမှိန်သွားသောအခါ၎င်းသည်အလွန်စိတ် ၀ င်စားသည်။ ငါဟာတကယ့်ငါ့ကိုအစစ်အမှန်ဖြစ်တယ်လို့ခံစားခဲ့ရတယ်။ တစ်နေ့တာလောက်ပဲကြာမှာပါ။ မယုံနိုင်လောက်တဲ့စွမ်းအင်ရှိမယ်၊ လူတိုင်းနဲ့ကောင်းကောင်းဆက်သွယ်နိုင်ပြီးရှင်သန်နေတယ်လို့ခံစားရတယ်။ ထိုအခါ ဦး နှောက်မြူကိုထပ်ဝတ်ဆင်နှင့်ဖုတ်ကောင် mode ကိုစတင်လိမ့်မယ်။ ငါဟာတကယ့်လူတစ်ယောက်ရဲ့ပျင်းရိပျံသန်းနေသောမောင်းသူမဲ့လှုံ့ဆော်မှုမရှိတဲ့လှပတဲ့“ ခွံ” ဆီကိုအချိန်အတန်ကြာပြန်သွားနိုင်သည်။
ဒါကြောင့်ကျွန်တော့်ရဲ့ထင်မြင်ချက်စွမ်းရည်မှာ "မှားယွင်းတဲ့" အရာတစ်ခုခုရှိခဲ့ကြောင်းအမြဲတမ်းသိခဲ့ရပြီး၊ ငါခြံစည်းရိုးရဲ့အခြားတစ်ဖက်မှာရှိနေရင်သတိထားမိမှာပါ။ ဦး နှောက်မြူတက်ရှင်းလင်းလိမ့်မယ်အခါ။
မကြာသေးမီက (ယခု ၁၁ ရက်အကြာတွင်) ကျွန်ုပ်သည် fapping နှင့် porn ကိုမကြည့်တော့ပါ။ (ကျွန်ုပ်သည်တစ်နေ့လျှင် ၁ သို့မဟုတ် ၂ ဖြစ်ခဲ့ဖူးသည်) နှင့် ဦး နှောက်မှေးမှိန်သွားပြီဟုသတိပြုမိသည်။ ပိုဆိုးသွားရုံသာမကပျောက်ကွယ်သွားသည်တော့မဟုတ်ပါ။
ငါရှူရှိုက်မိတယ် ငါကလူတွေကိုမြင်, သူတို့မျက်စိ၌ကြည့်ရှုပါ။ ငါဘယ်မှာလဲ၊ ငါဘာလုပ်နေတယ်၊ ​​ဘယ်အချိန်လဲ၊ ငါလာမယ့်နာရီ, ရက်, ရက်သတ္တပတ်များ၌အဘယ်သို့ပြုရမည်ကိုငါသိ၏။ ငါအချိန်အများကြီးပိုအာရုံစိုက်နေဖို့နှင့်ချက်ချင်းအမှုအရာများစွာကိုလုပ်ဖို့လှုံ့ဆော်မှုခံစားရနိုင်ပါတယ်။ ငါခြေလှမ်းကိုလှမ်းသွားပြီးတကယ်ကိုလှည့်ပတ်ကြည့်ပြီးတစ်ကမ္ဘာလုံးကိုကွဲပြားနေသည်။
အရေးအကြီးဆုံးကတော့ဒါဟာငါပဲ။ အစစ်အမှန် ဦး နှောက်မြူ၏သာယာလှပသောဆွဲချခြင်းကြောင့်အမြဲတမ်းမျက်စိကန်းနေသူ။
ငါသွားရမယ့်လမ်းတွေအများကြီးကျန်သေးတယ်။ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုနီးပါး“ အမှောင်ထဲတွင်” နေထိုင်ခြင်းသည်အလေ့အထများနှင့်အချိန်စီမံခန့်ခွဲမှုအရပြောင်းလဲရန်မလွယ်ကူပါ၊ သို့သော်ထိုလူသည်ထိုတွင်ရှိနေပြီး၎င်းကိုလှည့်ပတ်ရန်လှုံ့ဆော်ခံရသည်။
ဒီတော့ဟုတ်ကဲ့၊ ကျနော့်အမြင်တွင်၊ ဦး နှောက်မြူ (သို့မဟုတ်“ လျှော့ချခြင်း”) သည်စွဲလမ်းမှု၊ Fapping သည်ကျွန်ုပ်၏စွဲလမ်းမှု၊ ငါ၏လွတ်မြောက်မှုဖြစ်သော်လည်းဤ“ ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းရူပါရုံ” (သို့) ဦး နှောက်မြူမှုန်များသည်ကျွန်ုပ်၏ ဦး နှောက်ကိုရှင်းလင်းသောအခြေခံများနှင့်ကပ်ပြီးဘဝတွင်အခြားအရေးကြီးသောအရာများကိုစွန့်လွှတ်စေခြင်းအားဖြစ်စေသည်။ ဒါဟာ porn, fapping, အော်ဂဇင်, အခြားဘာမျှချင်တယ်။
အရှည်အတွက်ဝမ်းနည်းပါတယ် ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုရပ်တန့်လိုက်ပါ၊ သင်ဘာလုပ်နေသလဲဆိုတာသင့်သူငယ်ချင်းရင်းကိုပြောပြပါ တံဆိပ် timer ကိုရေတွက်ကြည့်ဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။ “ နိမ့်ဆုံး” ကိုသတ်မှတ်ပါ (ရက်ပေါင်း ၉၀ မလိုအပ်ပါ) သို့သော်သင် fapping မရှိဘဲသင်သွားခဲ့သမျှ“ အရှည်ဆုံး” ဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ပါ။
ရုံ matrix ကိုအတွက်ကဲ့သို့စစ်မှန်သောနေ; သင်အမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်နေသည့်အကျွမ်းတဝင်ဖြစ်သော“ အသိ” ၌တည်နေလိုလျှင်ဖြစ်စေရွေးချယ်သည်သို့မဟုတ်အခြားဆေးလုံးကိုယူပြီးလျှင်သင်အစစ်အမှန်ကိုအပြည့်အဝရယူပါ။ သော့ဖွင့်ခြင်းနှင့်သင်၏အပြည့်အဝအလားအလာအောင်မြင်ရန်နှင့်ပြီးပြည့်စုံသော, ပျော်ရွှင်သောဘဝအသက်ရှင်နိုင်သူ။
တာဝန်ရှိသည့်ရက်ပေါင်း ၉၀ နှင့်ငါဘယ်ကလာမည်နည်း…
၉၁ ရက်၊ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် - ဒါကနည်းနည်းနောက်ကျတယ်ထင်တယ်
နောက်ခံ - ကွာရှင်းထားသောအဖေတစ် ဦး ဖြစ်သည့်အသက် ၃၈ နှစ်ရှိပြီဖြစ်သော porn သည် MO တွင်ကြီးမားသောပြproblemနာမရှိပါ။ MO သည် 38-3x / wk ဖြစ်သည်။ ဒီအပိုင်းကိုဖြတ်ပြီးလဲသွားတယ်၊ ဖတ်ပြီးခုန်လိုက်တယ်။ ငါဟာအမြဲတမ်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံးမတဲ့လူတစ်ယောက်ပါ။ တစ်ခုခုလုပ်ဖို့အကြောင်းပြချက်လိုတယ်။ အကျိုးခံစားခွင့်များ / အတွေ့အကြုံများ / စသည်တို့ကိုဖတ်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်လိုအပ်သောအရာအားလုံးဖြစ်သည်။
အခုငါ့အတွေ့အကြုံတွေ။ အမှန်အတိုင်းပြောရရင်ကျွန်တော်အတွက်တော့တော်တော်လေးလွယ်ကူပါတယ်။ ငါပြောခဲ့သလိုပဲငါဟာတစ်ခုခုလုပ်ဖို့အကြောင်းပြချက်တစ်ခုလိုတယ်၊ ငါလည်းပါ ၀ င်နေတယ်။ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တခြားသူတွေရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုဖတ်ရှုခြင်းဟာအလွန်ကောင်းတဲ့လှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မယ်၊ crap လိုခံစားရတယ်၊ ငါအဲဒီလိုမလိုချင်ဘူး
ငါဒီတစ်လသို့တစ်နှစ်ခန့်လိုက်ဖမ်းနေသည့်အလုပ်သစ်တစ်ခုစတင်ခဲ့ပြီး၊ အရာရာကိုအာရုံစူးစိုက်။ လုပ်ဆောင်ရန်မှာပိုမိုလွယ်ကူကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ အခြားသူများကပြောခဲ့သကဲ့သို့, 'brainfog' မရှိတော့ဘူး၊ ငါဟာပိုပြီးနိုးနိုးကြားကြားရှိမယ်၊ ငါရက်သတ္တပတ် -in ကို testosterone ဟော်မုန်းဆူး, တကယ်ကြောက်မက်ဘွယ်သောခဲ့တယျ!
အဘယ်သို့ငါ 30 နေ့ရက်ကာလ၌ငါ့အသက်ကိုပြောင်းလဲသွားတယ် (နှင့်အဘယ်ကြောင့်သင်သည်လည်းသင့်ပါတယ်)
ငါခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်9လကြာ nofap မှာကြိုးစားနေခြင်းနှင့်ပျက်ကွက်ခဲ့ကြသည်။ သို့သော်လည်းငါသည် ပြု. , ဘယ်တော့မှမတအရာအရှုံးမပေးနဲ့ငါ porn သို့မဟုတ်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေကိုစောင့်ကြည့်ရပ်တန့်နိုင်ပါလိမ့်မည်လမ်းမရှိသော theres သောငါ၏ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြောသည်ရှိရာအမှတ်ရခဲ့သည်။
-i (မတိုင်မီ fapping အတူငါနှိုးထမောခံစားမိလိမ့်မယ်) စတေဲ့အတှကျဝါသနာတူ 6am နေ့စဉ်ခံစားမှုမှာနှိုးထတော့တာပဲ။ အခြားသူကလူတိုင်းတက်နေစဉ်ခက်ခဲတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း 10am မှာအိပ်ရာသှားဖို့ကိုယ့်ကိုကိုယ်အတင်းအကျပ်ဖြစ်ပါတယ်။
ငါ့အတန်းထဲမှာငါ့အာရုံစူးစိုက်မှုသိသိသာသာတိုးပွားလာခဲ့သည်! အလေးအနက်ထားစဉ်းစားရမည့်အချက်မှာ Uni သို့မဟုတ် College တွင်ရှိသော NoFap သည် ဦး နှောက်အတွက်အံ့ဖွယ်ဖြစ်သည်။ ငါအတန်းထဲတွင်အာရုံစိုက်ရန်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအတင်းအကျပ်ခိုင်းစေပြီး“ ဇုန်ခွဲခြားခြင်း” ကိုအဆုံးသတ်ပေးနေဆဲဖြစ်သော်လည်းယခုတွင်ကျွန်ုပ်သည် (၃) နာရီကြာဟောပြောချက်ကိုအာရုံစူးစိုက်နိုင်သည်။
-My စိတ်ကိုဖွင့်ရှင်းလင်းခံစားရနဲ့ကျွန်မအများကြီးပိုဖန်တီးမှုထင်နိုင်ပါတယ်။ မှတ်ဉာဏ်ကိုလည်းအများကြီးလျော့နည်းမေ့လျော့ဝေး, ပိုကောင်း Im ဖြစ်ပါတယ်။
ငါသည်အဘယ်သို့ဖြစ်သလော တစ်ခုခြုံငုံကောင်းစွာမျှမျှတတနဲ့ပျော်ရွှင်တစ်ဦးချင်းစီ။ ငါ့အဆွေခင်ပွန်းအခုရက်ပေါင်းအများကြီးကွဲပြားခြားနားသောပုံပေါ်ကြောင်းငါ့ကိုပြောနှင့်ပြီ။ ကြှနျတေျာ့အိပျပျြောစုံလင်သည်, ငါ့ gyming နှင့်စားအလေ့အထသည်ယခုအခါနိုင်ရန်အတွက်, ငါ့ပညာရှင်များသေချာဘို့ကိုအလွန်တိုးတက်ပြီ, ငါ့လူမှုရေးဘဝကြီးစွာဖြစ်လာသည်။
30 ရက်ပေါင်းနှင့်ငါ့အသက်ကိုငါယခုဖြစ်ကြောင်းကိုအဘယ်သူသည်ရန်စိတ်ဓာတ်, Anti-လူမှုရေး, အနိမ့်ယုံကြည်မှု, ဦးနှောက်-fogged, ထုံတစ်ဦးချင်းစီအနေဖြင့်ပြောင်းလဲခဲ့ပါသည်။ ငါနေဆဲတိုးတက်အောင်နေပါတယ်။ ငါသည်ဤပတ်လည်လျင်မြန်စွာတိုးတက်လာဖို့သင်တို့တွင်အချို့သောအပိုဆောင်းအရာနှင့် NoFap ပြုပါကလှုံ့ဆျောပေးလိမ့်မယ်မျှော်လင့်ပါတယ်။
ငါ 'စူပါအင်အားကြီး' တွေရခဲ့ပြီးဒီစိတ်အခြေအနေကိုအရင်ကငါမြင်ဖူးတယ်။ ကျွန်တော့်မှာတစ်ချိန်လုံး ၁၀ စက္ကန့်လောက်ပဲစူပါပါဝါတွေရှိခဲ့တယ်။
ယခုငါနောက်ဆုံး ၄၈ ရက်သည်ကျွန်ုပ်၏စိတ်အခြေအနေအပေါ်မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်ကြောင်းရှင်းပြနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါ။ ငါ "ငါ့ ဦး နှောက်ဟာမတူညီတဲ့လုပ်ငန်းလည်ပတ်နေတယ်"၊ "ငါကပိုပြီးအဲလ်ဖာအထီးပေါ့"၊ "ငါအရမ်းယုံကြည်စိတ်ချရတယ်" လိုဆက်ပြောနေပေမဲ့လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နာရီလောက်ကဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေကိုငါတွေ့လိုက်ရတယ် တကယ်တော့မတိုင်မီငါကနေ့တိုင်းမြင်သည်။
သန္ဓေတည်ပြီးနောက်ချက်ချင်းပင်ကျွန်ုပ်သည်မယုံနိုင်လောက်အောင်ကြည်လင်သော ဦး ခေါင်း၊ အာရုံစူးစိုက်မှု၊ လှုံ့ဆော်မှုခံရပြီးကမ္ဘာကြီးကိုလုယူရန်အဆင်သင့်ရှိသည်ဟုခံစားမိသည်။ ၁၀ စက္ကန့်ခန့်။ အဲဒီနောက်မှေးမှိန်သွားလိမ့်မယ်၊ ဗီဒီယိုဂိမ်းကစားဖို့၊ တီဗွီကြည့်တာကိုပြန်စဉ်းစားတော့မယ်။
ကောင်းပြီ၊ ၁၀ စက္ကန့်သည်ကျွန်ုပ်ယခုရောက်ရှိနေသောစိတ်အခြေအနေဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ဦး နှောက်၏နောက်ကွယ်၌ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်သောအထွတ်အထိပ်သို့ရောက်နေပြီးနေ့တိုင်းနီးပါးအကြိမ်ပေါင်းများစွာမြင်တွေ့ခဲ့ရသည်။ ယခုငါတသက်လုံးခံစားနေရသောအခြေအနေဖြစ်ကြောင်းယခုငါသဘောပေါက်လာပြီ။ ငါအိပ်ရာမ ၀ င်ခင်အချိန်ထိရှင်းရှင်းလင်းလင်းခေါင်းနှစ်လုံး၊ အာရုံစူးစိုက်ပြီးကမ္ဘာကိုယူရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေသည်။
ကျွန်တော့်အတွက်၊ မီးခလုတ်သည်တနေ့လျှင် ၂၈ ရက်တွင်စတင်လှည့်ပတ်သွားသည်။ အချို့သောအတက်အကျများ မှလွဲ၍၊ ၄၈ ရက်တွင်ယခုကျွန်ုပ်သည်တီးခတ်နေဆဲဖြစ်သည်။ 🙂
မည်သူမဆိုမှတ်ဉာဏ် / အာရုံစူးစိုက်မှုတစ်ခုတိုးသတိထားမိပါသလား?
ဒါကငါသွားလည်ရန်စဉ်းစားနေတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းတွေထဲကတစ်ခုပါ။ နှစ်တွေကြာလာတာနဲ့အမျှကျွန်တော့်ရဲ့မှတ်ဉာဏ်တွေယိုယွင်းလာတာကိုသတိပြုမိပြီး၎င်းရဲ့ fapping ကြောင့်ဖြစ်ရတာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာမသေချာဘူး။ ငါပုံမှန်အားဖြင့်တစ်နေ့လျှင် 2-3 ကြိမ်အကြောင်းကို fap လုပ်ပါ။ မှတ်ဥာဏ်တိုးမြှင့်မှုကိုလူအနည်းငယ်ကသက်သေပြတာကိုငါတွေ့ခဲ့ပေမဲ့၊ အဲဒါကလူတွေရဲ့ယေဘုယျအကျိုးကိုခံစားရသလားဆိုတာငါကြည့်ချင်တယ်
) 1 REPLY
လုံးဝ! ငါအတန်းကာလအတွင်းငါ့အအာရုံစူးစိုက်မှုတစ်ခုတိုးလာသတိပြုမိသည်။ ငါတင်ပြနေတဲ့အကြောင်းအရာကိုစိတ်မ ၀ င်စားရင်တောင်ငါကအပြင်ကိုထွက်မလာဘဲနောက်ကိုလိုက်နိုင်တယ်။
)2REPLY
ကောင်းပြီ၊ ကျွန်ုပ်အထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်၏အရှည်ဆုံးအပိုင်း (၈ ရက်တာလက်တဆုပ်စာအနည်းငယ်) တွင်ကျွန်ုပ်သည်အာရုံစူးစိုက်နိုင်စွမ်းမရှိကြောင်းအထူးသဖြင့်မပြောနိုင်ပါ။ ငါထင်တာကငါဟာပြproblemsနာတွေကိုပိုပြီးတလိုတလားဖြေရှင်းပြီးစိတ်ပျက်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေတွေကိုစိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့ဆန္ဒရှိခဲ့တယ်။ ငါကပိုပါတယ် လက်ဆောင် စိတ်ပိုင်း။
၉၃ ရက်ရှိပြီ။ ထာဝရသွားနိုင်မယ်လို့ငါထင်တယ်။ ငါမှတ်မိနိုင်သမျှကာလပတ်လုံးငါဒီအရာဟာမခံစားရဘူးလို့ထင်တယ်။ ငါ ADHD နှင့်အတူအထက်တန်းကျောင်း 18 အသက်အနှစ်ဖြစ်ကြောင်းကို (ငါမူးယစ်ဆေးဝါးများကိုမယူဘူး) နှင့် Sleep Apnea ။ ငါအိပ်စက်ခြင်းတွေမများဘူး၊ လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်ရင်ငါပင်ပန်းတယ်လို့ခံစားရတဲ့အချိန်တွေကတော်တော်ရှက်တတ်တယ်။ NoFap ကိုရက်ပေါင်း ၉၀ လုပ်ခြင်း၊ နေ့စဉ်နံနက်တိုင်းဗီတာမင်များနှင့်ငါးဆီများကိုသောက်သုံးခြင်းဖြင့်တက်ကြွစွာပါဝင်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်ကိုယ်ကိုများစွာအထောက်အကူပြုသည်။ ကျွန်ုပ်သည်အိမ်စာကိုပိုမိုအာရုံစူးစိုက်နိုင်သည်၊ ဘဝတွင်ပိုမိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေပြီးအခြားအရာများစွာရှိသည်။ ဘဝဟာကောင်းတယ်
reddit / nofap ဖိုင်သို့လင့်ခ် -
ဒီခွဲများရှာဖွေတာမတိုင်မီ ADD ၏ / ADHD များအတွက်ဘယ်သူ့ကိုမှမိစ္ဆာအပြုသဘော?
အဆိုးဆုံးကျောင်းသား + nofap = အကောင်းဆုံးကျောင်းသား
nofap ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ဟာအတန်းထဲမှာအကောင်းဆုံးကျောင်းသားဖြစ်လာတယ်။ အထက်တန်းကျောင်းတွင်အဆိုးဆုံးကျောင်းသားဖြစ်ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်သည်ဗီဒီယိုဂိမ်းကစားခြင်းနှင့်ဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်းများကိုတစ်ညလုံးအိပ်ခဲ့ရသောကြောင့် (စာသင်နေစဉ်ကာလတစ်လျှောက်လုံးအိပ်ပျော်နေသည်။ ) (ကျွန်ုပ်သည်ယခုကောလိပ်တွင်ရှိနေသည်။ ကွန်ပျူတာသိပ္ပံပညာ) nofap ကကျွန်တော့်ကိုအလွန်ဆိုးဝါးတဲ့အမာခံအဖြစ်ပြောင်းလိုက်တယ်။ အဓိကအချက်ကတော့ရေးသားချက်အများစုလိုမျိုးအပြောင်းအလဲမရှိဘူး၊ ဟုတ်တယ်၊ ငါကြုံတွေ့ခဲ့ဖူးတယ်၊ အစပိုင်းမှာတော့ shit ဖြစ်ခဲ့တာ။ ဒါပေမယ့်သိပ်မကြာခင်မှာပဲကောင်းမွန်တဲ့အရာတွေရောက်လာတယ်။ ကျွန်တော့်မှတ်ဉာဏ်ကအရမ်းကိုဆိုးဝါးလာတယ်။ ပင်ကြိုးစားနေ။
ငါအထက်တန်းကျောင်းတက်တုန်းကဆရာကမေးတဲ့အခက်ခဲဆုံးမေးခွန်းကတော့ - ငါတို့နောက်ဆုံးလုပ်ခဲ့တာကဘာလဲ။ ပြန်ဖြေရန်မဖြစ်နိုင်ပါ၊ နောက်ဆုံးအတန်းသို့တက်ခဲ့လျှင်ကျွန်ုပ်ပင်မမှတ်မိပါ။ အခု ?? ကျွန်ုပ်စိတ်ထဲတွင်စီစဉ်သောစာသင်နှစ်၏ပို့ချချက်အားလုံးကိုမှတ်မိသည်။ ၎င်းသည်လိမ်သည်ဟုထင်သော်လည်း၎င်းသည်အမှန်တရားဖြစ်သည်။ ငါက ၁၀ ဆလောက်ပိုပြီးလိမ္မာပါးနပ်ပြီးလေ့လာဆန်းစစ်မှုတွေလုပ်တယ်။ ငါပြောရန်ကြိုးစားနေသည်မှာ nofap သည်တိုးတက်မှုသို့မဟုတ်တိုးတက်မှုမျှသာမဟုတ်ပါ။ Nofap နုပျိုသည်။ PMOing ကိုရပ်လိုက်ရင်မင်းဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုမကြည့်နိုင်တော့ဘူး။
PS: အင်္ဂလိပ်ကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံးဘာသာစကား, မဟုတ်သလိုဒုတိယမဟုတ်ပါဘူး။
အဆိုပါ dopamine အရာ။ သင်သည်အဘယ်သို့ ADHD ရှိပါက?
ဟေ့ယောက်ျားတွေ, ငါတို့ရှိသမျှသည် dopamine အဆိုပါ PMO စွဲနေတဲ့အခန်းကဏ္ဍကြောင်းကိုငါသိ၏။ အကြှနျုပျ၏မေးခွန်းတစ်ခုကိုတဦးတည်း PMO မှဦးဆောင်မယ့်ဖြစ်နိုင်သမျှ dopamine ချို့တဲ့ပြဿနာသို့မဟုတ်လမ်းဆင်း dopamine ပြဿနာများကိုဖန်တီးသော PMO, ပထမဦးဆုံးသို့ရောက်လာသည်ဘာဖြစ်သနည်း
ငါ ADHD ရှိသည်နှင့်အာရုံစိုက်ဖို့တော်တော်ခက်ခဲအချိန်ရှိသည်။ ငါကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာကကျွန်တော့် ဦး နှောက်က dopamine ကိုနိမ့်တယ်လို့ထင်တာကြောင့်စိတ်အေးအေးထားဖို့နဲ့အာရုံစူးစိုက်စေဖို့ကူညီပေးခဲ့တယ်။ သိသာထင်ရှားတဲ့ထို့နောက်သူကကျိန်းသေကျန်းမာမဟုတ်သောအရာ porn နှစ်များမှမြင့်တက်လာခဲ့သည်။ ငါဒါပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင်ငါအလွယ်တကူ porn ကိုစွန့်လွှတ်နိုင်လို့ပါ။ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုစွန့်လွှတ်ခြင်းသည် ပို၍ ခက်ခဲသည်။ ကျွန်ုပ်သည်လက်ရှိတွင် ၃၈ ရက်ရှိပြီး PMO မပါပဲရက်ပေါင်း ၉၀ ကျော်သွားပြီ သို့သျောလညျး, ငါနေဆဲအမျိုးသမီးများအပေါ်တော်တော်လေးစိတ်မဝင်စားငါ့အာရုံစူးစိုက်သောအများကြီးပိုကောင်းမရသေးပါဘူး။ ကျွန်တော့်ရဲ့ခံစားချက်ကပိုပြီးတည်ငြိမ်ပြီးတိုးတက်လာတယ်။
သင်တို့တွင်တစ်စုံတစ်ယောက်သည် ADHD ခံစားရသလား။ ရံဖန်ရံခါကျွန်ုပ်၏စိတ်အေးအေးဆေးဆေးရှိစေမည့်စိတ်ကိုမြှင့်တင်ပေးသည့်ကျွန်ုပ်၏ဆေးများကိုယူပြီးကျွန်ုပ်အာရုံစူးစိုက်နိုင်သည်။ အဲဒါကိုယုံချင်မှယုံမယ်။ ငါလည်းသူတို့အပေါ်မှာမိန်းမတွေအများကြီးပိုပါတယ်။ ဆေးလုံးက“ on” ဖြစ်နေချိန်မှာမိန်းကလေးတချို့နဲ့အမြဲတွေ့တယ်။ ငါ့ ဦး နှောက်မှာရှိတဲ့နောက်ခံဆူညံသံနဲ့ကင်ဆာအားလုံးကိုပိတ်ပြီးငါ့ရှေ့မှာရှိတဲ့အရာကိုအာရုံစိုက်လို့ဖြစ်နိုင်တယ်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေကျွန်ုပ်၏ဆေးဝါးများပြန်လည်ရယူခြင်းသည် NoFap ကိုအထောက်အကူပြုမည်လား၊ ကျွန်ုပ်၏ dopamine တိုးမြှင့်ပေးသောဆေးများကကျွန်ုပ်အား ထပ်မံ၍ dopamine ပြproblemနာကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်မည်လားဟုတွေးမိသည်။ ဒီ ၃၈ ရက်ကြာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော့်ဆေးတွေကိုမသုံးသေးဘူး၊ အောင်မြင်မှုကနည်းနည်းလေးပဲ။ ဒါပေမယ့်ငါဘဝမှာအများကြီးပိုမြင့်ဖျော်ဖြေသင့်တယ်ထင်ပါတယ်။ အကြံအစည်ရှိလား။
ငါ adhd ပါပြီနှင့်2နှစ် adderall ယူခဲ့ပါတယ်။ NoFap ရက်ပေါင်း ၄၀ လောက်မှာငါမခံရပ်နိုင်တော့ပါဘူး။
ငါပိုပြီးကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုအာရုံစိုက်ဖို့လိုအပ်ပေမယ့်နောက်ဆုံးတော့ငါ adderall မပါဘဲကြိုးစားသောအခါငါပိုကောင်းတဲ့ဖျော်ဖြေတက်အဆုံးသတ်ရလိမ့်မည်။ ကျွန်တော့်စာမေးပွဲအဆင့်တွေကမလိမ်ပါဘူး
ငါဒီကောင်နဲ့နေတယ် ငါ 50+ vyvanse အပေါ် 4+ နှစ်ပေါင်းခဲ့တာနဲ့ငါရှေးခယျြမှုအားဖြင့်ကနေချွတ်လာရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာတကယ့်ကိုဆိုးဝါးတဲ့အချိန်ကောင်းပါပဲ။ ဒါပေမယ့်ငါသိပ်အာရုံစိုက်လို့မရဘူး။ တစ်လလောက်ကြာရင် (ဆေးတွေကိုဖြတ်ပြီး ၂ နှစ်အကြာမှာ) ငါအာရုံစူးစိုက်နိုင်စွမ်းနဲ့သိသာထင်ရှားတဲ့ကွဲပြားခြားနားမှုတွေကိုစတင်တွေ့မြင်ခဲ့ပြီးဆေးမရှိဘဲနဲ့ကောင်းကောင်းလုပ်နေတယ်။
ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၆ နှစ် (၁၉၈၀ နှစ်အလယ်ပိုင်း) တွင် ADHD ရောဂါခံစားခဲ့ရသည်။ ကျွန်ုပ်သည် ritalin ဆေးထိုးပြီးနောက်ကျောင်းတွင်အာရုံစူးစိုက်နိုင်ခဲ့သည်။ ကိုယ့်အသက် ၁၂-၁၃ အချိန်မှာ ritalin ကိုစွန့်ပစ်ပြီး CHH တော်တော်များများနဲ့ cHPD ကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့တယ်။ ADHD ရှိသူတိုင်းအတွက်ဒါဖြစ်နိုင်သည်ဟုမည်သည့်နည်းနှင့်မျှကျွန်ုပ်မယူဆပါ။ သင့်ဆရာ ၀ န်နှင့်စကားမပြောဘဲသင့်ဆေးကိုဆေးကြောရန်မအကြံပြုပါ။ ကျွန်ုပ်၏ PMO သည်ကျွန်ုပ်အသက် ၁၁ နှစ်အရွယ်တွင်စတင်ခဲ့ပြီး၊ ဆေးဖြတ်ချိန်တွင်ကျွန်ုပ်၏ PMO ပုံစံပြောင်းလဲမှုကိုသတိမပြုမိခဲ့ပါ။
တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်ကျွန်ုပ်၏ ADHD ကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသည့်နည်းလမ်းဖြစ်သည်ဟုဘယ်သောအခါမျှမတွေ့ရှိခဲ့ပါ။ မင်းရဲ့အကြံဥာဏ်ကတော့မင်းရဲ့ meds တွေပေါ်မှာမင်းဘဝကိုပိုလွယ်ကူစေမယ်ဆိုရင်မင်းရဲ့ meds တွေအပေါ်မှာနေပါ။ ဆေးတွေကိုသောက်တာဟာသင်ဟာအားနည်းတယ်၊ ထပ်မံ၍ dopamine ပြproblemနာကိုဖြစ်စေနိုင်ခြင်းရှိသကဲ့သို့သိပ္ပံပညာသည်ထိုအချက်နှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပါ။ မင်းတစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိလိုက်ရတယ်
ငါ ADHD ရှိပြီး Ritalin ယူပါ။ သင်အလုပ်များသောအခါ fapping ကိုဖြတ်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူသည်။ သို့သော် ADHD လူအတွက်အလုပ်များနေခြင်းသည်တွန်းအားတစ်ခုမှနောက်တစ်ခုသို့ခုန်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ ၈ ပတ်မှ ၉ ပတ်ကြာမှအနားယူပြီးနောက် ၄၂ သို့ငါရောက်သွားတယ်၊ အဲဒါဘယ်လောက်များများကူညီခဲ့တယ်ဆိုတာငါမပြောနိုင်ဘူး။
ကျွန်ုပ်၏အကြံဥာဏ်မှာဆေးများကိုပုံမှန်သောက်ရန်နှင့်“ သင့်အတွက်ဒီနေ့ငါမပျော်တော့ဘူး” ဟုသင့်ကိုယ်သင်ဆုံးဖြတ်ပါ။ ထိုနေ့၌ရွှေ့ပါ။
dota2nub 1 အမှတ်2 နာရီအကြာက
ငါ ADHD ရောဂါရှိခဲ့နှင့် concerta (ရှည်လျားသောသရုပ်ဆောင် ritalin ပုံစံ) - အများဆုံးသောက်သုံးသောခဲ့သည်။ nofap နေ့ ၈ ရက်နေ့မှာမင်းကိုငါမချစ်ဘူး၊ မင်းဆေးလိပ်ဖြတ်လိုက်ပြီ။ နောက်တစ်နေ့တွင်မြန်မြန်ပြန်ပြည့်လာသည့်စွမ်းအင်အနည်းငယ်ကျဆင်းခြင်း မှလွဲ၍ ကျွန်ုပ်ပင်သတိမပြုမိပါ။
အကြှနျုပျကိုလှည့်နိုင်သည်ကိုမည်သည့်အရာပူပြင်းတဲ့မိန်းကလေးတစ်လမ်းပေါ်မှာလမ်းလျှောက်လျှင်ဒါပေမဲ့ဘာမျှမနှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းစရာရှိသောကြောင့်ကိုယ်ပဲသူတို့ကိုလျစ်လျူရှုဖွငျ့ဤသွေးဆောင်မှုနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်ပုံကိုသိပါကအပေါ်နှငျ့သငျပွီးနောကျကွောငျးကိုခံစားမှုသတိရနေဖြင့် 53 ရက်ပေါင်းလုယူခံထိုက်ပေ relapse စိတ်ကျရောဂါခံစားမှု, စိတ်ပျက်ခြင်းနှင့်သင်ပျက်ကွက်စောင့်ရှောက်သောကြောင့်, သငျသညျသတ်သေကျူးလွန်ခြင်းငှါလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်ကြောင်းကို။
ငါမရှက်တော့ဘူးငါမိန်းကလေးတစ်ယောက်နှင့်စကားပြောနိုင်ပြီးသူနှင့်စကားပြောနေချိန်တွင်မျက်လုံးချင်းဆုံနိုင်သည်။ ယခုမှာငါသည်သူတို့နှင့်အတူအလွယ်တကူစကားပြော Stutter နှင့်အတူစကားပြောနိုင်သည်။ ပြီးတော့မင်းကမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုကြိုက်ရင်တကယ့်စိတ်ခံစားမှုကိုခံစားနိုင်တယ်။
ငါသည်ငါ၏သင်္ချာစမ်းသပ်မှုအပေါ် 100% ရတယ်
ငါပထမ ဦး ဆုံး 100% သင်္ချာစမ်းသပ်မှုအစဉ်အမြဲရတယ်! ပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၉၀ ပြည့်သည်။ သို့သော်စာမေးပွဲနှင့်အဆင့်အတန်းကိုမည်သည့်အခါကမှကောင်းကောင်းမစွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ပါ။ ဒါကြောင့်ရလဒ်ကိုအွန်လိုင်းပေါ်မှာတွေ့တဲ့အခါငါအရမ်းပျော်ခဲ့တယ်
အချို့သောအခြေအနေများအတွက်စမ်းသပ်မှုသည် quadratics နှင့် linear equations များသာလျှင်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်လက်ရှိအချိန်တွင်အသက် ၁၆ နှစ်ရှိပြီးအထက်တန်းကျောင်းသားတစ် ဦး ဖြစ်သည်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့် nofap နဲ့အောင်မြင်ခဲ့တာလေးနည်းနည်းလောက်ကိုပြချင်တာပါ။ Hardmode ကိုခဏကြာမှတွေ့ရပြီးရက်ပေါင်း ၉၀ အတွင်းမှာမအောင်မြင်ခဲ့ပါ။ nsfw ကိုတွေ့တဲ့အချိန်တိုင်းမှာ tracker ကိုပုံမှန်ပြန်သတ်မှတ်ပေးတယ်၊ ဒါကြောင့်လက်ရှိအခြေအနေကအရမ်းနည်းနေသေးတယ်။ ငါမှာ porn နဲ့ဘာမှပြhadနာမရှိခဲ့ဘူး၊ ဒါပေမယ့်တစ်ကိုယ်လုံးရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုရပ်တန့်ဖို့ငါကြိုးစားနေတယ်။ ဤ subreddit ၌သင်တို့၏လှုံ့ဆော်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီနေ့ငါ့ဥစ္စာအချို့ကိုမျှဝေရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်
ဒီမှပေးဆောင်တိုးမြှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုကြည့်ဖို့ဝမ်းမြောက်။ နှစ်ပေါင်းများစွာညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုကိုနှစ်ပေါင်းများစွာတိုက်လှန်ခဲ့သည့် ၂၆ နှစ်အရွယ်ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်အနေဖြင့်ဤအကြံဥာဏ်ကိုစမတ်ဖုန်းခေတ်တွင်ကြီးထွားလာနေသည့်ငယ်ရွယ်သောကလေးငယ်များအားဤအကြံပေးချက်ကိုတွန်းအားပေးရန်ကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုခြင်းရဲ့အန္တရာယ်ကိုသိရလို့ကျွန်တော်ရှက်ကြောက်ပြီးအရှက်ရခဲ့တယ်။
ADHD / အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာနှင့်လိင်စွဲလမ်းမှုတို့အကြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဆက်နွယ်မှုများ။ ကျွန်ုပ်တွင်မည်သည့်လက်တွေ့အပြုအမူဆိုင်ရာပုံမှန်မဟုတ်သောအမျိုးအစား (မဆိုလူသားတိုင်း၏ထူးဆန်းသောအခြင်းအရာမှ လွဲ၍) ရှိသည်ဟုမထင်ပါ။ သို့သော်သိသာထင်ရှားသောအာရုံစူးစိုက်မှုမရှိခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းသောအရောင်များကြားတွင်လူမှုရေးအရအလုပ်လုပ်နိုင်ခြင်းကိုသတိပြုမိသည်။ ငါအရာရာတိုင်းကိုထုံထိုင်းနေတယ်၊ ​​ငါ့အတွေ့အကြုံတွေကငါ့ကိုမမှီဘူး၊ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာတင်စားထားတဲ့အအေးမိ၊ ကွန်ကရစ်နံရံတစ်ခုဖြစ်လာတယ်။
အခြားသူတစ် ဦး ၏အလှအပ၊ Methinks အဲဒါငါလျှို့ဝှက်စွာလုပ်ခဲ့တာကိုသတိလစ်မေ့မျောသွားစေတယ်။ ကျွန်ုပ်သည်ဤတာ ၀ န်၌ကြာမြင့်စွာနေရတော့မည်ဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်၏စရိုက်လက္ခဏာပြောင်းလဲသွားသည်ကိုအမှန်တကယ်စတင်ယုံကြည်လာလိမ့်မည်။
ဒါပေမယ့်နောက်တစ်ခါထပ်ထပ်ထပ်မပြောဘဲတစ်လလောက်ကြာလိမ့်မယ်။ ဤသည်ပုံမှန်အားဖြင့်အချို့သောဘာသာရေးလှုံ့ဆော်မှုနှင့်တိုက်ဆိုင်။ သို့မဟုတ်ကဗျာသို့မဟုတ်ဒphilosophနိကဗေဒ၌အလှည့်။ ငါစိတ်မကောင်းစရာနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းနှင့်သူမ၏အကြောင်းကို smutty အတွေးများသို့နောက်ကျောခြင်းမရှိဘဲဆွဲဆောင်မှုအမျိုးသမီးတစ် ဦး (အဆုံးစွန်စမ်းသပ်မှု) ၏ရှေ့တော်၌အချိန်မီလိမ္မာစေနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ချုပ်တည်းမှုကလူတစ်ယောက်ကိုဒီလောက်တောင်အသက်ရှင်စေတယ်။ အခုအချိန်မှာငါရည်းစားရပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့လိင်ဆက်ဆံမှုကိုပြန်စနိုင်ပါပြီ။ ဒါပေမယ့်ငါတို့ကပြိုကွဲသွားလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အသစ်တွေ့ရှိထားတဲ့တိုက်တွန်းချက်ကိုဖြည့်ပေးတဲ့ကွန်ပျူတာကိုပြန်လာပြီးငါ့စိတ်ကိုထပ်ခါထပ်ခါဖျက်ဆီးပစ်လိုက်တယ်။
ငါအမှနျတကယျ nofap ငါ၏အ ADD ၏အာရုံစူးစိုက်မှု / အာရုံရောဂါပျောက်ကင်းအောင်ကုသကြောင်းယုံကြည်
အိုကေလုံးဝပျောက်ကင်းအောင်ကုသနိုင်ခြင်းမရှိသော်လည်းကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်အားပိုမိုအာရုံစူးစိုက်ရန်နှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအာရုံစူးစိုက်မှုကိုအမှန်တကယ်အထောက်အကူပြုခဲ့သည်။ nofap မစတင်မှီကျွန်ုပ်သည်လူမှုရေးဆိုင်ရာစိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့်လူတို့နှင့်စကားစမြည်ပြောဆိုခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့သည့်အခါတိုင်းကျွန်ုပ်သည်စကားမပြောနိုင်လောက်အောင်အာရုံစူးစိုက်။ မရခဲ့ပါ။ ငါအရမ်းအိမ်မှာအများကြီးထိုင်ပြီးသူငယ်ချင်းတွေကငါ့ကိုခေါ်ရင်ငါထွက်သွားမှာမဟုတ်လား အလုပ်မှာကျွန်မမှာပြhadနာတွေရှိခဲ့တယ်။ ကျရှုံးတာကိုအမြဲစိုးရိမ်ခဲ့တယ်၊ ငါတတ်နိုင်ရင်အမြဲတမ်းမူးနေတတ်တယ်၊
ထိုအခါငါ NOFAP ၏ရက်ပေါင်း 130 ၏ STREAK DID: တစ်လသို့မဟုတ်ဒီတော့ကဲ့သို့ငါပြီးနောက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရဖို့စတင်ခဲ့ပြီးငါအသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့! ငါအရမ်းပျော်တယ်၊ ငါအလုပ်မှာတကယ်အောင်မြင်ခဲ့တယ်၊ လူတွေကိုငါပြောတဲ့အခါငါမလှုပ်ရှားတော့ဘူး၊ စကားပြောတိုင်းလိုက်နိုင်တယ်၊ လေ့လာတာကသိပ်မခက်ခဲတော့ဘူး။ ငါအေးဆေးတည်ငြိမ်တယ်။ မိန်းကလေးများကကျွန်ုပ်ကိုများစွာသတိပြုမိသည်။ သူတို့ကကျွန်ုပ်ကိုပိုမိုနှစ်သက်သည် (နေ့ ၁၀၅ မှ ၁၂၀ ကြားရှိမိန်းကလေးစုံတွဲနှင့်လိင်ဆက်ဆံခဲ့သည်! damnn) ။ (လည်း ED မှကုသပေးသည်)
တစ်နေ့ ၁၃၀ ပျက်ကွက် ...... ငါနောက်တဖန် porn ကိုပြန်ကြည့်မိသည်။ ၅ ပတ်ကြာတဲ့အချိန်မှာငါစိတ်ရှုပ်ထွေးလာပြီး၊ ငါအာရုံစူးစိုက်လို့မရဘူး၊ ငါ့ရဲ့လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုကပြန်လာပြီးငါအလုပ်မှာစိတ်လှုပ်ရှားနေတယ်။ ငါပြီးတော့ nofap လုပ်နေတယ်သကဲ့သို့ကောင်းသောလုပ်ဆောင်နိုင်ဘူး ...
အခုတော့နောက်တဖန် nofap အပေါ်နီးပါးတစ်ပါတ်နဲ့ကိုယ့်အရာအားလုံးကိုထပ်အပြုသဘောလှည့်ခံစားရသည်။ PMO dopamine အရာတစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်အ add လွန်း dopamine နဲ့အများကြီးလုပ်ဖို့ရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ nofap ငါ့ကိုသာသက်ရောက်သည်ဘယ်လိုဒီတော့လိုက်တယ်, တကနည်းနည်းယုတ္တိပုံရသည်။ ငါတကယ်လ nofap ပြီးခဲ့သည့်စုံတွဲငါ၏ခရီးအကြောင်းအများကြီးသင်ယူနှင့်ကိုယ့်တစ်ခုလုံးကိုဘဝ nofap လုပ်ဖို့စိတ်ပိုင်းဖြတ်ဖြစ်၏။ ကိုယ်အဘို့ငါဒီလိုလုပ်ဖို့ရန်ရှိသည်
ဦး နှောက်မှေးမှိန်သွားသည့်အထိဆိုးရွားလာသောကြောင့်အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါကိုစောစီးစွာစတင်ခံစားရခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်စိုးရိမ်ခဲ့သည် (ကျွန်ုပ်အသက် ၄၈ နှစ်) ငါ Nofap ကိုစတင်ခဲ့သောအကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာကျွန်ုပ်သည်စောစောအငြိမ်းစားယူရန်လိုအပ်မည်ကိုကြောက်။ တစ်ကိုယ်တည်းမအိုလိုချင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ယခုတွင်ငါသည်အခြားအသီးအသီးအနှစ် 48 မျှော်လင့်တိုင်းရှိသည်။
ဒါကကြီးမားတဲ့ fucking ဖြစ်ပါတယ်။ နှင့်လုံးဝမမျှော်လင့်ဘဲ။
ခွဲဝေမှုအတွေ့အကြုံကိုအတွက်6လအတွင်း
ထို့နောက်ကျွန်ုပ်၏အတန်းများတက်ချိန်နှင့် ၅ လဒီသင်တန်းတက်ချိန်နှင့်အမျှကျွန်တော်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့သည့်အရာများ၏အနည်းဆုံး ၈၀% သောအမြင့်ဆုံးတန်းကိုကျွန်ုပ်ရနိုင်မည်ဟုမထင်မိပါ။ အဲဒါဟာကျွန်တော့်ကိုပိုပြီးစမတ်ကျစေတဲ့၊ ပိုကောင်းအောင်လေ့လာခဲ့တဲ့ nofap မဟုတ်တာကိုသိရင် nofap ကဒီအချက်တွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကိရိယာတွေသာပေးပါတယ်။ ပြီးတော့ကျွန်တော်စတီယာရင်ကိုယူပြီးမာနထောင်လွှားခဲ့ပါတယ်။
ငါနောက်ဆုံးတော့ရက်ပေါင်း 90 ၏ရည်မှန်းချက်ရောက်ရှိ! ထိုရက်ပေါင်း ၉၀ အတွင်းကျွန်ုပ်သည်များစွာအလုပ်များခဲ့သည်၊ သူငယ်ချင်းများနှင့်ယခင်ကထက်မကြာခဏတွေ့ဆုံလေ့ရှိပြီးကျွန်ုပ်နှင့်ကျွန်ုပ်၏ရည်းစားသည် ၅ လအတူတကွနေထိုင်ခဲ့သည် - ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်ဘဝ၏အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်ပေသည်။
ထို ၃ လတာကာလတစ်လျှောက်လုံးကျွန်ုပ်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကထက်မြက်သောစဉ်းစားတွေးခေါ်မှုကိုပြန်လည်ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။ ကျောင်းတွင်ကျွန်ုပ်၏ရလဒ်များသည်ခေါင်မိုးမှတစ်ဆင့်သာယာခြင်း၊ လူတိုင်းက "စူပါပါဝါ" တွေအကြောင်းပြောကြပေမဲ့အဲ့ဒီထဲကတစ်ယောက်မှငါမတွေ့ခဲ့ဖူးဘူး၊ ဒါပေမယ့် ဦး နှောက်မြူကတကယ့်ဖြစ်ရပ်မှန်ပဲ။
ငါသေးပါဘူးယခုဖြစ်ခဲ့သည် ADD ကိုဘယ်လိုသဘောပေါက်ဘယ်တော့မှမ။
ငါနောက်ဆုံးကွဲပြားခြားနားသောအရာတစ်ခုခုသတိပြုမိသည်ရက်ပေါင်းစုံတွဲ။ လူတွေနဲ့စကားမပြောတော့တဲ့အခါငါ spazz မဟုတ်ဘူး။ သူတို့ပြောတာတွေကိုနားထောင်တဲ့အခါပိုပြီးအေးဆေးတည်ငြိမ်တယ်။ သူတို့ကိုငါစကားပြောဖို့အချိန်ပေးတယ်၊ ပြီးတော့ငါအလှည့်ရောက်ရင်အေးဆေးတည်ငြိမ်ပြီးစုဆောင်းထားတဲ့တုံ့ပြန်မှုနဲ့ပြောတယ်။ ငါနဲ့စကားပြောတဲ့အခါလူတွေဟာပိုပြီးအကောင်းမြင်တတ်တယ်ဆိုတာသတိထားမိတယ်။ NoFap ကငါ့ကိုတစ်နေ့ပြီးတစ်နေ့တိုးတက်အောင်လုပ်နေတယ်။
ကျနော်ကျိန်းသေငါ၏အအိုင်ကျူ Nofap ၏စုံတွဲတစ်တွဲရက်အကြာမှာအနည်းငယ်ရမှတ်တိုးမြှင်ဖြစ်ပါတယ်ယုံကြည်ပါတယ်။ အတှေးအ Lucid ဖြစ်ကြောင်း, ရေတိုရေရှည်မှတ်ဉာဏ်သိသိသာသာတိုးတက်လာနေပါတယ်။ ငါပြန်သွားကြသည်အခါတိုင်းကျွန်မမှိုင်း-witted နှောင့်နှေးဖြစ်လာသည်။ ဘယ်နှစ်ယောက်သင်ယောက်ျားတွေ၏ဤကြုံတွေ့ကြသနည်း ဒီတစ်ခါလည်းသင်တို့တွင်အချို့သောငါ့ကိုအွန်လိုင်းမှအိုင်ကျူစမ်းသပ်အတူသီအိုရီကိုစမ်းသပ်ကူညီလိမ့်မယ်။ 🙂
နောက်တဖန် fapping ဘယ်တော့မှ, သမိုင်းများတွင်ဦးနှောက်မြူ၏အဆိုးဆုံးတယ်
ကြောင်း fuck ဆိုတဲ့ငါငါ့အလိုရှိသမျှစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပါဝါဆုံးရှုံးခဲ့ရဖြောင့် relapse ၏2ရက်သတ္တပတ်ကနေဦးနှောက်ကိုမြူတစ်ဦးအထူသည်မိုဃ်းတိမ်တယ်, ဒါကြောင့်တစ်ဦးအမျိုးသမီးတွေအကြောင်းမရှိနှင့်အတူအလွန်ကြီးစွာသောအခွင့်အလမ်းဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။
ငါရက်ပေါင်း 90, ငါအရက်မသောက်သို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးဝါးမှကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံးမခြင်းနှင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတည်ဆောက်ခြင်းအပေါ်ဖြောင့်အာရုံစူးစိုက်တာပေါ့။ ဒီလိုလုပ်ဖို့အဆင်သင့်… .door
နေ့ 30: ဦးနှောက်မရှိတော့တစ်ဦးစဉ်ဆက်မပြတ် porno ရုပ်ရှင်
ရက် ၃၀ ထိပြီးနောက်ကျွန်ုပ်သည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအနာတရဖြစ်အောင်လုပ်နေသရွေ့ကျွန်ုပ်သည်မည်သူမဆို၊ မည်သည့်နေရာ၊ မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုကျွန်ုပ်အလိုရှိသည့်အရာတစ်ခုကိုစိတ်ကူးယဉ်မိနေသည်ကိုသတိပြုမိသည်။ ဒါဟာအမြဲတမ်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကိုငါ့ခေါင်းထဲမှာအမြဲကစားနေသလိုပဲ။
ငါ NoFap ကိုစကတည်းကငါအဲဒီလိုလုပ်ဖို့မတတ်နိုင်ဘူးဆိုတာသိတယ်၊ ဒါမှမဟုတ်ဒါကပြန်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ ထိုအခါဖြစ်ပျက်ခန့်မှန်း? ငါ့စိတ်ကိုစိတ်ကူးယဉ်ဆန်မှုမှဖယ်ထုတ်နိုင်သည့်စွမ်းအားရှိကြောင်းကျွန်ုပ်သိရှိခဲ့သည်။
ဒီဟာကငါ့အတွက်အကြီးမားဆုံးပြောင်းလဲမှုဖြစ်စေခဲ့တယ်လို့ငါထင်တယ်။ ယခုတွင်ငါသည်ငါ့လေ့လာမှုများအတွက်အများကြီးပိုကောင်းသောအရာတို့ကိုလေ့လာသင်ယူနှင့်ကြာကြာအာရုံစူးစိုက်နိုင်ပါတယ်တူသောယခုငါခံစားရတယ်။ အခုတော့မှားယွင်းတဲ့စိတ်ကူးယဉ်မှုတွေထဲကိုထွက်ပြေးဖို့ဆိုတာရွေးချယ်စရာမရှိတော့ဘူး၊ ငါ့ဘဝကိုအမှန်တကယ်အာရုံစိုက်ပြီးရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရှေ့ကိုတိုးဖို့လွတ်လပ်စွာစိတ်ဓာတ်အင်အားတွေပိုများလာတယ်။ ကျွန်ုပ်၏ဟော်မုန်းများအားကျွန်ုပ်၏ ဦး နှောက်ကိုစိတ်ကူးယဉ်နေရာများသို့သယ်ဆောင်သွားသောအခါကျွန်ုပ်သည်ဘဝ၏မည်သည့်နေရာတွင်မျှမရရှိခဲ့ပါ။
ဒါကြောင့်ငါတကယ်သင် PMO ဖြတ်ပြီးနောက်အကြံထမြောက်ရသောအခွင့်ပြုသည်သောအရာသည်သင်၏အတွေးကမ္ဘာကထွက်သန့်ရှင်းရေးသောသီအိုရီရှိသည်။
အခြားသူမည်သူမဆိုဤသတိထားမိ? အသံ / စာဖတ်ခြင်းစွမ်းရည်
အရာရာကိုအသံကျယ်ကျယ်နဲ့ဖတ်နိုင်စွမ်းဟာအများကြီးတိုးတက်လာတာကိုကျွန်တော်သတိပြုမိပြီးအသံနဲ့အသံထွက်လည်းပိုမိုရှင်းလင်းပြီးကျစ်လစ်တယ်။ nofap နှင့်စကားလုံးများပိုမိုလွယ်ကူလာသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်သည် fuzziness (သို့) တိမ်ထူနေသော ဦး နှောက်ကိုခံစားမှုမရှိတော့ပါ။ ငါ၏အလူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုပင်လျော့နည်းသွားသည်။
ငါဆိုဒ်ကိုတွေ့တဲ့လူအများစုလိုခန့်မှန်းနေတယ်၊ ​​ငါတို့ဟာလိင်ဆိုင်ရာကိရိယာတွေကိုအားဖြည့်ဖို့လုပ်နေတာပဲ၊ တခြားအကျိုးကျေးဇူးတွေကိုလည်းမသိခဲ့ဘူး။ ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာမှာငါဟာ 'ကွဲပြားခြားနား' တဲ့၊ မေ့လျော့တတ်တဲ့စိတ်သဘောထားတွေ၊ စိုးရိမ်ပူပန်မှုစတာတွေကိုအမြဲတမ်းခံစားခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုရှင်းပြခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်ငါဟာဒီလိုတာရှည်လျားစွာနေထိုင်ခဲ့ရလို့ဒီဟာငါပဲ။ ထိုအခါငါမြင်ရပါလိမ့်မည်အပြောင်းအလဲများ, ငါ့ကိုကြောက်တယ်နှင့်ငါ့ဘဝကိုဖြုန်းနှင့်ဘယ်တော့မှအစစ်အမှန်ငါ့ကိုမဖြစ်နိုင်သကဲ့သို့ငါ့ကိုကြောက်လန့်
ဒါမှမဟုတ်ဒါကညစ်ညမ်းရုပ်မဟုတ်လား၊ ဒီတော့ PIED ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုကဘယ်လောက်အင်အားကြီးလဲ။ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်နေ့စဉ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုနေ့စဉ်အသုံးပြုခြင်းသည် ဦး နှောက်တွင်ဓာတုဗေဒပြောင်းလဲမှုရှိကြောင်းသံသယရှိစရာမလိုပါ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်ဤကွဲပြားမှုကိုကျွန်ုပ်မမြင်ရပါ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါ့အ reboot ခိုင်မာတဲ့မယ်။ 🙂
ဒီ post မှာမင်းပြောခဲ့တာတွေကငါ့သူငယ်ချင်း။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤစွဲလမ်းမှုနှင့်အတူလိုက်ပါလာသောအခါကျွန်ုပ်တို့သည် 'စွဲလမ်းနေသည့် ဦး နှောက်' ကိုသာလက်အောက်ခံနေခြင်းဖြစ်သည်။ ဒီလောက်ရှည်လျားတဲ့ဘဝပုံစံမျိုးနဲ့နေထိုင်ပြီးသူဘယ်သူလဲဆိုတာစဉ်းစားမိတဲ့အခါငါပြောပြနိုင်လိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်မင်းကမဟုတ်ဘူးလား” သင် pmo နှင့်ပြန်လည်ဝေးဝေးနေစဉ်တွင်၎င်းသည်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်တူသည်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်။ ဤမျှကာလပတ်လုံးသင်တို့အပေါ်မှာထိန်းချုပ်ကြာပါသည်။ မင်းရဲ့ဘဝပုံစံကိုပြောင်းလဲပြီးညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုမကြည့်တော့ရင်မင်းရဲ့စစ်မှန်တဲ့ကိုယ်သင်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုယုံပါ။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အစ်ကို အဲ့ဒီ့အတွက်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ရှုထောင့်တစ်ခုလည်းရှိတယ်၊ ကျွန်မဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲနိုင်တဲ့အရာတွေ။ ငါ့မှာပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ခတ်မှုရှိသည်။ သို့သော်အချို့သောလူများ၊ မိန်းကလေးများနှင့်စကားပြောသောအခါသူမတည်ရှိသည်၊ ကျွန်ုပ်၏လက်ရှိလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အားသူမမသိသောကြောင့်ပြောရမည်။ အချို့သောအစိတ်အပိုင်းများတွင် dopamine များလွန်းခြင်းသည်ထစ်ထစ်ငေါ့ခြင်းဖြစ်စေသည်ဟုပြောကြသည်။ reboot လုပ်နေစဉ်တိုးတက်မှုကိုတွေ့နိုင်မလား။ ဦး နှောက်အတွင်းရှိပြaနာများစွာကိုဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။
ငါ့မှာလောင်းကစားစွဲလမ်းလအနည်းငယ်ရှိခဲ့တယ်၊ ငါထင်ထားတဲ့စွဲလမ်းမှုအားလုံးလိုလိုနှစ်ခုကြားဆက်သွယ်မှုဟာအရမ်းဆင်တူတယ်။ ငါပိုက်ဆံလေးစားမှုဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အချိန်မှာပိုက်ဆံကဘာမှမဟုတ်ဘူး။ အကယ်၍ ငါနိုင်ရင်ငါကပိုလိုချင်တယ်၊ ငါမလေးစားဘူး၊ ပြီးတော့ပိုကြီးတဲ့ buzz ကိုရဖို့အချိန်တိုင်းမှာပိုကုန်ခဲ့ရတယ်။
ငါစွဲလမ်းခဲ့သည်, ငါ့မျက်နှာပြင်များ၏ရှေ့မှောက်၌အွန်လိုင်းလောင်းကစား။ ဆိုင်မှာဒါမှမဟုတ်လောင်းကစားလုပ်ဖို့တွန်းအားကိုကျွန်တော်မရခဲ့ဘူး။ စစ်မှန်တဲ့အမျိုးသမီးတွေနဲ့ပစ်ဇယ်တွေလိုပဲကာစီနိုလောင်းကစားရုံတွေကကျွန်တော့်ကိုမဖွင့်ပေးခဲ့ဘူး။ ဤသည်စွဲ PIED နှင့်အတူအချက်များအများအပြားဝေမျှပေးသည်။ ငါဒီမတိုင်မီမည်သည့်စွဲအမျိုးအစားရှိခဲ့ဘူး။
ဒါပေမယ့်အချိန်တိုအတွင်းမှာပဲကျွန်တော့် ဦး နှောက်ဟာဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအကြာညစ်ညမ်းတဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာတွေလိုကြိုးနဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့အခွင့်အရေးမရခဲ့ဘူး။ (ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အသံ)
ငါ fapping ရပ်တန့်အစဉ်အဆက်ကတည်းကကျွန်မရဲ့မှတ်ဥာဏ်ပိုကောင်းလာပြီကြောင်းသတိပြုမိသည်။ ကျွန်မနာမည်များ, လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်လျော့နည်းကြိုးစားအားထုတ်မှုနှင့်အတူအရပ်တို့ကိုသတိရပါ။
စစ်တုရင် porn သငျ့စိတျထကျ fucks ဘယ်လို verify ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်
ငါ avid စစ်တုရင်ကစားသမားဖြစ်၏။ တအကောင်းဆုံးပေမယ့်ပျမ်းမျှအားဖြင့်ထက်မသာ။ ငါသည်ငါ့ rating 1500-1600 သည်နှင့်ငါကောင်းတစ်ဦး nofap Streak အပေါ်ဖြစ်ကြောင်းကိုအခါ, ငါအဆင်ပြေ 1500-1700 rated ကစားသမားအနိုင်ရဘယ်မှာ chess.com အတွက်အကောင့်တစ်ခုရှိသည်။ ငါ porn မှ masturbate ရသောအခါမည်သို့ပင်ဖြစ်စေ, ထို့နောက်ငါအားလုံးနီးပါးဂိမ်းများကိုဆုံးရှုံး 1300-1400 ratings, တခါတရံတွင်ပင် 1200 ဆင်းသွားပါ။
ငါ nofap ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာငါအဲဒီမဟာဗျူဟာတွေရပြီဆိုတာတောင်မသိဘူး၊ ငါရိုးရိုးလေးပဲ
ငါ porn မှလူရှုပ်သောအခါ, ငါအဲဒီမိုက်မဲသောအမူအကျင့်အတွက်ဆုံးရှုံးသွားပုံကိုနားမလည်ပြီးနောက် ထိုထောင်ချောက်များကိုကျွန်ုပ်မည်သို့မမြင်နိုင်ခဲ့သနည်း။ ကိုယ့်စကားမပြောနိုင်သောရ။
သငျသညျစစ်တုရင်ကစားလျှင်, ရှေ့ဆက်သွားပါကကြိုးစားပါ။ သင်ဟာကစားသမားကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်မဖြစ်အရေးကြီးသည်မဟုတ်ပေမယ့်အနည်းဆုံးတော့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုသိပြီးကောင်းမွန်စွာကစားမယ်ဆိုရင်အရေးမကြီးပါဘူး။ နောက်ပြီး pre-nofap နဲ့ post-nofap အကြားကွဲပြားခြားနားမှုကိုသင်ခြေရာခံနိုင်ပါတယ်။
ဂရိတ် post ကို။ သင်္ချာကိုလေ့လာတဲ့အခါဒီလည်းငါ့ကိုအဖြစ်ပျက်
ငါလမ်းတစ်လျှောက်ရှိတိုင်းကျွန်မရဲ့အတွေးတွေကအရမ်းမြန်ပြီးအရမ်းရှုပ်ထွေးတဲ့အရာတွေကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖြေရှင်းနိူင်တယ်ဆိုတာငါရှာတွေ့ခဲ့တယ်။ ငါပြန်လာတဲ့အခါတိုင်းငါ့ ဦး နှောက်ဟာမြူဆိုင်းလာပြီး၊ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြproblemsနာတွေကိုတောင်အာရုံစူးစိုက်ပြီးလုပ်ဖို့အခက်တွေ့နေတယ်။
OMG ငါဒီ POST ကိုငါယုံကြည်နိုင်သလား။
ငါ Streak ဖြစ်တဲ့အခါငါတကယ်စစ်တုရင်မှာပိုကောင်းလုပ်ပါ။ ဒီလူတွေကိုယုံပါ။ ဒါကအစစ်ပဲ။
ငါအရမ်းရယ်ရတယ်အခုအချိန်မှာငါစိတ်ထဲ - လွင့်။
အဘယ်အရာကိုကိုယ့်ဟာဂိမ်းဖြစ်ကြောင်းကိုနှင့်ဈ FAP သည့်အခါကိုယ့်စိတ်ကိုအပြည့်အဝဂိမ်းအပေါ်အာရုံစူးစိုက်မထားဘူးဂိမ်းထဲမှာ alot ဆုံးရှုံးလည်းငါ့ကိုအဖြစ်ပျက်ကြောင့် Dude ။
ငါအရမ်းသူတို့အားရ။ လည်းငါအပြိုင်အဆိုင်ဂိမ်းကစားခြင်းနှင့် alot faping သောအခါငါများသောအားဖြင့်မတည်မငြိမ်စိတ်ခံစားမှုအရဆုံးရှုံး start ငါလာသောအခါ
yeah ဒီ PMO ကြှနျုပျတို့၏စိတျအပေါ်ရှိပါတယ်ဘာသက်ရောက်မှုပြသထားတယ်။ ငါ CSGO play တဲ့အခါမှာတူညီတဲ့အရာငါသည်ငါ့အသင်းကိုသယ်ဆောင်နှင့်ရူးသွပ်ပြဇာတ်စေပေမယ့်ငါကိုတောင်မှန်မှန်ကန်ကန်မစဉ်းစားနိုင်ပါတယ်ပြန်သွားကြသည်တဲ့အခါ Streak အပေါ်ဖြစ်ကြောင်းကိုသောအခါ, အကြှနျုပျ၏တုံ့ပြန်မှုမြန်နှုန်းကျသွားငါ့အသင်းဖော်များ၏သေးငယ်တဲ့အမှားတွေကိုအားဖြင့်စောင်းရ, ငါ့ကိုဖွစျသှား။
ငါစာသားရုံနဲ့အတူတူပါပဲသတိပြုမိသည်။ ကျွန်မအသက်ငယ်စဉ်အခါစစ်တုရင်အတော်လေးနည်းနည်းကစားရန်အသုံးပြုငါမှာတော်တော်လေးကောင်းသောဖြစ်ခဲ့သည်။ ထိုအခါငါအချိန်ကြာမြင့်စွာကစားရပ်တန့်နှင့်အမှန်တကယ်သမျှမဆိုဝါသနာရှိသည်မဟုတ်ဘဲ, ဒါကြောင့်ပဲ porn နှင့်လူအပေါင်းတို့သည်အချိန်ကိုချွတ် jerking ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါမကြာသေးမီကပြန်ရောက်စစ်တုရင်သို့ရတယ်နဲ့ကျွန်မဖြစ်လာခဲ့ပြီးဘယ်လောက်ဆိုးမိန်းမောတွေဝေခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာငါစာသားရှေ့ဆက်မစဉ်းစားနိုင်နဲ့တူခဲ့ပါတယ်နှင့်မည်သည့်အစီအစဉ်ကိုအောင်၏နိုငျဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာသင်ဖို့အဘယ်သို့ပြုနိုင်သည် porn စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်င်; နှင့်အဆိုးဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ဖြစ်နိုင်ဖွယ်စစ်တုရင်ကဲ့သို့အသေးအဖွဲအရာတစ်ခုခုမှာကိုရပ်တန့်ကြဘူးထက်ပိုသက်ရောက်မှုဖြစ်ပါတယ်။
တူညီတဲ့အရာငါကဗီဒီယိုဂိမ်းကစားသည့်အခါဖြစ်ဖြစ်လာတယ်။ ငါရိုးရှင်းစွာပိုကောင်းပြုကြနှင့်ပိုပြီးတဲ့အခါ Streak အပေါ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါ၏အအူယုံကြည်စိတ်ချ? အဖြစ်ဝေးပထမဦးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး shooters အဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သွားပါ။ ငါဘာကြောင့်နားလည်သဘောပေါက်ခဲ့ပါဘူး။ အားလုံးသင်ယောက်ျားတွေနားထောငျဖို့ကောင်းသောအဖြစ်ကောင်းစွာကြောင့်သတိပြုမိ
ဒီဟာကကိုယ်ခံပညာတွေပါ။ ငါ fap သောအခါငါစီးဆင်းခြင်းနှင့် sparring အတွက်တက် fuck ဆိုတဲ့မရနိုင်ပြီးငါ hit ခံရဖို့ကြောက်တယ်။ ငါ fap dont အခါငါသတ္တိနှင့် dgaf ဖြစ်ကြောင်းကိုရုံငါ့ combo လုပ်သူတို့ကိုအများအပြားဆင်းသက်။
မှန်ပါတယ်။ ဒီနေ့ ၃-၄ ရက်ပတ်လုံးကစားနေတုန်းကျွန်တော်ဟာစိတ်လှုပ်ရှားနေပြီးအားကောင်းတဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ကိုအနိုင်ရခဲ့တယ် (Knok vs Knight, time on lost) ။
ဒါ့အပြင်သူကစဉ်းစားတွေးခေါ်နဲ့ယုတ္တိဗေဒကပါဝင်ပတ်သက်ရသောဘာမှသက်ဆိုင်သည်။ ငါယူငါ့အလိုရှိသမျှစမ်းသပ်မှု၏, ငါ 1 ရက်ပေါင်း Streak ခဲ့သောမတိုင်မီသာ5အတွက်ကောင်းသောအမှုကိုပြု၏။
PS Lumosity app ကိုစမ်းပါ။
ခင်ဗျားကအမှန်ပဲ၊ ငါ့မိတ်ဆွေအမှန်ပဲ၊ မင်းဟာမင်းဟာအတွင်းပိုင်းထဲမှာပိုပြီးစမတ်ကျတယ်၊ ဒါပေမယ့် PMO မှာမင်းရဲ့အတွင်းစိတ်အာဏာကိုအာရုံလွဲစေတယ်။
တစ်ချိန်ကအရမ်းအသည်းအသန်ပြန်ဖြစ်တာကိုသတိရမိတယ်၊ မကြာခင်ကုန်စုံဆိုင်ကိုသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော့် pin pin ကိုလုံးဝမေ့သွားတယ်။ ငါနှစ်ပေါင်းများစွာနီးပါးနေ့စဉ်သုံးပြီးခဲ့ကြရတယ်။ ဒါဟာတုန်လှုပ်ချောက်ချားဖွယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။
ဝိုး။ တူညီတဲ့။ အမှန်တရား။
ဟုတ်ပါတယ်။ Ps4 တွင် bloodborne ဟုခေါ်သောဗီဒီယိုဂိမ်းတစ်ခုရှိသည်။ ကိုယ့်ဒီဂိမ်းကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှာ ၀ ယ်တဲ့အခါငါအဲဒီအချိန်တုန်းက fap alot လုပ်လေ့ရှိတယ်။ ဒီဂိမ်းကအရမ်းကိုခက်ခဲလွန်းလို့ကျွန်တော်ကဆေးလိပ်ဖြတ်လိုက်တယ်။ ငါ 2014 ခုနှစ် nofap အတွက်အတော်လေးတိုးတက်မှုရှိခဲ့ခြင်းနှင့် 2018 ခုနှစ်တွင်ကိုယ့်အမှန်တကယ်ကြောင်းဂိမ်းခံစားခြင်းနှင့် fuck ဆိုတဲ့ကပြီးစီးခဲ့ခဲ့သည်။ ထို့နောက်ငါသည်လည်းစစ်ရဲ့အမာခံအပိုအကြီးအကဲများကိုကိုးကွယ်ခဲ့သည်။ ငါမကြာသေးမီက darksiders 2018 တစ်ခုနောက်တစ်ခုသောအမာခံ ဦး နှောက်ကိုဖျက်ဆီးဂိမ်းပြီးဆုံးခဲ့သည်။ ငါဘယ်လောက်တိုးတက်လာတယ်ဆိုတာသိရလို့အံ့အားသင့်မိတယ်။ သို့သျောလညျးငါ lmao ရိုက်ကူးဂိမ်းမှာပိုမိုဆိုးရွားနေဆဲ ...
ငါ Gwent တစ်မဟာဗျူဟာမြောက်ကဒ်ဂိမ်းကစားသည့်အခါတူညီတဲ့အရာဖြစ်ပျက်ကိုကြည့်ပါ။
ငါစစ်တုရင်နှင့် pes2018 နှင့်အတူအလားတူအတွေ့အကြုံကိုရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါ PMO သောအခါငါအများအားဖြင့်ဆွဲခြင်းသို့မဟုတ် AI အဆန့်ကျင်ရှုံးသည်။ ငါ NoFap အပေါ်ဖြစ်ကြောင်းကိုသည့်အခါသို့သော်လည်းငါသည်တစ်ခါတစ်ရံဥသုံ, များသောအားဖြင့်အနိုင်ရဖို့ပိုပြီးခက်ခဲနေသောပင်ပွဲအနိုင်ရတက်အဆုံးသတ်။
ဒါကြောင့်စစ်မှန်တဲ့ငါသည်လည်းအလုပ်တွေအများကြီးဒီသတိပြုမိ။ ငါ Streak အပေါ်ဖြစ်ကြောင်းကိုသောအခါငါသိပ်ပိုပြီးပြီးပြီ get နှင့်လည်း ပို. ခက်ခဲတာဝန်များကိုဖြည့်စွက်ပေးနိုင်သည်။
ငါသည်ဤအတူသဘောတူ! ငါမဟာဗျူဟာမြောက်စဉ်းစားတွေးခေါ်လုပ်ကိုင်ရသောအခါဒီအဖြစ်ပျက်ခဲ့ပြီးပြီငါ incapacitated ဖြစ်လာစေရန်နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဟန်ချက်ငါ့ယုတ္တိဗေဒချွတ် wayyyyy ဖြစ်ပါတယ်တူသောကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
ငါ့အဘို့ဤကဲ့သို့သော post မဟာဗျူဟာကျကျစဉ်းစားနဲ့အလိုလိုသိဖြစ်ခြင်းငါပွုအလုပ်အလွန်အရေးကြီးလှသည်နဲ့ကျွန်မကိုယ့်ကိုကိုယ်အားကောင်းလာပြီနည်းငါ့ကိုအာရုံနှင့်လမ်းကြောင်းငါ့ကိုပယ်ပစ်ရန်အသုံးပြုကြောင်းအမှုအရာအားဖြင့်နှောင့်အယှက်ခံစားရဘာလို့လဲဆိုတော့စူပါအထောက်အကူဖြစ်စေဖြစ်ကြသည်။
chess.com အပေါ် nighthoundd: စစ်မှန်တဲ့ Hacking ကိုဈ2ကြိမ်စစ်တုရင်ငါ့ကို add play ချင်သူတစ်ဦး day..currently 1000 rating ကျည်ဆံစစ်တုရင်, FAP အခါ, အာရုံစူးစိုက်မှုကို span နှောင့်နှေးကျော်လွန်ဖြစ်ပါတယ်။
လုံးဝဟုတ်မှန်။ ကျွန်မစာမေးပွဲနှင့်ဆည်းပူးနေဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့်အတူအလားတူအတွေ့အကြုံများရှိခဲ့သညျ။ ထိုအခါငါနေဆဲ fapped နှင့်ငါ့ဘဝပျက်ပြီ။ နောက်တဖန်မ။
90days ထက် သာ. ချမ်းသာ fapping ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ ကြောင်းပုံမှန်လား?
ငါသီချင်းနားထောင်တဲ့အခါမှာကျွန်မရဲ့သက်ရောက်မှုကိုကြည့်ပါ။ ဒါဟာအဖြစ်ထင်ရှားစွာတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ထပြီးနဲ့ကျွန်မ nofap အပေါ်င့်သည့်အခါကဲ့သို့ကောင်းသောအသံမပေးပါဘူး။
ငါဖီဖာ, PC မှာအများအားဖြင့် Manager ကို mode ကိုကစား။
ကိုယ့် Nofap အပေါ်ဖြစ်ကြောင်းကိုအခါ, ကောင်းစွာ, ငါ့မဟာဗျူဟာများအံ့သြဖွယ်ဖြစ်ကြပြီးကိုယ့်ကိုအလွယ်တကူမယ့်ပွဲစဉ်အတွက်ပြဇာတ်ပြောင်းလဲနေတဲ့ဂိမ်းလုပ်ဖို့ဘယ်လိုထွက်တွက်ဆ!
လာသောအခါ im fapping့shit တူသော play, စိတ်ပျက်ရခြေဆွံ့သောသူကိုအမှား alot ပြုပါ!
စိတ်ဝင်စားစရာ! ငါ coding အတူတူပါပဲသတိထားမိ။ ကျွန်တော်ဟာဆော့ဖ်ဝဲရေးသူတစ်ယောက်ပါ။ ကျွန်တော် nofap ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဟာနောက်ထပ်ဉာဏ်ရည်နှင့်ပြsolvingနာဖြေရှင်းရေးစွမ်းရည်အချို့ရှိတယ်လို့ခံစားရပါတယ်။
ခံစားချက်ကိုငါသိ၏။ အလုပ်နှင့်ဂိမ်းများကနေနှစ်ဦးစလုံး (ကဲ့သို့အဆင့် 4-5 အဆင့်မှာကစား DotA)
ငါကောင်းတဲ့ Streak ရှိတဲ့အခါငါဒီမှာ rolage သွားပေမယ့်ငါငါ့အ Streak ဆုံးရှုံးတဲ့အခါမှာငါ dumbest အမှားတွေလုပ်ပါ။ ငါဂိမ်းထဲမှာကိုယ့်ပိုပြီးအေးဆေးတည်ငြိမ်ပေါ့ပြောပြောနှုန်းနည်းဗျူဟာကိုမြင်ရပါဘူး။ chess.com မှာအကောင့်တစ်ခုရှိရင်ငါတို့တစ်ချိန်ချိန်ကစားသင့်တယ်။
ဘောလုံးနှင့်ငါ့ကိုဖွစျသှား။ ဒါကြောင့်ပဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာပါပဲဒါပေမယ့်ကိုယ်ကစမ်းသပ်ဖို့ဆန္ဒရှိဘူးလျှင် Idk ။
တူညီတဲ့ကိုယ့်တစ်ဦး Streak ပေါ်သည့်အခါ im ဈပိုကောင်းအသိပေးစာ play ဒဏ္ဍာရီများ၏လိဂ်ကစားသည့်အခါ။
NoFap ကိုစကတည်းကတက္ကသိုလ်မှာငါ့ရဲ့အတန်းတွေတဖြည်းဖြည်းချင်းယိမ်းယိုင်လာတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်သည်အခြားဘဝအပြောင်းအလဲများကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်သည်ဖတ်စာအုပ်ဖတ်ရန်နှင့်အာရုံပျံ့လွင့်စရာမလိုဘဲမှတ်စုများကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ရေးရန်အမှန်တကယ်ထိုင်နိုင်ပါသည်။
သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။ ဤသည်ကိုလည်းစစ်တုရင်နှင့်ရှုပ်ထွေးသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်စဉ်များလိုအပ်နှင့်တိုင်းတာကြောင်းအခြားစာသားဘာမှနှင့်အတူတွေ့ကြုံတတ်၏။ ငါစစ်တုရင်, programming, သင်္ချာ, ယုတ္တိဗေဒမှာပိုမိုဆိုးရွားဖြစ်လာ, ငါ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဏ္ဍာရေးလုပ်နေတာ, ဒါမှမဟုတ်ကြော်ငြာမဟာဗျူဟာအကောင်အထည်ဖော်။
ငါ Streak ၌ရှိနေစဉ်, ငါသည်ငါ့ Uni စာမေးပွဲတွင်ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်သတိပြုမိတယ်။
သင့်ရဲ့ post ကိုများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်! ဤသူသည်ငါသင်္ချာလုပ်နေတာပေါ့, တကယ်စစျမှနျသောဖြစ်ပြီး, ပြဿနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်ငါ့အစွမ်းအမယုံနိုင်လောက်အောင်များပြား .. သင့်ရဲ့စိတ်ကိုတချို့အတုအမှုအရာနှင့် ပတ်သက်. ကူးယဉျထက်တခြားအရာတစ်ခုခုလုပ်ဖို့, စဉ်းစားရန်ကိုပိုမို '' အာကာသ '' get ..
ဖဲချပ်နှင့်အတူအကြှနျုပျအဘို့အတူတူ, ရလဒ်များကိုဒါအများကြီးပိုကောင်းတဲ့ Streak အပေါ်ဖြစ်ကြသည်။ ဒါပေမယ့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး FAP နှင့်ရှုံးနိမ့ Correlate ။ FAP, ဆုံးရှုံး, ဝမ်းနည်းရ။
ငါလုပ်သည့်အခါငါတန်ပြန်သပိတ်မှာ shit မိပါတယ်။ ကျွန်ုပ်၏တုံ့ပြန်မှုအချိန်မှာအမှိုက်ပုံးဖြစ်သည်။
ငါ Semi-pro လိုမျိုးကစားသမားတစ်ယောက်ပါ။ NoFap ကောင်းကောင်းကစားနေစဉ်ကျွန်တော်၏စက်စွမ်းရည်သည်တိုးတက်လာခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်၏ယေဘုယျအသိပညာနှင့်လျင်မြန်စွာတွေးခေါ်မှု / တုံ့ပြန်မှုများကိုသတိပြုမိလိုက်သည်။
ငါကောင်းတဲ့ nofap Streak ကိုရောက်နေပြီဆိုရင်၊ ငါ့သူငယ်ချင်းတွေကငါနဲ့အတူ Super Smash Bros ကိုမကစားကြဘူး။ ငါစိတ်ရှုပ်နေတဲ့အချိန်မှာငါ့ smash bros game ကတော်တော်လေးကိုခက်ပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့်ရှောင်ရှားရန်နှင့်တန်ပြန်ရန်လွယ်ကူသောအမှန်တကယ်စကားမပြောနိုင်သောအရာများမှကျွန်ုပ်ရှုံးသည်။ တော်တော်အေးမြပစ္စည်း!
ကိုယ့်ကိုလည်းသတိပြုမိပေမယ့်ကွန်ပျူတာကိုဆန့်ကျင်။ ငါ nofap Streak ဖြစ်တဲ့အခါငါဟာနည်းနည်းနဲ့ကွန်ပျူတာကိုမြင့်မားတဲ့အဆင့်မှာထိုးနိုင်ပြီးပုံမှန်အားဖြင့် pmo မှာငါကအောက်ပိုင်းအဆင့်ကိုရတယ်။
yeF ငါ NoFap ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာလေ့ကျင့်ခဲ့ပြီးဒီအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာကြုံတွေ့ခဲ့ဖူးတယ်။
ငါကျိန်ဆို, လူအများစုကမကောင်းသော fapping & porn သိပ္ပံနည်းကျမှတဆင့်ဘယ်လောက်သက်သေပြကြသည်မဟုတ်တစ်ခုတည်းသောအကြောင်းပြချက်ကြောင့်ဖြစ်သည် လိင်ရောင်းချ, ချမ်းသာကြွယ်ဝသူများသည်ညစ်ညမ်းမှုနှင့်ညစ်ညမ်းမှုများအားလုံးကိုထိန်းချုပ်ထားသည်။ အခြားပညာရှိဟောပြောခြင်းမှငွေရှာစရာမလိုပါ။ စာသားအတိုင်းအဘယ်သူမျှမ fapping ကျွန်တော်တို့ကိုအန္တရာယ်ရှိသမျှသောလမ်းများအဘို့သုတေသနရန်ပုံငွေချင်တယ်, ဒါ့အပြင်သူတို့ရဲ့ဖယ်ရှားပစ်သောကြောင့်, ထုလည်းမလိုချင်ကြဘူး စှဲမွဲမှု.
၎င်း၏င်း၏အန္တရာယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မူးယစ်ဆေးဆေးလိပ်သောက်သို့မဟုတ်လုပ်ပေးဘယ်တော့မှစွဲလူတွေကိုပြောပြလိုပဲ။ ဤလူများသည်သူတို့ပြီးသားထိုသို့ပြုမှသူတို့ရဲ့စိတ်ကိုဖွင့်ကိုဖန်ဆင်းကတည်းကဒါသူတို့ကိုင်း၏ဆိုးရွားသက်သေသုတေသနမှဦးဆောင်ဘာမျှမပြုမည်သင်တို့အပေါ်မှာပယ်သွားနှင့်အတောမသတ်ကြောင့်တရားမျှတလိမ့်မယ်။ ငါ NoFap အပေါ်တောင်မှပိုဆိုးခံစားရတယ်
nofap နှင့်ထောက်လှမ်းရေး / သတင်းအချက်အလက် retention ကိုအကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားဖို့အတွေး
ဒါက fap (သို့) ညစ်ညမ်းမှုမရှိဘူးဆိုတာမသေချာပေမယ့်ကျောင်းမှာအများကြီးပိုကောင်းအောင်လုပ်နေတယ်။ ပထမဆုံး A ကိုကြာမြင့်စွာကတည်းကပဲဖန်တီးနိုင်ခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်သည်အကြောင်းအရာကိုပိုမိုလေ့လာသင်ယူပြီးနားလည်သည်ဟုခံစားမိသည်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အတွေးတစ်ခုပဲရှိပါသေးတယ်။ တစ်ယောက်ယောက်ကသူတို့ရဲ့ကျောင်းအလုပ်တွေတိုးတက်လာတာကိုသတိထားမိမယ်ဆိုရင်သိချင်စိတ်ဖြစ်သွားတယ်။
Edit - ဒါ့အပြင် 911 ၀ န်ဆောင်မှုအတွက် EMT-Intermediate အဖြစ်အလုပ်လုပ်နေတုန်းမှာစာမေးပွဲမှာကျွန်တော်အဆင်ပြေတဲ့တစ်နေ့တည်းမှာပဲစမ်းသပ်ဖို့အတွက်ဖုန်းခေါ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ အမှုအရာအတူတူလာရန်စတင်နေကြသည်
အဟောင်းကိုယောက်ျားတွေ၏တဦးတည်းအနေဖြင့် 93 နေ့အစီရင်ခံစာ! တကယ်အလုပ်ရှုပ်ခဲ့ရခြင်းနှင့် 90 ရက်ပေါင်းလွဲချော်!
ငါ့အတွက်တကယ့်စူပါပါဝါကရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်မှာ ဦး နှောက်မမြဲပါဘူး ငါမနက်တိုင်းမနက် ၆ နာရီမှာအိမ်မှာနေတယ်။ (အိမ်ကနေထွက်မထွက်ခင် ၁၀ မိနစ်လောက်မှာ) ကျိုးကြောင်းဆီလျော်တဲ့အချိန်မှာအိပ်ရာဝင်ပြီးသူတို့အားလုံးရဲ့အကောင်းဆုံးစူပါပါဝါ - ငါပျော်တယ်။ အမှန်ပဲပျော်ရွှင်။
Moodswings အခုပျော်နေတယ်၊ ​​ဒါပေမယ့်နေ့ ၅၀-၇၀ လောက်မှာငါစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်၊ တစ်မိနစ်မှာမိုးတိမ်အောက်မှာခံစားခဲ့ရပြီးနောက်တစ်နေ့ကိုစိတ်လှုပ်ရှားခဲ့တယ်။ ဒါဟာကိုင်တွယ်ရန်ခက်ခဲခဲ့ပါတယ်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ညစ်ညမ်းသောအဆိပ်အတောက်ဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်မြင်မိသည်။
သင်စိတ်အပြောင်းအလဲများကိုဖြတ်သန်းသွားလျှင်၎င်းသည်ခက်ခဲသည်၊ သို့သော်ဖြတ်သန်းသွားသည်။ ပြီးသွားပြီဆိုတာသိတဲ့အခါသက်သာသွားတယ်။
ပညာရှိရှိအလုပ်လုပ်ပါ (ပြီးခဲ့သည့်ဖော်ပြချက်နှင့်မတူညီသောသူဌေး) ကျွန်ုပ်၏သူဌေးကလွန်ခဲ့သော2ပတ်ကသူသည်အမှန်တကယ်ပြောင်းလဲမှုကိုသတိပြုမိသည်ဟုပြောခဲ့သည်။ သူကငါဟာပျင်းရိတယ်လို့ထင်ခဲ့ပေမဲ့ငါ့ကစားပွဲကိုမြှင့်တင်ခဲ့ပြီးအရာရာဟာအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်အောင်မြင်ခဲ့တယ်။ ၎င်းသည်သေးငယ်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခု ဖြစ်၍ သူဌေးက၎င်းကိုလုပ်ကိုင်ရန်စိတ်မ ၀ င်စားသောသူမရှိသည်။ ပြီးခဲ့တဲ့ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲကျွန်တော်ဟာသူအနားယူချင်တဲ့အချိန် (၅) နှစ်အတွင်းမှာကျွန်တော့်ကိုစီးပွားရေး ၀ ယ်ဖို့အကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ ၎င်းသည်အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာအကျိုးသက်ရောက်သောစီးပွားရေးမဟုတ်သော်လည်း ၆ ခု၏ထိပ်ဆုံးတစ်ဝက်တွင်လည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဤအရာကိုကျွန်ုပ်၏ ဦး နှောက်သည်ညစ်ညမ်းမှုနှင့်မြူမှုန်သွားခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ ငါကောင်းကောင်းလုပ်ဖို့လှုံ့ဆော်ခံရတယ်
ငါသည်လည်းပြီးခဲ့သည့်တနင်္ဂနွေစတင်ခဲ့သောတနင်္ဂနွေသေးငယ်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတင်ခဲ့ပါတယ်။ စနေ၊ တနင်္ဂနွေနေ့တွေမှာဒေါ်လာတစ်ရာလောက်ကိုကျွန်တော်စတင်ခဲ့တာပါ။ ငါကတွန်းထုတ်မယ်ဆိုရင် ၂ ရက်အတွင်းဒေါ်လာ ၁၀၀၀ လောက်ယူဆောင်လာနိုင်တယ်။ ကျွန်ုပ်သည်မိသားစုနှင့်အတူကျွန်ုပ်၏အချိန်ကိုချစ်သောကြောင့်၎င်းကိုမတွန်းချင်ပါ။ 😉သို့သော်ယခုအချိန်သည်ကျွန်ုပ်သည် porn ကိုကြည့်ရှုရန်အချိန်ပင်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဤအသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။
သငျသညျ nofap သင့်ကျောင်းအလုပ်သို့မဟုတ်ပညာရပ်ဆိုင်ရာလေ့လာမှုတွေထိခိုက်လျက်ရှိသည်ထင်ပါသလား?
ငါ့ပညာသင်နှစ်စွမ်းဆောင်ရည်ထိခိုက်လျက်ရှိသည် Yest အများစုသိသိသာသာသက်ရောက်မှုအထူးသဖြင့်သင်္ချာစာသင်ခန်းထဲမှာငါကနေရသောအာရုံနှင့်ပြဌာန်းခွင့်ဖြစ်ပါတယ်။ NoFap လုပ်နေပေမယ့်ငါဒီထက်ကိုပိတ်ဆို့တားဆီးစေနှင့်လက်မှာပြဿနာအပေါ်အာရုံစူးစိုက်လေ့များသောအားဖြင့်ကျွန်မမကြာသေးခင်ကပျင်းရိ, ဈ unenergetic ခံစားရပြန်ရောက်သွားတယ်ခဲ့ကြပြီးမည်သည့်အလုပ်ကိုလုပ်ဖို့နှောင့်အယှက်ခံရမရှိမဖြစ်ပါလျှင်အနေဖြင့်, သူကပျင်းစရာများနှင့်အသုံးမ findind ။
အခြားနည်းလမ်းတစ်ခုမှာ NoFap သည်ကျွန်ုပ်ကိုအာရုံစူးစိုက်ရန်နှင့်အာရုံစူးစိုက်ရန်ကူညီနေစဉ်၊ များသောအားဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်အိမ်တွင်တာ ၀ န်တစ်ခုသို့မဟုတ်စာစီစာကုံးတစ်ခုပြုလုပ်ရန်ကြိုးစားနေစဉ်တွင်တည်ဆောက်ထားသည့် testosterone ဟော်မုန်းမှကျွန်ုပ်၏အလိုဆန္ဒများကိုထိန်းချုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ ငါအိမ်မှာရှိနေစဉ်၊ ပျင်းနေပြီးကွန်ပျူတာပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်၏တွန်းအားများကိုထိန်းချုပ်ရန်ကြိုးစားရသည်မှာအချိန်များစွာရှိသည်။
ကိုယ်ပိုင်စည်းကမ်းလွယ်ကူသောမလာပါဘူးကြောင့်ကြှနျုပျတို့အားလုံး acheive ဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်, စကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးနှောက် Reboot လုပ်သွားနှင့် rewired ကျနော်တို့ပိုမိုလွယ်ကူ PMO မှရှောင်ကြဉ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်အလိုကားအဘယ်သို့သောကွောငျ့အဆုံး၌ကားအဲဒါကိုတန်ဖိုးရှိဖြစ်လိမ့်မည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ အဲဒါကကျွန်မရဲ့ပညာရေးစွမ်းဆောင်ရည်နဲ့အလုပ်စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်၏ပညာသင်ကြားမှုအစတွင်အာရုံစူးစိုက်နိုင်ခဲ့သည်၊ ကျွန်ုပ်သည်အလွန်စိတ်အားထက်သန်ကာကျွန်ုပ်၏လေ့လာမှုများကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျပါဝင်ခဲ့သည်။ ငါရရှိသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများ (ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော band band အမြန်နှုန်း) များလေ၊ ကျွန်ုပ်၏ GPA သည်သိသိသာသာလျော့နည်းသွားသည်။ သို့သော် (၃.၇-၃.၈ ကျောင်းသား) မဟုတ်သော်လည်းကျွန်ုပ်သည် ၃.၅ ဖြင့်ထွက်ခွာခဲ့သည်။ ငါအမှုအရာမှတ်မိနိုင်ခြင်းနှင့်ပစ္စည်း၏မြင့်မားသော "ရုပ်ပုံ" ရှိသည်။ အချိန်ကာလအတန်ကြာအာရုံစူးစိုက်နိုင်ဖို့ကျွန်မရဲ့စွမ်းရည်လျော့နည်းသွားတယ်။ ငါအထီးကျန်ဖြစ်လာပြီးပြwhichနာကိုပိုဆိုးစေတယ် အထီးကျန်မှုကြောင့်ငါစိတ်ဓာတ်ကျခဲ့တယ်။
ဒီအရာအားလုံးရဲ့ထိပ်ဆုံးမှာငါမှာ HOCD ရှိခဲ့တယ်။ ငါလိင်တူချစ်သူလို့ထင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကုထုံးကိုတောင်ငါတောင်သွားခဲ့တယ်။ ငါခက်ခဲတဲ့အချိန်ရှိခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့၊ ရက်သတ္တပတ် ၂ ပတ်မှ ၂ ပတ်အကြာမှာငါ porn မကြည့်ဘူးလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြောခဲ့တယ်။ ငါဟာစာသင်ခန်းထဲမှာပိုပြီးပါဝင်ခွင့်ရတယ်၊ မှတ်ဉာဏ်ပိုကောင်းတယ်၊ အာရုံစိုက်ခံရတယ်၊ လူမှုရေးပိုပိုပြီးပျော်ရွှင်လာတယ်။ HOCD ပြန်ရောက်လာတယ်၊ ငါအဲဒီထဲကိုပြန်ဝင်သွားတယ်။
အကြှနျုပျ၏ဆရာငါ့အာရုံအာရုံမရှိခြင်းအပေါ်ငါ့ကိုထွက်တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ကျွန်တော့်ခေါင်းကိုတည့်အောင်တခါထိုင်ခဲ့ရတယ် အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကအရာရာကိုမလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူး။ နောက်ပိုင်း, ငါပထမ ဦး ဆုံးအလုပ်မှာ, ငါ "မေ့လျော့" လှုံ့ဆျောမနှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်မပျော်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ အကြှနျုပျ၏သူဌေးနှင့်ကြီးကြပ်ရေးမှူးမှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ ငါကအကြောင်းဒါတန်ဖိုးမရှိခံစားရတယ်။
ငါ PMO ကနေဝေးစတင်အဖြစ်, ငါ့စွမ်းဆောင်ရည်သိသိသာသာတိုးတက်လာခဲ့သည်။ ကျွန်တော့်ရဲ့အကြီးအကဲတွေကကျွန်တော့်ရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုချီးမွမ်းကြလိမ့်မယ်၊ ငါတကယ်အလုပ်ကိုစတင်ဂရုစိုက်ခဲ့တယ်။ မကြာသေးမီကကျွန်ုပ်၏လတ်တလောအနေအထား (ကျွန်ုပ်လွန်ခဲ့သောလအနည်းငယ်ကစတင်ခဲ့သော) အလုပ်များကိုကျွန်ုပ်အားပေးခဲ့သည်။ တစ်ခါတစ်လေမှာညွှန်ကြားချက်တွေဘာကိုနှစ်ခါမေးရတယ်။ ပေးထားသောလုပ်ငန်းတစ်ခုတွင်ကျွန်ုပ်အလုပ်လုပ်နေသည့်မှတ်ဉာဏ်သည်ကျွန်ုပ်၏လှုံ့ဆော်မှုကိုခံခဲ့ရသည်။ PMO မရှိသည့် ၂ ပတ်ခန့် (ထိုအချက်သည်“ MO” မဟုတ်ပါ) ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်၏စွမ်းဆောင်ရည်သည်အလွန်တိုးများလာပြီးကျွန်ုပ်၏အလုပ်ရှင်သည်ကျွန်ုပ်၏လုပ်ငန်းအရည်အသွေးကိုအားရကျေနပ်မိသည်။ ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကငါကောင်းသောဖြစ်လိုသောကြောင့်ငါအားလုံး nighter ဆွဲထုတ်။ ကျွန်တော့်သူဌေးကမှတ်ချက်ချတယ်။ ငါအခုပိုကြီးတဲ့စီမံကိန်းအပေါ်သွားလိမ့်မယ်။
စဉ်းစားဆင်ခြင်နိုင်စွမ်းနှင့်ဆင်ခြင်တုံတရားမရှိခြင်းသည် PMO အတွင်း၌များစွာတိုးတက်သည်။ အကြှနျုပျ၏လှုံ့ဆျောမှုသာ။ ကောင်း၏, ငါပိုပြီးယုံကြည်မှုရှိဖို့စတင်။ တနည်းကား, ငါ MO ကိုမူးရူးပြီးနောက်။ ငါ P သို့မဟုတ်မည်သည့်မူကွဲယခုအချို့သောအချိန်စောင့်ကြည့်ကြပြီမဟုတ်။
ကျွနု်ပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်သည်အချိန်ပိုပေးရန်မလိုပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်အလုပ်ကိုလုပ်ရန်ပိုမိုလိုလားပါသည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်အိမ်စာများစွာရရှိခဲ့လျှင်“ ကောင်းပြီ၊ ငါအခုလုပ်မယ်၊ နေ့လည်စာမှာလုပ်မယ်၊ ငါလုပ်မှာမဟုတ်ဘူး” လို့ငါထင်လိမ့်မယ်။
ဟုတ်ကဲ့၊ အဲဒါဟာမှတ်ဥာဏ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ငါတိုတောင်းသောသက်တမ်းမှတ်ဉာဏ်ပြန်လည်သိမ်းဆည်းနှင့်အတူခက်ခဲအချိန်ရှိသည်။ ငါနေ့စဉ်ပေါင်းပင်ဆေးလိပ်သောက်သည့်အခါနှင့်ဆင်တူသည်။
ငါအသက် ၁၈ နှစ်ရှိပြီ။ Nofap မတိုင်မီကကျွန်ုပ်သည်အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်တစ်ကြိမ် PMOing ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါ ၁၄ နှစ်အရွယ်မှာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုစကြည့်ခဲ့တယ်။ ငါပုံမှန် porn နှင့်အတူရောငျ့ရဲ, ငါ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလေ့လာစူးစမ်းဖို့ကောင်းသောခံစားရတယ်။ ဒါပေမယ့် ၁၅ နှစ်လောက်မှာငါစိတ်ဓာတ်ကျလာတယ်၊ ဒါကြောင့် PMO ကိုချိုင်းထောက်အဖြစ်သုံးခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်ရပ်လို့မရဘူး ပိုဆိုးတာကပိုဆိုးလာတယ်။ ဒါကြောင့်ငါ softcore ပစ္စည်းပစ္စယများကိုကြည့်ခြင်းဖြင့်စတင်ခဲ့သည်, ငါရပ်တန့်သည့်အချိန်အားဖြင့်ငါ shemale hentai စောင့်ကြည့်ငါ့ရေချိုးခန်းထဲမှာပုန်းအောင်းခဲ့သည်။ ငါပြောင်းလဲမှုလုပ်ခဲ့တယ်။ ငါ Nofap ကိုဖြတ်ပြီး, ငါကျဆင်းရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
၎င်း၏ယခု 30 ရက်ပေါင်းခဲ့, နှင့်ရလဒ်များကို၌ရှိကြ၏။
တစ်ပတ်လောက်ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာအပြောင်းအလဲတချို့ကိုကျွန်တော်သတိထားမိလာတယ်။ “ စူပါပါဝါ” ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုနှင့်စွမ်းအင်အကန့်အသတ်မရှိရရှိခဲ့သော်လည်းအပြောင်းအလဲများစွာရှိခဲ့သည် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုအပြည့်အ ၀ မရခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်မိန်းကလေးတွေနဲ့ငရဲရဲ့ငရဲအတွက်ပဲစကားစပြောတာကိုသတိထားမိတယ်။ ငါစကားပြောဆိုမှုအကြောင်းကိုကြိုတင်စဉ်းစားခြင်းနှင့်ထဲကကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိုးရိမ်ပူပန်တော့ဘူး။ ဒါကြောင့်ငါကဒုတိယအတွေးမပါဘဲလုပ်ခဲ့တယ်, ထိုသို့ကောင်းသောခံစားရတယ်။
အကြှနျုပျ၏လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုပျောက်ကွယ်သွားတော့တယ်။ ကျွန်ုပ်၏စွမ်းအင်အဆင့်မှာလုံးဝမတက်ပါ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်သတိပြုမိသည်မှာကျွန်ုပ်သည်ယခုတွင်ကျွန်ုပ်တို့၌များစွာလှုံ့ဆော်မှုများရှိသည်။ ငါမပျင်းရိဘူး အရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုခုကြောင့်ဖြစ်တဲ့အခါငါလုပ်ခဲ့မိတယ်၊ ငါလည်းဂစ်တာရောစန္ဒရားပါစလုပ်တယ်။ ယခုတွင်ငါသည်ဝါသနာရှိသည်!
အကြှနျုပျ၏ ဦး နှောက်မြူအဖြစ်ကောင်းစွာဆုတ်ယုတ်ခဲ့သည်။ အခုအချိန်မှာအခြေအနေတွေကကျွန်တော့်အတွက်ရှင်းနေတာပဲ။ ကျောင်းမှာငါအရင်ကထက်ပိုမိုပါဝင်ပတ်သက်ခံစားရတယ်။ အခုလူတွေနဲ့စကားပြောရတာပိုလွယ်ကူလာတယ်။ ငါသည်လည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုစတင်စသိနေပြီးဘဝ၏ပန်းတိုင်လည်းဖြစ်သည်။ ငါပိုကောင်းတဲ့ငါနဲ့တူခံစားရတယ်။
ဒါကြောင့်အာရုံနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်အတူကူညီပေးသည်အတည်ပြုနိုင်သူမှထွက်ရှိ ADD ၏သို့မဟုတ် ADHD နှင့်အတူဘယ်သူ့ကိုမှ?
ဤအမှုကိုနောက်တဖန်သွားရငါ့ကိုအချို့လှုံ့ဆျောမှုပေးပါ။ ။ ။
ငါ ADD ပါပြီ။ ပိုများသောအထူးသညျငါ့အာရုံကို span တိုတိုနှင့်အဆိုး, ငါ့မှတ်ဉာဏ် effects ။ အဘယ်သူမျှမ FAP ငါသတိထားမိပထမဦးဆုံးအရာစတင်ကတည်းကငါ့အမှတ်ဉာဏ်သိသိသာသာတိုးတက်မူကြောင်းကိုဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါသည်လည်းလူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုရှိသည်နှင့်ငါ့အစိုးရိမ်ပူပန်မှုကဤအချက်မှာရူပါဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးအားလုံး၌သငျဆုံးရှုံးနှင့်အဘယ်သူမျှမ FAP နှင့်အတူရရှိအရာအားလုံးဘာမှရှိသည်။
Ive ADHD အားလုံးငါ့အသက်ကိုခဲ့ခြင်းနှင့် nofap ကျိန်းသေကူညီပေးသည်, ဒါပေမယ့်ငါနေဆဲကြောင့်လိုအပ်သောငါ၏အဆေးဝါးအပေါ်နေဖို့ရှာပါ။ ကပြောသည်ခံရကြောင်း, ငါအရမ်းအသုံးပြုသောကြောင့်အဖြစ်အများကြီးလိုအပ်နေမဟုတ်ရှာပါ။ ဒီကူညီပေးသည်မျှော်လင့်ပါတယ်!
ဟေ့လူ၊ ငါမင်းဘယ်လိုခံစားရလဲ ငါသည်သင်တို့၏အသက်အရွယ်ပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်ငါသည်လည်း ADHD ခံစားနေရသည်။
ငါနောက်ဆုံးညဥ့် nofap ကနေပြန်ရောက်သွားတယ်ပေမယ့်ခိုင်မာတဲ့သွားခဲ့နေ့ရက်ကာလအဘို့ငါအာရုံစူးစိုက်မှုအတွက်တိုးတက်မှုသတိပြုမိသည်။
မင်းရဲ့ခံစားချက်ကိုငါသိတယ်၊ စောစောစီးစီးသွားမယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းမှာမှီဖို့ကြိုးစားစရာတွေအများကြီးရှိတယ်။ ဘာမှမလုပ်ရသေးတဲ့အတွက်သင်ဟာအလုပ်တစ်ခုကိုစွဲမြဲစွာရပ်ပြီးမြန်မြန်ဆန်ဆန်အာရုံမပျံ့လွင့်နိုင်လို့ပါ။
NoFap - Adderall ထက်ပိုကောင်းတယ်
ကောလိပ်ကျောင်းမှာကျွန်တော့်ကိုအများကြီးအထောက်အကူပြုတဲ့အရာတစ်ခုရှိခဲ့ရင်၊ ဒါက Adderall (ဒါမှမဟုတ်ဒီကိစ္စကိုလှုံ့ဆော်သူ - Modafinil စသဖြင့်) လို့ပြောဖို့လိုတယ်။ ကျွန်ုပ်ကို၎င်းကိုမညွှန်ကြားသော်လည်း၊ ADD / ADHD ဟုမသတ်မှတ်သော်လည်းကျွန်ုပ်ဘဝ၌ပျောက်ဆုံးနေသောအလားခံစားခဲ့ရသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏အာရုံကိုကျောင်းနှင့်အလုပ်သို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်အားလူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုမှလုံးဝသက်သာရာရစေခြင်းစသည်တို့နှင့်အတူကူညီခဲ့သည်။
အစပိုင်းမှာတော့အလယ်တန်း၊ နောက်ဆုံးအဆင့်မှာသာဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးကျွန်တော်ပုံမှန်ဆက်သွယ်မှုရှိမှသာပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။ ငါအများကြီးသောက်လိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ခဏတက်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ငါသိသောညအပေါ်ယူပြီးအပါအဝင်။ ငါမနက် ၄ နာရီအထိထွက်နိုင်ပြီးနောက် ၇ ရက်မှာကျောင်းတက်နိုင်ပြီ။ ကျွန်မရဲ့ပြproblemsနာအားလုံးကိုကုသပေးလိုက်သလိုပဲ။ ထိုအခါမူကားကငါ့ကိုအုတ်နံရံနဲ့တူ ...
အဆိုပါသည်းခံစိတ်လျင်မြန်စွာတက် built ငါ၏ချွတ်ခဲ့သောအခါငါစိတ်ကျရောဂါ၏ဤပြည်နယ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မရှင်းရှင်းလင်းလင်းစွဲခြင်းနှင့်ငါကတဖြည်းဖြည်းငါ့ကိုကွာ chipping ခဲ့သည်ကိုသိခဲ့ပါတယ်။ ငါကျောင်းဆင်းပွဲသည်အထိ, ငါ၏အသက်နှင့်အစဉ်အမြဲငါအတွက်ခဲ့ဖြစ်ကောင်းအဆိုးဆုံးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်နယ်ထဲမှာအနည်ထိုင်ဖို့စတင်ခဲ့အဆုံးသတ်အရှိဆုံးပြင်းထန်သောဆန္ဒဘွဲ့ရပြီးနောက်အသုံးပြုမှုကိုဆက်လက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ငါ Adderall ငါ့ကိုကူညီပေးခဲ့သော်လည်းမည်သို့မည်ပုံသဘောပေါက်လာသောအခါ၎င်းသည်ဤအချိန်ကာလအတွင်းခဲ့သည် ကျောင်းနှင့်လူမှုရေးနှင့်အတူပြုလုပ်သဘာဝကျကျတစ်ဦးသောသူကဲ့သို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ငါ့အနိုင်စွမ်းကိုဖျက်ဆီးတော်မူ၏။
ဒါတွေအားလုံးမလုပ်ခင်မှာကျွန်တော်ဟာပျင်းရိနေပြီးစိတ်ရှုပ်ထွေးပြီးတစ်နေ့မှာအနည်းဆုံး ၂-၃ ကြိမ်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေပြီးညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအကြောင်းကိုအမြဲစိတ်ကူးယဉ်ခဲ့တယ်။ ငါ၏ ဦး နှောက်ဝါယာကြိုးသည်တက်သွားပြီဆိုတာရှင်းနေတယ်။ ဒါကြောင့်ငါကဒီဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအားလုံးကိုဖယ်ရှားပစ်နိုင်တဲ့လှုံ့ဆော်သူကိုယူဖို့အခွင့်အရေးရတဲ့အခါငါအရမ်းဝမ်းသာခဲ့တယ်။ ကံမကောင်းစွာပဲ, ငါ PMO'ing ပို။ ပင်စတင်ခဲ့ပြီးနှင့် adderall ငါ့ကိုစူပါ horny ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ငါတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း၊ အိပ်ခြင်း၊ အမှိုက်များစားရန်မပြတ်စားသည့်အခါကြောက်စိတ်ကိုလှုံ့ဆော်ပေးသော comedown နှင့်သဘာ ၀ စိတ်ဓာတ်ကျမှုများမှသက်သာရာရစေသည့်အခါဘွဲ့ရသည်ပိုမိုဆိုးရွားလာသည်။
အဲဒီနောက်ကျွန်တော် NoFap ကိုမိတ်ဆက်လိုက်တယ်၊ ငါအရှည်ဆုံးကရက် ၂၀ လောက်ကြာတယ်။ သို့သော်ထိုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်ခံစားခဲ့ရသောအကျိုးအမြတ်များသည်လှုံ့ဆော်သူထက် ပို၍ ကောင်းသည်။ ငါမကြာသေးမီကပြန်သွားသော်လည်းငါအနှစ် 20 အတွင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုနှင့်ငါ့အတွင်းပိုင်းအစွမ်းသတ္တိနှင့်စွမ်းအားအကြောင်းကိုအများကြီးလေ့လာသင်ယူခဲ့သည်။ ငါဟာသဘာဝတရားကိုလေ့လာချင်တယ်၊ လူမှုရေးအရအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ချင်တယ်၊ ဝါသနာအသစ်တွေစခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ဒါကရက်ပေါင်း ၉၀ မထိခင်မှာပဲ။ ဒါကြောင့်အဲဒီအချိန်တုန်းကအပြောင်းအလဲတွေကိုမခံစားရနိုင်ဘူး။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့် NoFap ပိုကောင်းဘို့အကြှနျုပျ၏အသကျရှငျပွောငျးလဲသှားပွီကိုဘယ်လို yall အတူမျှဝေချင်ပါတယ်။ မှုအတွက်ဂုဏ်ပြုကြပါစို့
နောက်ခံ - Med ကျောင်းသား။ ခန္ဓာဗေဒအတွင်းမှာကျွန်တော်ဟာနေ့တိုင်းလိုလိုဖြစ်ခဲ့ရတယ်၊ သတင်းအချက်အလက်တွေကိုသိမ်းဆည်းထားဖို့၊
nofap နှင့်လေ့လာရန်တစ်ပါတ်ပိုမိုလွယ်ကူဖြစ်လာသည် !! ငါမနက်ဖြန်မှာဇီဝဓါတုဗေဒစမ်းသပ်မှုရှိတယ်။ ခန္ဓာဗေဒထက်ပိုကောင်းတဲ့အရာတွေကိုပြန်မှတ်မိနိုင်ပြီ၊ မနက်ခင်းမှာနိုးလာတဲ့အချိန်မှာငါလည်းပိုပြီးအနားယူနေတယ်။ ဝမ်းသာပါတယ်ငါ့ကိုသွားစောင့်ရှောက်ရန်ဤအသိုင်းအဝိုင်းရှိသည်! ငါ့တံဆိပ်ကိုဒီနေ့ကနေ ၂ ပတ်အထိကြည့်ရှုကြပါစို့။
သိပ်ပြီးတော့မကောင်းဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါဟာအရင်ကလုပ်ခဲ့ဖူးတဲ့အရာတွေကိုပိုပြီးသတိပြုမိပြီးနေ့တိုင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုခံစားရတယ်၊ ငါ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကပိုကောင်းတယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါဟာလိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုလုပ်ဖို့လိုတဲ့အရာမျိုးလုပ်ဖို့လိုတယ်လို့ခံစားရတယ်၊ ပြီးတော့ငါစိတ်ကျန်းမာရေးအတွက်ပိုကောင်းတယ်။ သင်တစ်ချိန်ကဖြန့်ချိလိုက်သောစွမ်းအင်ကိုယူပြီးသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်ယင်းတို့အားလုံးသည်နေရာယူသွားသည်။ လူတွေကကျွန်တော့်ကိုပြောတာကမိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်အပြုံးနဲ့သူတို့စကားပြောတိုင်းငါ“ တောက်ပ” တယ်လို့ပြောတယ်၊ ငါစကားပြောလို့ရပြီလို့ခံစားရတယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါ့စိတ်ကပိုပြီးမြန်မြန်အလုပ်လုပ်နေလို့ပါ။
အဘယ်သို့သောကင်လုပ်ခိုင်း fapstronauts တက်ပါ! NoFap မှမည်သည့်“ ရလဒ်” ကိုမမြင်ရသောသင်တို့အတွက်မည်သူမဆိုဤ post ကိုကျွန်ုပ်လုပ်ချင်သည်။ အချိန်တိုအတွင်းကြိုးစားပြီးပြန်ဖြစ်ပြီးနောက်၌၎င်းကိုထုတ်ပယ်သောသူတို့အတွက်။
ငါတစ်နှစ်ကျော်ရုံပါပဲ။ ယခုတွင်ကျွန်ုပ်သည်တကယ့်ခိုင်မာသောခိုင်မြဲသောထာဝရရလဒ်များကိုစတင်တွေ့မြင်နေပြီဖြစ်သည်။ အခြေခံအားဖြင့်တော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွက်နာကျင်မှုနဲ့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ငါအများကြီး Edged ပါတယ် ငါ့အိပ်ရာလိုသေးငယ်တဲ့အရာတွေအစပျိုးလာတယ်။ ငါသွားဖို့ဒီနီးစပ်ခဲ့ပေမယ့်ငါအရှုံးမပေးဘူး။
ငါရိုးရိုးသားသားပြောနိုင်တယ်ဒါထိုက်တန်တယ် ကျွန်ုပ်ယခုခံစားနေရသောအကျိုးခံစားခွင့်အချို့မှာ ပိုမို၍ မုန်းတီးခြင်း၊ ဘဝကိုပျော်မွေ့ခြင်း၊ အရူးတစ်ခုမှာကျွန်ုပ်၏စိတ်သည်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာစဉ်းစားခြင်းအတွက်အဆ ၁၀၀ ပိုကောင်းအောင်လုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ငါအခြေအနေကိုကြည့်ပါကခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာသဘာဝကျကျလာပါတယ်။ ငါပြောတာကလူတွေပြောတဲ့ငါ့ရဲ့ ဦး နှောက်ရဲ့ ၉၀% သော့ကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့တူတယ်။
ကျွန်မစတင်ခင်မှာ, ငါက NoFap ၏ရလဒ်အတိုင်းဤသည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်များတွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့မူကြောင်းကိုပြောင်းလဲမှုသင့်ရဲ့ပုကြီးမားတဲ့ငွေပမာဏအားလုံးကိုဖော်ပြရန်အခြေခံအားဖြင့်မဖြစ်နိုင်တဲ့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပြောပါကဘာလဲဆိုတာ။ ဒါဟာနောက်ဆုံးတော့ 90 ရက်ပေါင်း hit မှအနည်းငယ်တစ်နှစ်ကျော်ကငါ့ကို ယူ. ငါလုပ်ဘယ်တော့မှမထင်ဘယ်မှာကြိမ်ရှိခဲ့ပေမယ့်နောက်ဆုံးတော့ငါလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုအံ့သြဖွယ်ခံစားရ၏။
ငါ ၁၂ နှစ်အရွယ်မှာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုစကြည့်ခဲ့တယ်။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်ကမှစပြီးငါခုန်လိုက်တယ်။ ကျွန်တော်ကတက္ကသိုလ်ကနေထွက်ခွာသွားခဲ့ပြီး၊ ကိုယ့်အိမ်မှာကျွန်တော်စိတ်ဓာတ်ကျနေခဲ့တယ်၊ ငါ PMO မှတဆင့်ငါ့စိတ်ကျရောဂါလျစ်လျူရှုနိုင်ခဲ့တယ်, ငါရပ်တန့်သည်အထိငါ့အသက်ကိုအမှန်တကယ်ဘယ်လောက်အချည်းနှီးသောသဘောပေါက်လာတယ်။
ငါတက္ကသိုလ်မှနုတ်ထွက်ခဲ့သည့်စာသင်ခန်းသို့ပြန်သွားကြပါစို့ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏“ ADD” အတွက် adderall ကိုသတ်မှတ်ထားသောလူမှုရေးအရမကျွမ်းကျင်သောဗီဒီယိုဂိမ်းစွဲလမ်းသူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ ပြproblemနာက meds တွေကငါ့ကိုအာရုံစိုက်ဖို့ဘယ်တော့မှမလှုံ့ဆော်ခဲ့ဘူး။ ငါအဆုံးမှာနာရီပေါင်းများစွာငါ့ဆေးဝါးများနှင့် PMO ကိုယူလေ့ရှိတယ်။ /b/ တွင်ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းသောအမျိုးမျိုးသောအမျိုးအစားများကိုအရူးအမူးစွဲလမ်းခြင်း။
ငါ PMO ချင်တယ်ပြီးတော့ဘာမှပြီးမြောက်အောင်မလုပ်ချင်ခဲ့တာလဲလို့တွေးမိတယ်။ ငါအဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်, ငါအဆုံးသတ်နာရီပေါင်းများစွာအဘို့အကြှနျုပျ၏ Xbox နှင့်ဂိမ်းကိုဖွင့်မယ်လို့ပြီးနောက်။
ငါ့ဘဝမှာအကြီးအကျယ်အာရုံပျံ့လွင့်စရာနှစ်ခု၊ PMO နှင့် Xbox ။ နောက်ဆုံးတွင်အခန်းဖော်တစ်ယောက်နှင့်အတူထိုင်။ ကျွန်ုပ်၏အနာဂတ်အကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်အထိကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်သည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးဖြစ်လိုသောဆန္ဒလုံးဝမရှိကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်ခဲ့သည်။ ငါ၌စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်ကျောင်းတက်ရန်အကြောင်းပြချက်မရှိခဲ့ပါ။ ကျွန်တော့်မိဘတွေလိုချင်တာနဲ့ငါလုပ်သင့်တယ်လို့ထင်တဲ့အရာကလွဲလို့တက္ကသိုလ်တစ်ခုမှာကျောင်းတက်ဖို့အကြောင်းမရှိဘူး။ နောက်ထပ်ရက်အနည်းငယ်စဉ်းစားပြီးစာမေးပွဲဖြေပြီးတဲ့နောက်ကျောင်းကိုစွန့်ပြီးအိမ်ပြန်လာပြီးကျွန်တော့်ဘဝကိုပုံဖော်တယ်။
ငါအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါငါနောက်ထပ်စိတ်ကျရောဂါသို့ကျဆင်းခဲ့သည်။ PMOing နှင့် Xbox ကိုနာရီပေါင်းများစွာကစားနေဆဲဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးတော့အလုပ်ရခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်ငါ့ဘဝနဲ့ဘာမှမလုပ်ဘူး။ ငါ yourbrainonporn.com / on /bကိုမတွေ့ခင်အထိငါအဆုံးသတ်လိုက်တယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသေချာကြည့်ပြီးငါ့ဘဝမှာဘာကြောင့်လှုံ့ဆော်မှုနဲ့ပျော်ရွှင်မှုမရှိရတာလဲဆိုတာကိုသဘောပေါက်လာတယ်။
ငါသည်ငါ့ဘဝတစျခုလုံး PMOing ခဲ့မည်မျှသဘောပေါက်လာတယ်။ အဘယ်သို့ငါတစ်ရည်းစားရှိခဲ့ဖူးနှင့်မည်သို့ငါမိန်းမနှင့်မဆိုယုံကြည်မှုမရှိခဲ့ဘူး။ အဘယ်သို့ငါသူအမြဲတမ်း friendzone တက်အနာအဘယ်ကြောင့်အံ့ဩစေတဲ့ခါးသီး angsty ဆယ်ကျော်သက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါအဆိုးမြင်စိတ်တွေများနှင့် Self-ရွံမုန်းတဲ့အတွက်ကိုယ့်ကိုကိုယ်နစ်မြှုပ်ခဲ့ပါတယ်။
yourbrainonporn.com နှင့် / r / nofap ကိုရှာဖွေပြီးနောက်ငါပြောင်းလဲလာသည်။ နောက်ဆုံးတော့ငါဆေးသောက်တော့တာပဲ၊ ဂိမ်းကစားတာကိုရပ်လိုက်ပြီးကွန်ပျူတာပေါ်မှာနာရီတွေအကုန်မဖြုန်းတော့ဘူး။ နောက်ဆုံးငါကိုယ်တိုင်အဲဒီနေရာကိုထွက်ပြီးအမျိုးသမီးအနည်းငယ်နဲ့အဆက်အသွယ်လုပ်ခဲ့တယ်။ ကျွန်တော့်မှာနှလုံးခွဲစိတ်မှုအချို့ရှိခဲ့ပေမယ့်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်အနေနဲ့အရမ်းပြင်းထန်သောခံစားမှုကိုခံစားမိခဲ့သည်။ ငါ PMOing ကိုရပ်တန့်ခြင်းမပြုမီ, ငါဘာမှမဆီသို့စိတ်လှုပ်ရှားမှုထုံဖြစ်လာသည်သည်အထိကိုယ့်ကိုချွတ်လူရှုပ်လိမ့်မယ်။ အခုတော့ငါဟာ ၀ မ်းနည်းမှုနဲ့ပျော်ရွှင်မှုနှစ်ခုလုံးကိုခံစားခဲ့ရပြီးအဲဒါကငါ့ကိုပြန်ပြီးခံစားလာစေတယ်။
ငါစတင်အလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့်ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်အာဟာရများအတွက်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်ကိုယ်ကိုယ်ထဲသို့ ၀ င်ရောက်ခဲ့သည့်အလုပ်အတွက်တကယ်ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ ငါဟာအခြားလူတွေအတွက်သာမကကိုယ့်အတွက်လည်းဘယ်လိုပိုကောင်းတဲ့လူဖြစ်ရမယ်ဆိုတာကိုတစ်နှစ်လုံးလေ့လာခဲ့တယ်။ ငါဟာ PMOed အရမ်းများတယ်ဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ရောဘယ်သူလဲဆိုတာကိုမုန်းတယ်။ အခုငါဟာဘယ်သူလဲဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုချစ်ပြီးအရေးအကြီးဆုံးသောချစ်ခြင်းမေတ္တာမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုချစ်ခြင်းလို့ထင်တယ်။ တစ်ချိန်ကပညာရှိတစ် ဦး က“ မင်းကိုယ့်ကိုကိုယ်မချစ်ရင်တခြားတစ်ယောက်ကဘယ်လိုလုပ်ပြီးဘယ်လိုလုပ်နိုင်မှာလဲ” ဟုပြောခဲ့သည်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအပျက်သဘောရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ကနေရူးသွပ်တဲ့အကောင်းမြင်သူတစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ ငါမုန်းတီးမှုရပ်တန့်ခြင်းနှင့်ဘဝ၌ကျွန်ုပ်နှစ်သက်သောအရာများကိုရှာဖွေခြင်းစတင်ခဲ့သည်။ ငါ PMOing ကိုရပ်တန့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်မရဲ့အာရုံဟာ ၁၀x ပိုကောင်းလာပြီးဘဝကပိုပြီးရှင်းလင်းလာတယ်။ ခင်ဗျားတို့အများစုဟာစူပါပါဝါတွေအကြောင်းပြောကြတယ်။ သူတို့အားလုံးဟာခင်ဗျားစိတ်ထဲမှာပဲရှိတာ။ ဒါပေမယ့်ငါသဘောမတူဘူး။ ငါ PMO နှင့် MO မှရှောင်ကြဉ်သောအခါငါအမှန်တကယ် "buzz" ရ။ ငါ PMOing ဖြစ်တုန်းကထွက်သွား၊ အမှုအရာလုပ်ဖို့၊ ငါတစ်ခါမှမလုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့သူတွေကိုစကားပြောဖို့တွန်းအားရှိတယ်။ ငါနိုးလာပြီးနံနက်မှာအိပ်ရာကထဖို့လွယ်တယ်။ လွန်ခဲ့သောရက်ပေါင်း ၉၀ အတွင်းကျွန်ုပ်ဘဝ၏အကောင်းဆုံးအကျိုးကျေးဇူးများရရှိခဲ့ပါသည်။ ငါ့ဘဝမှာ PMO မပါဘဲငါ့ရဲ့အာရုံဟာပိုပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိနေလို့ငါဆေးတွေမလိုတော့ဘူး။
ငါနောက်ဆုံးတော့သူကလူတနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်တာဝန်များကိုကျွန်မယောက်ျားသည်အဖြစ်နှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်ရှိသည်ဖြစ်ဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုတာသိခဲ့ရတယ်။ ယခုအဖြစ်ငါပြန်ငါ (အစာအာဟာရနှင့် dietetics) ကိုချစ်တစ်ခုခုလေ့လာခြင်းကျောင်းဖြစ်ကြောင်းကိုငါကိုချစ်တဲ့မိန်းကလေးတစ်ဦးကိုတွေ့ရှိခဲ့သူငါ့ကိုခစျြနဲ့ငါဝေးရှည်လျားလွန်းသည်ထွက်ပျောက်ဆုံးခဲ့ကြတဲ့ခံစားမှုပါပဲ။
အကြှနျုပျ၏ ဦး နှောက်မြူသွား - ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ဒီနေ့အက္ခရာကိုနောက်ပြန်ဆုတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်၊ ငါလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။ ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာငါဂိမ်းကစားနေစဉ်၊ ကျွန်ုပ်ရွေးလိုက်သောကဒ်ကကျွန်ုပ်ကိုလုပ်ရန်လိုအပ်သော်လည်းကျွန်တော်မလုပ်နိုင်ပါ။ ကျွန်တော့် ဦး နှောက်ကတောက်ပလာနေသလိုပဲ။ လျင်မြန်စွာနှင့်သိသိသာသာစဉ်းစားရန်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေသည့်နှစ်များအတွင်းယခုမူကားမြူမှုန်ဝါးနေသည်ဟုခံစားမိသည်။
Marks မှန်မှန် PMO-ing စဉ်: 60s မှ 70s ။
NoFap သို့တစ်ပါတ်အကြောင်းကို Marks: 80s-90s!
တိုက်ဆိုင်မှု? ငါမစဉ်းစားပါ။ ပိုကောင်းတဲ့ဦးနှောက်ပါဝါ, လေ့လာဖို့ပိုပြီးလှုံ့ဆျောမှု, ဦးနှောက်မြူသွားပြီ။
ကျွန်တော့်အတိတ်စာသင်ချိန်မှာ A နဲ့ A + ကိုတည့်တည့်ရတယ်။ များသောအားဖြင့်ယင်း၏ C နှင့် B-ss ။ ကံကောင်းပါစေ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်၏ ဦး နှောက်ထဲတွင်ထာဝရပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်ပျက်နေသည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ နောက်ထပ်အချက်အလက်များကိုလိုအပ်သည်။
ကြီးစွာသောအလုပ်လူတိုင်းတက်အောင်ထားပါ! ပင် 90 ရက်အကြာမှာသူ့ရဲ့တန်ဖိုးရှိကြောင့်,!
အားလုံးငါ့အသက်ကိုလူတိုင်းကိုယ့်အာရုံကိုလိုငွေပြမှုရောဂါမှမိုက်မဲခဲ့ယူဆ။ အခုတော့ porn ကလူတက်ပေးခြင်းကတည်းကငါ့အဉာဏ်သတိပြုမိပါပွီ။ im တော့ဘူးဆရာ, ဆရာမများကဒီစာအုပ်ကိုအထင်သေးဘူး။ im ကောင်းသောအဆင့်လာပြီ။ သို့သော်အပေါင်းတို့၏အများဆုံး့မတ်ရတဲ့အမှန်တကယ် im ပြောပြနိုင်ပါတယ်။ အစဉ်အဆက်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့, စာအုပ်ငါ့ကိုငိုကြွေးအော်ဟစ်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ငါဒါ NoFap မရှိဘဲအရာအားလုံးအတှကျကြေးဇူးတငျရပ်တန့်ဖူးဘူးမညျ!
အခုလေ့လာနေတဲ့အချက်တွေအတွက်စိတ်မကောင်းပါဘူး။ ကျွန်ုပ်၏လေ့လာမှုများသည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်တိုးတက်သွားသည်ကိုသတိပြုမိပြီး၊ ရှုပ်ထွေးသောရူပဗေဒနှင့်သင်္ချာသဘောတရားများကိုနားလည်ပြီးရှုပ်ထွေးသောပြdoနာများနှင့်ကျွန်ုပ်၏တတိယမြောက်ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာဘောဂဗေဒ - ကျွန်ုပ်အလွတ်ကျက်မှတ်နိုင်စွမ်းရှိသည်။ ငါ၏မှတ်စုများနှင့်မြင့်မားသောအမှတ်အသားများရတဲ့, အလေ့အကျင့်စာစီစာကုံးမေးခွန်းများကိုအပေါ်မြင့်မားသောသူတို့ကိုလျှောက်ထားပါ။
ကျွန်ုပ်၏အာရုံစူးစိုက်မှုသည်မြင့်မားပြီးနားလည်မှုသည်အဆင့်သစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်တစ်နေ့လျှင် ၅ နာရီနှင့်တစ်ခါတစ်ရံ ၆ နာရီလေ့လာနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ပညာရေးဘ ၀ အပေါ်ကျွန်ုပ်၏အကောင်းမြင်အမြင်ကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ဘဝအပေါ်အပြုသဘောဆောင်သောအကောင်းမြင်သဘောထားအသစ်ရှိသည် (ငါလာမည့်လတွင်စာမေးပွဲများရှိသည်။ ဤမျှကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေသရွေ့ကျွန်ုပ်သည်အလွန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေသည်) ။ စိတ်ဖိစီးမှုအရေးကြီးတယ်၊ ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့မဆုံးဖြတ်ခင်တစ်နေ့မှာ ၂/၃ နာရီထက်ပိုပြီးမလေ့လာနိုင်ဘူး၊ ဒါကအရမ်းအရည်အသွေးမကောင်းတဲ့လေ့လာမှုပဲ။ ကျွန်ုပ်ဘာသာရပ်များတွင်ရှုပ်ထွေးသောအယူအဆများကိုလည်းနားမလည်နိုင်ပါ။
ဒီဟာကလူတိုင်းအတွက်မက်လုံးပေးဖို့နဲ့လှုံ့ဆော်မှုမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာငါသိပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါဖြတ်ကျော်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေတာကစူပါအင်အားကြီး nofap နဲ့ရှိနေတယ်။ အလေးအနက်ထား, သင်၏စိတ်နှင့်ကိုယ်ခန္ဓာပြောင်းလဲမှုကိုသွားစောင့်ကြည့်ပါ။ ကျွန်ုပ်ဘာသာရေးကိုအလေးအနက်ထားသည့်အနေဖြင့်ဘုရားသခင်ထံဝိညာဉ်ရေးရာနိုးထလာသည်အထိကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ထင်မြင်မိသည်။
ဒါကလူကောင်းတွေပါ၊ ဒါပေမယ့်သိပ်ခက်ခဲပါတယ်၊ ဒီနေ့ကျွန်တော်ရေချိုးခန်းနဲ့ MO'ing ထဲမွာစက္ကန့်အနည်းငယ်လောက်ဝေးသွားပြီ၊ ပြီးတော့မကြာခင်မှာပဲငါ MO အသစ်ပြန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုတောင်ရခဲ့တယ်၊ ကျပန်း boners နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေး။ ကျွန်ုပ်၏ ၂.၅ လတာကာလအတွင်းစိတ်အပြောင်းအလဲများသည်ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းလှသည်။ ကျွန်ုပ်ဤတည်ဆောက်မှုကိုတည်ဆောက်စဉ်ကလာမည့်အလားအလာများလည်းရှိသည်။
ထပ်ခါထပ်ခါဖြစ်သော်လည်းငါဒီနှစ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှုကိုသိသိသာသာလျှော့ချခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့သော ၂ ရက်ကပိုတိုတောင်းသောမှတ်ဉာဏ်တိုးတက်လာသည်ကိုသတိပြုမိသည်။ အထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်ဖုန်းနံပါတ်များနှင့်ငွေရေးကြေးရေးကိုအလွယ်တကူမှတ်မိနိုင်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ အခြားမည်သူမဆိုမှတ်ဉာဏ်အတွက်အထူးတိုးတက်မှုများကိုသတိထားမိ?
ဤနောက်ဆုံးရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကအရာအားလုံးသည်အလွန်ရှင်းလင်းနေပုံရသည်။ ငါလုပ်သမျှ၊ လှုံ့ဆော်မှု၊ စုစည်းမှုတွေအကြောင်း၊ ခြေလှမ်းနှစ်လှမ်းသာရှိခဲ့တယ်။ ငါ့ရဲ့ပြောဆိုချက်တွေဟာနည်းနည်းပိုကောင်းတယ်လို့တောင်ပြောနိုင်တယ်။
ဒီနေ့မနက်ပြန်သွားပြီးတဲ့အခါစိတ်ဓာတ်ညှိုးငယ်တယ်ဆိုတာရိုးရိုးသားသားခံစားရတယ်။ ငါထင်တာကငါ့ရဲ့ ဦး နှောက်ထဲကဒီနောက်ခံဆူညံသံလိုငါ့ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမစဉ်းစားနိုင်အောင်တားဆီးနေတယ်။
ဒီမှာလဲတူတူပဲ။ ငါသည်လည်းသုတ်ရည် retention ကိုအပေါ်စမတ်တယ်တူသောငါခံစားရတယ်။
ငါ NoFap ကိုရက်ပေါင်း ၄၀ ကျော်သွားပြီးဒီနေ့ပြန်ဖြစ်လာပြီ။ အဲဒီ ဦး နှောက်မှေးမှနေတဲ့အတွေးဖြစ်စဉ်များကိုဘယ်လောက်များများမှေးမှိန်သွားပြီဆိုတာအခုအချိန်မှာလုံးလုံးပြန်ပြောပြနိုင်သည်။
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကျောင်းတစ်လျှောက်လုံးအတန်းရဲ့အောက်ဆုံးအထိတောင်ကျွန်တော်ရုန်းကန်ခဲ့ရတယ်။ စီမံကိန်းများ၊ အတန်းများ၊ လူနာများအားစီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ ဘဏ္financialာရေး၊ လူမှုရေး၊ မိသားစုစိတ်ဖိစီးမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်၏စိတ်ပူပန်မှုသည်အလွန်စိတ်ဖိစီးလာသဖြင့်သွားကျောင်းသို့တစ်ဝက်ကျော်အထိရောက်သွားခဲ့ရသည်။ ကျွန်တော့်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းစဉ်းစားခွင့်ပေးလိုက်တာ၊ ငါက“ မြူခိုးစိတ်” ပြင်းထန်တဲ့စိုးရိမ်စိတ်နဲ့စိတ်ဓာတ်ကျမှုကိုခံစားခဲ့ရတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ပါမောက္ခတွေကကျွန်တော်ကနှေးနေတယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်။
ကျွန်မအတန်းဖော်မှတဆင့်သို့မဟုတ်အွန်လိုင်းနိုင်ငံခြားစတိုးဆိုင်မှတဆင့်တစ်ဦးကျွန်မစိတ်ပညာရှင်မှသှားသောဖြေရှင်းချက်များနှင့်ပင်ဝယ် ADHD ဆေးကိုရှာဖွေနိုင်အောင်အပူတပြင်းဖြစ်လာခဲ့သည်။
ငါဟာမကြာခဏတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာကိုခံရတော့မယ်၊ ငါဟာအလုပ်ကိုအရမ်းငြိတွယ်လာတယ်၊ စိတ်ဖိစီးမှုနဲ့စိတ်ပူပန်မှုကြားထဲကနေကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှာဖွေဖို့ငါ့ရဲ့ရိုးရိုးလေးလွတ်မြောက်မှုပါ။ ငါအီးမေးလ်တွေကိုတောင်မဖတ်တတ်ဘူး၊ အရိုးရှင်းဆုံးအရာများကိုအရိပ်အမြွက်ပြောရုံဖြင့်စတင်ပါ။
ငါ NoFap ဖြတ်ပြီးသည်အထိ၎င်းသည်လတ်ဆတ်သောလေကိုရှူသွင်းမိသည်အထိမဖြစ်ခဲ့ပါ။
ကျွန်ုပ်သည်ယနေ့ ၆၀ ခန့်တွင်ရှိနေပြီဖြစ်သည်။ ၇ ရက်တစ်ဝိုက်မြင့်တက်လာသည်ကိုခံစားခဲ့ရပြီးကျွန်ုပ်သည်အလွန်ပျော်ရွှင်ခြင်း၊ အာရုံစိုက်ခြင်း၊ လှုံ့ဆော်ခြင်း၊ ကျွန်တော့်ရဲ့ပါမောက္ခတွေ၊ သူငယ်ချင်းတွေ၊ မိန်းကလေးတွေတောင်မှငါဟာတခြားလူတွေပါလို့ထင်ကြတာ။ ငါပုံမှန်အတိုင်းစိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊ လှုံ့ဆော်မှုကင်းမဲ့ခြင်းကို“ ရက်သတ္တပတ် ၆ ပတ်ခန့်မှာကြိုးပမ်းခဲ့တယ်။ ဒီတစ်ပတ်လောက်ကြာတယ် ဒါပေမယ့်နောက်မှငါပြန်ခံစားရတယ်။ အဘယ်သူမျှမ Fap ကတန်ဖိုးရှိ soooo ဖြစ်ပါတယ်။ ၅-၁၀ စက္ကန့်အော်ဂဇင်ကိုတစ်ချိန်က shit ဟုခံစားရရန်အတွက် mastburating လုပ်ခြင်းသည်မထိုက်တန်ပါ။ ငါ့ဘဝဟာအသက်ရှင်ရကျိုးနပ်တယ်လို့ခံစားရတယ်၊ မိန်းမတွေနဲ့ပရောပရည်လုပ်တာ၊ ယောက်ျားလေးတွေနဲ့အတူကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းဆက်ဆံတာ၊ စိန်ခေါ်မှုအသစ်တွေကိုယူတာ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ကောင်းတွေချတာ၊ အစောပိုင်းသတ်မှတ်ချက်တွေသတ်မှတ်ခြင်း၊ အမျိုးသမီးတွေနဲ့စကားပြောရတာ၊
ကျွန်ုပ်မလိုအပ်သောကြောင့် ADHD ဆေးသည်အလုပ်မလုပ်တော့ပါ။ ငါမပါဘဲဤမျှအာရုံစူးစိုက်နေပါတယ်တူသောငါခံစားရတယ်။
သွားဘက်ဆိုင်ရာကျောင်းတွင်အစတွင်ကျွန်ုပ်ရှာဖွေတွေ့ရှိပါကဘဝသည်အနည်းငယ်ကွဲပြားခြားနားပါလိမ့်မည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သွားကျောင်းကကျွန်တော့်ကိုအကန့်အသတ်နဲ့သာဖိအားပေးတာမဟုတ်ရင်ငါ nofap ကိုရှာတွေ့မှာမဟုတ်ဘူး။ သွားကျောင်း၌ - ADHD ဆေးသည်မလိုအပ်တော့သောကြောင့်အလုပ်မလုပ်တော့ပါ။
နောက်တစ်ခါပြန်နိုင်ခြင်းမရှိသည့်အပြင်သိမ်မွေ့လွန်း။ ဦး နှောက်မှေးမှိန်သွားခြင်းဖြစ်သည်။ အရာရာတိုင်းဟာပိုပြီးရှင်းပါတယ်။ အခက်အခဲမရှိတဲ့သင်္ချာကိုငါပြန်လုပ်နိုင်တယ်။
ငါဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကတည်းကကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေ့လျော့နေတတ်သူလို့အမြဲတမ်းစဉ်းစားခဲ့တယ်။ ငါဟာဒီဟာကငါ့ရဲ့ DNA ထဲမှာရှိနေတာပဲ။ ကျွန်တော့်မှတ်ဥာဏ်ဟာဘယ်တော့မှပြတ်ပြတ်သားသားမရှိခဲ့ဘူး၊ ငါအရမ်းတုန်လှုပ်မိသည်မှာ ၁၅ နှစ်နီးပါးကြာပြီဖြစ်သောကြောင့်တိမ်မြုပ်နေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒီအသိုင်းအဝိုင်းပျံ့နှံ့ဖို့လိုအပ်ပါတယ်! များစွာသောအသက်များကိုလည်းကယ်တင်နိုင်ခဲ့သည်။
ငါလုံးဝအဆမဲ့အတွက် Bradley Cooper နဲ့တူခံစားကြရသည်။
ကျွန်မအခုတက္ကသိုလ်အတွက် 90% ပျမ်းမျှအားဒုတိယစာသင်သို့3ရက်သတ္တပတ်အပေါ်ဖြစ်၏။ နောက်ဆုံး sem ထံမှကြီးမားသောတိုးတက်မှု။
ကျွန်မတစ်ဦးဟောပြောပွဲအတွက်ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကတွေ့ဆုံခဲ့သည်ဟာအလွန်ဆွဲဆောင်မှုမိန်းကလေး tutoring နေပါတယ်။ ငါသည်လည်းငါ၏အသူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူပညာရေးဆိုင်ရာခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုအပေါ်အကူအညီများအတွက်ပထမဦးဆုံးအရင်းအမြစ်ဖြစ်၏။
အကြှနျုပျ၏မှတ်ဉာဏ်နေ့က6အပေါ်ပိုကောင်းလာပြီဖြစ်ပါတယ်
ဝိုး။ ငါစကားအကျန်ရစ် ငါပုံမှန်အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်၏အရေးပါမှုကိုသဘောပေါက်ဘူး။ အမြဲတမ်းမေ့တတ်ခြင်း၊ တစ်စုံတစ်ခုကိုထပ်ခါတလဲလဲဖတ်ရှုခြင်းနှင့်မှတ်မိနိုင်ခြင်းမရှိခြင်းသည်ပုံမှန်ဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်အမြဲထင်ခဲ့သည်
ဟားဟား, ငါစာသားကားတစ်စီးလိုင်စင်ပြားကြည့်ရှုခြင်းနှင့် 10 နာရီအကြာတွင်ပြန်မှတ်မိနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်အမေဆဲလ်ဖုန်းနံပါတ်ကိုတောင်မမှတ်မိတော့ဘူး။ အရူးပစ္စည်း။ ဒါ့အပြင်ကျွန်ုပ်သည်အဘယ်ကြောင့်အကြိမ်ကြိမ်အမြတ်ထုတ်ခြင်းနှင့်အခွင့်ကောင်းယူခြင်းကိုငါတွေ့ခဲ့ရပြီ။ လူတွေကအကြောင်းအရာတစ်ခုအကြောင်းပြောနေတာဖြစ်လို့ငါပြောတာကသူနဲ့အဝေးမှဆက်စပ်မှုမရှိဘဲတုန့်ပြန်မှုတစ်ခု။ ငါ "ဒီကောင်လေးနှောင့်နှေးပါသလဲ" ငါရအံ့သြစရာမဟုတ် အရမ်းရယ်ရတယ်၊ ကောင်းပြီ၊ အနည်းဆုံးတော့ဒါကငါထင်နေသည်။
၎င်း၏လည်း sooooo အများကြီးပိုလွယ်လည်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီတစ်စုံတစ်ဦးကိုတစ်ဦးစကားပြောဆိုမှုသယ်ဆောင်ရန်။
ဝမ်းနည်းစရာငါပြန်ရောက်သွားတယ်ဒါပေမယ့်ကျနော် reboot ၏ဤတစျခုသီတင်းပတ်အတွင်းတစုံတယောက်ကိုရက်သတ္တပတ်၏ သို့ဖြစ်. အဘယ်သို့ငါယခင်ပြန်လည်စတင်ဤမျှလောက်ပိုပြီးလေ့လာသင်ယူကြပါပြီ။ အကြှနျုပျ၏မှတ်ဉာဏ်, ဆင်ခြင်ခြင်း, ထိုလူအပေါင်းတို့သည်ဤမျှလောက်ပြတ်သားခဲ့ကြ comprehension, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ sensitivity ကို, ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်အသိအမြင်, ဖတ်ရှုခြင်း။
ဒါကကျွန်မဘဝနဲ့ယေဘူယျအားဖြင့်ဘယ်လောက်ထိတွေ့နေတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်စေတယ်။ ငါ 10 နှစ်လုံးလုံးဖုတ်ကောင်အဖြစ်လမ်းလျှောက်ခဲ့သည်ကဲ့သို့ဖြစ်၏။ အခြားအရာအားလုံးရဲ့နောက်ကွယ်ကသိပ္ပံကိုတကယ်နားမလည်လို့မင်းရဲ့ဘဝဟာပိုကောင်းလာတယ်။ ဒါကနောက်တစ်ခါငါ reboot လုပ်တဲ့အချိန်မှာ reboot လုပ်ဖို့လှုံ့ဆော်မှုတွေအများကြီးပေးခဲ့တယ်။
ကျောင်းသားများ, NoFap သင်တို့အဘို့အလွန်အသုံးဝင်ဖြစ်ပါသည်
အလေးအနက်ထားပြောရရင်တော့ဒီ ဦး နှောက်မြူခြင်းမရှိဘဲအာရုံစိုက်ဖို့ကပိုပြီးလွယ်ကူသွားတယ်။ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျအစဉ်မပြတ်ငါတော်တော်လေးကောင်းသောကျောင်းသားဖြစ်ပေမယ့်ငါကအရမ်းအလုပ်လိုအပ်သောကြောင့်ငါရူးသွပ်သွား။ ယခု NoFap ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာတွင်လေ့လာမှုသည် ပို၍ လွယ်ကူပြီး ပို၍ သက်တောင့်သက်သာရှိသည်။
ဦးနှောက် Fog တွင်
ငါမဆိုဒီဂရီမှဦးနှောက် Fog replicates ရာထင်နိုင်မှသာအခြားအအခြေအနေမျိုးရေဓါတ်ခန်းခြောက်သည်။ အစစ်အမှန်ရေဓါတ်ခန်းခြောက်။ ဘယ်အချိန်မှာသင့်ခန္ဓာကိုယ်စာသားရေအတှကျအသငျသညျတောင်းစားနေသည်နှင့်သင့်အရေးပါသောအကိုယ်တွင်းအင်္ဂါမှရေပို့မျက်နှာသာအတွက်အချို့သောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်ချက်များကိုပိတ်ပစ်သည်။
ဒါက ဦး နှောက်မြူခံစားရပုံပါပဲ။
ရှုပ်ထွေးသောကိစ္စရပ်များစဉ်းစားမဖြစ်နိုင်သလောက်ဖြစ်လာသည်။ ငါရှေ့ဆက်စီစဉ်အခြေအနေကိုအကဲဖြတ်ဖို့ကြိုးစားပါလျှင်, ပြဿနာတစ်ခုဖြေရှင်းသို့မဟုတ်အရာတစ်ခုခုကိုငါ့အဦးနှောက်ထစ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, ညည်းသံနှင့်အအေးနံနက်ပိုင်းတွင်ဟောင်းအင်ဂျင်များကဲ့သို့တက်ပေးသည်။ တစ်ဦးကစက္ကန့်အနည်းငယ်ငါအရှုံးမပေးမတိုင်မီမှေးအိပ်ခြင်းနှင့် Netflix နဲ့တက် load နိုင်ပါတယ်အားလုံးပါပဲ။
ဒါဟာဦးနှောက် Fog အားဖြင့်အပေါ်ယူဆောင်လာမယ့်ပြဿနာမှငါ့ကိုဦးဆောင်; လှုံ့ဆျောမှုအတွက်သိသာတစ်စက်။
ရုတ်တရက်ခုခံမှုအနည်းဆုံးနှင့်ချက်ချင်းဆန္ဒပြည့်မှု၏လမ်းကြောင်းသည်နှစ်သက်သောလမ်းကြောင်းဖြစ်လာသည်။ ဤသို့ပြုခြင်းသည်ပျင်းရိခြင်းနှင့်စားကြူးခြင်းကဲ့သို့သောအကျင့်ဆိုးများကိုပြန်လည်ရှင်သန်စေရုံသာမကတစ်ခုတည်းသောထပ်မံဖြစ်ပွားမှုကိုနောက်တစ်ခုနှင့်နောက်တစ်ခုသို့ပြောင်းလဲစေခြင်းအားဖြင့်၎င်းင်း၏စက်ဝိုင်းပုံကိုလည်းဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ပိတ်မိခြင်းနှင့်ဖြုတ်ချခြင်းငါတစ် ဦး တစ်သျှူးသို့ထွက်ခေါက်နှင့်အခြားမိသားစု Guy ၏ဖြစ်ရပ်သို့မဟုတ်သမျှကိုကြည့်ပါ။
တစ်နေရာရာမှာငါပင်ပန်းကြီးထွားနှင့်ငါ့မျက်စိပိတ်ဖို့လိုင်းတလျှောက်။ အဆိုပါဦးနှောက် Fog နောက်ထပ်ဆငျးသနှင့်လုံးဝအစစ်အမှန်ကမ္ဘာကြီးနှင့်ငါ၏စစ်မှန်သောဘဝကိုဖုံးလွှမ်း။ ငါ့ဦးခေါင်းအတွက်ငါဖြစ်ချင်တယ်အကြင်သူသည်နိုင်ပါတယ်, ငါသည်ချင်သောမိန်းကလေးများနှင့်အတူငါလိုချင်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိသည်။ ငါကိုယ်ထိလက်ရောက်မထိုက်မတန်ဝမ်းခွဲအပေါင်းတို့နှင့်တကွရိုးရှင်းစွာအကြှနျုပျ၏မကျြစိကိုပိတ်ပြီးနှင့်နေ့ရက်ကိုအိပ်မက်စိတ်ကူးယဉ်ကျူးလွန်ခြင်းဖြင့်အဘယ်သူမျှမပြဿနာများရှိသည်နိုင်ပါသည်။
ဤစိတ်ကူးယဉ်များကများစွာသော fapstraunauts များကိုပြန်လည်သက်ရောက်စေနိုင်သည်။ ဒါကိုငါတို့သိတယ်၊ နာရီဝက်လောက်အိပ်မက်မက်ပြီးကိုယ့်ဘဝနဲ့ဝေးကွာတဲ့ဘဝတစ်ခုအကြောင်းအိပ်မက်မက်ပြီးတဲ့နောက်အဖြစ်မှန်ထဲကိုပြန်လည်ရောက်ရှိသွားတာကစိတ်ပျက်စရာကောင်းပါတယ်။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာနာကျင်မှုဝေဒနာကိုသက်သာပျောက်ကင်းစေပြီး ဦး နှောက်ကိုပိုမိုနူးညံ့စေပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ စိတ်ကူးယဉ်ကမ္ဘာမှာဘယ်သူမှလုံးဝမနေထိုင်နိုင်ပါ။ ငါတို့မှာအစားအစာ၊ ရေ၊ ငွေစသည်တို့လိုအပ်တယ်။ ဒါကြောင့်တနင်္လာနေ့မှာလှည့်ပတ်တဲ့အခါငါတို့ဘဝတွေကိုရင်ဆိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်မှုအချို့ကိုဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့အလုပ်, တက္ကသိုလ်သို့မဟုတ်ကျောင်းသွားပါ။ ဒါပေမယ့်ငါတို့ကဒါကိုတဝက်တပျက်နဲ့လုပ်ခဲ့ကြတာပါ၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကကျွန်ုပ်တို့လုပ်နိုင်သမျှအားလုံးကိုလှည့်ပတ်နေသည့်အချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကံဆိုးလျှင်မည်သည့်အရာမျှလုပ်ဆောင်ခြင်းသို့မဟုတ်“ အံ့သြစရာမရှိပါ” လူမှုရေးဘ ၀ တွင်ပါ ၀ င်သည့်ရက်အနည်းငယ်သောအချိန်ကိုကုန်လွန်ချိန်တွင်စနေ၊
ဘုရားသခငျသညျဦးနှောက်မြူသူကပြောတယ်။ fucking relapses ။
အားလုံးရဲ့အဆိုးဆုံးအပိုင်းကမင်းဘယ်တော့မှ ဦး နှောက်မြူခိုးတွေကျနေတာကိုဘယ်တော့မှမခံစားရဘူးဆိုတာပါဘဲ။ ငါပြန်ပြောင်းပြောလိုက်တယ်၊ ဒါကနောက်ဆုံးအကြိမ်ပဲ” ထိုအခါငါကငါ့စနစ်ကထဲကရတဲ့နှင့်အမှန်တကယ် No Fap လမ်းကြောင်းအပေါ်ပြန်လာတဲ့အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဂုဏ်ယူနီးပါး။
ပြီးတော့ငါဘဝမှာရှေ့ကိုပြေးထွက်လာပြီးရက်အနည်းငယ်လောက်ပဲလှည့်ထွက်သွားတယ်၊ ငါပင်ပန်းနေပြီ၊ ငါတစ်ယောက်တည်းခံစားရတယ်၊ ငါတစ်ယောက်တည်းရှိနေတယ်။ Dammit ။
နောက်ကျောနေ့ 1 ရန်။ ပြန်ဦးနှောက် Fog novacane ရန်။
ကျောင်းသားတစ်ဦးအဖြစ် nofap နဲ့ငါ့အတွေ့အကြုံကို။
ငါ ၁၀ ရက်သာရှိသေးသည်ကိုသိသောကြောင့်၎င်းသည်မှတ်တိုင်မှတ်တိုင်တစ်ခုမဟုတ်ပါ။ သို့သော်ယင်းသည်မည်သည့်အရာဖြစ်ကြောင်းမမေ့မီ၎င်းကိုရေးရန်လိုအပ်သည်ဟုခံစားခဲ့ရသည်။
ကျွန်ုပ်အသက် ၂၄ နှစ်ရှိပြီ၊ အနည်းဆုံး ၅ နှစ်ကြာအောင်သင်ကိုယ်တိုင်ယောက်ျားများမတွေ့မချင်းအောင်မြင်မှုမရရှိဘဲ ၂ နှစ်တာလုံးကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ရပ်တည်ရန်ကြိုးစားနေသည်။ သငျသညျမြားစှာသောထောကျပံ့မှုမြားရှိခဲ့ပွီးလတ်တလောကျွန်ုပ်ဤတွင်ဤတွင်တက်တက်ကြွကြွပါဝင်ခဲ့ရခြင်းမှာ fap ရန်လိုအပ်သည်ဟုခံစားရသည့်အခါတိုင်းဤအရာကိုငါအဘယ်ကြောင့်ဤသို့လုပ်သည်ကိုသတိမပေးမှီတိုင်အောင်ဤေနရာသို့ပြန်လာပြီးစာမူအနည်းငယ်ကိုဖတ်ရှုခြင်းဖြစ်သည်။ ။
သူတို့ရဲ့စူပါပါဝါတွေအကြောင်းပြောနေတဲ့လူတွေဟာသူတို့ကို nofap မတိုင်ခင်ကအပြင်ကနေစွမ်းရည်အချို့လိုဆက်ဆံခဲ့ကြပေမယ့်သူတို့ဟာ PMO မှာသူတို့ရဲ့စွမ်းအင်ကိုဖြုန်းတီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေတစ်လျှောက်မှာသူတို့တွေသီးခြားဖြစ်နေတာကိုမသိခဲ့ပါဘူး။
ငါပြန်လာသောစူပါပါဝါသည်ကျွန်ုပ်ရင်ဆိုင်ရသောစိန်ခေါ်မှုများနှင့် ပို၍ သဟဇာတဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပြီးအခြေအနေနှင့်ပတ်သက်သောအကြောင်းအရာအားလုံးကိုပေးပါမည်။ ကျွန်ုပ်သည်အင်ဂျင်နီယာကျောင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးစက်တင်ဘာလမကုန်မီစာမေးပွဲများ၊ တာ ၀ န်များနှင့်အမြဲတမ်းပင်ပန်းနေပြီးဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာကျွန်တော့်ကိုအမြဲတမ်းငြီးငွေ့ခဲ့သည်။
ငါ nofap စလုပ်ကတည်းကငါကွဲပြားခြားနားသောအရာတို့ကိုအပေါ်ယူရှိသည်။ ငါကပိုပြီးကြံဖန်ငါပိုကြံဆတီထွင်မှု။ ငါတစ်ခုခုမသိသောအခါငါထိတ်လန့်မဟုတ်။ ငါအကောင်းမြင်သမားဘယ်တော့မှမဖြစ်၊ ဒီသင်တန်းကိုငါမမှတ်မိသောကြောင့်ငါဒီအောင်မြင်မှုမရတော့ဘူးလို့ထင်တဲ့အချိန်မှာစာမေးပွဲမှာအမြဲတမ်းအမှတ်ရမိတယ်။ fapping မတူတဲ့ခြားနားချက်ကကျွန်တော့်ရဲ့အတွေးကိုပြောင်းလဲစေခဲ့တယ်။ ငါရှုံးစရာဘာမှမရှိဘူး” ဘာလို့ထင်လဲ? အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးငါကအရာရာကိုပုန်းလျှိုးကွယ်လျှိုးမနေနိုင်တော့ဘူး၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါ့ရဲ့စမ်းသပ်မှုတွေနဲ့ဖြတ်တောက်မှုတွေကကောင်းတယ်။ ငါနောက်ဆုံးတော့အင်ဂျင်နီယာတစ် ဦး နဲ့တူစဉ်းစားပါ။ နောက်တစ်ခုကငါမှာစွမ်းအင်တွေအများကြီးရှိတယ်။ စင်စစ်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်အနားယူချိန်၌ခံစားချက်ထက်စာမေးပွဲအတွက် all-nighter ဆွဲပြီးနောက် ပို၍ အနားယူရသည်ဟုခံစားရသည်။
ဒီကိုလာရတာဟာကျွန်တော့်အတွက်အရမ်းခက်တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ ညလောက်ကနောက်နေ့မနက်မှာစာမေးပွဲမတိုင်မီငါ့မှာပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်တွန်းချက်တွေရှိတယ်။ ၁၅ မိနစ်တိုင်းမှာဒီ porn flashbacks တွေကိုကျွန်တော်ရယူခဲ့ပြီးနောက်တစ်ခါ nofap ကိုသွားခဲ့ရလို့ဘာမှမလေ့လာခဲ့ပါဘူး။ တကယ်တော့အရမ်းစိတ်မကောင်းဖြစ်လို့စာမေးပွဲသွားတဲ့အခါငါအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာပြတ်တောက်သွားတယ်။ အနည်းဆုံးတော့တိုက်တွန်းမှုတွေပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မယ်။ တစ်ညလုံးကိုယ့်ကိုယ်ကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းမှစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယုတ်လျော့သွားသည်ဟုခံစားရသော်လည်းကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုအလိုက်သင့်ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်ခြင်းကြောင့်အောင်မြင်ခဲ့ပြီး၊ ကျွန်ုပ်နှစ်သက်သောမိန်းကလေးနှင့်ယခုအချိန်အထိအကောင်းဆုံးသောအခမ်းအနားကိုကျင်းပခဲ့ခြင်းဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်စိတ်မဝင်စားသောကြောင့်ကျွန်ုပ်စိတ်မဝင်စားပါ။ သူမကကျွန်တော့်လိဂ်ထဲကနေထွက်လာပြီးသူမနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလေးအနက်မထားနိုင်ဘူးလို့ထင်ခဲ့တယ်
အဲ့ဒီအကြောင်းနှင့်ဆက်စပ်ပြီး, ထိုညဉ့်ကြီးမားသောတိုက်တွန်းမှုများကိုခုခံတွန်းလှန်ပြီးနောက်ငါထိနှင့်ပွေ့ဖက်ဘို့အလွန်ပြင်းပြင်းထန်ထန်လိုအပ်ချက်ခံစားရတယ်။ ဒါကကျွန်မရဲ့လူမှုရေးစိတ်ပူပန်မှုခံစားနေရတဲ့တစ်စုံတစ်ယောက်အတွက်ဒါဟာကြီးမားတဲ့အရာတစ်ခုပါ။ ပြီးတော့ကျွန်မတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့အရမ်းတော်ပါတယ်။ ငါကအလွန်အကျွံလွန်ပြီနိုင်ပေမယ့်သူမစိတ်ထဲမထင်ခဲ့ပေ။
နိဂုံးချုပ်အနေနဲ့၊ ငါဟာရက်ပေါင်း ၉၀ အထိကြာအောင်လုပ်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်၊ အထူးသဖြင့်ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာဒီလိုလူမှုရေးလက်ဆောင်ပစ္စည်းအနည်းငယ်ရဖို့ဆိုရင်။ နောက်ဆုံးတော့ငါ fapping မစခင်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ brainiac ဆီကိုပြန်လာခဲ့တယ်။
ဘယ်လောက်ပဲဆိုးဆိုးပါစေယောက်ျားတွေဘယ်တော့မှအရှုံးမပေးပါနဲ့။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်သန့်ရှင်းနေခြင်းမှရရှိသောအာရုံကိုသင်အံ့အားသင့်စေလို့ပဲ။ ဤအရာသည်အင်အားကြီးမဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည် PMO ကြောင့်သင်ဖြစ်လာသည့်အရိပ်မှပေါ်ထွက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ တုန်လှုပ်ချောက်ချားနေဆဲဖြစ်သော်လည်းသူတို့သည်သင့်အားအော်ဟစ်ကြတော့မည်မဟုတ်။ မင်းရဲ့စွမ်းအားကိုအသုံးချတိုင်းသူတို့ကပိုပြီးတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သွားမယ်။ မင်းရဲ့စိတ်ကိုထိန်းချုပ်ပြီးပြန်ပိတ်လိုက်ပါ။
အဆိုပါ firelord အနိုင်ယူ: 60 နေ့အဘယ်သူမျှမ FAP, ခြေလှမ်းနှစ်ခုကိုအောင်မြင်
အဘယ်သူမျှမ fap ဖှယျဖြစ်ပါတယ်။ ရက်ပေါင်း ၆၀ ကြာအငြင်းပွားမှုမရှိခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်သည်“ စူပါပါဝါများ” သည်လှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုအတွက်မျှသာဖြစ်သည်။ အဲဒါဟာကျွန်တော့်ကိုပိုပြီးရည်မှန်းချက်ကြီးစေတယ်၊ ​​အဲဒါကငါ့ကိုထွက်ချင်အောင်လုပ်တာ၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တိုးတက်အောင်လုပ်ချင်တယ်၊ ၎င်းသည်ကောင်းမွန်သောမှတ်ဉာဏ်ကဲ့သို့ကောင်းကျိုးများစွာရရှိစေသည့်ကောင်းမွန်သောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိခဲ့သော်လည်းကျွန်ုပ်၏မှတ်ဉာဏ်မကောင်းသောကြောင့်အမှန်တကယ်တွင်အလွန်စွမ်းအားကြီးနိုင်သည်။ ကိုယ့်ငါခံစားရတယ်ဘယ်လိုဖော်ပြရန်ခဲ့လျှင်။ ဒါကငါ့အရှည်ဆုံးအရာဖြစ်တယ်။ ငါပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တစ်လလောက်ကြိုးစားခဲ့တယ်။ ငါမအောင်မြင်ခဲ့ဘူး၊ အခုငါလုပ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိပြီ။
ကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံးအောင်မြင်သော 90 ရက်ကြာပြေးဒါဟာ ME ADHD ပေးခဲ့တယျ, ဒါလုံးဝစဉ်အတွင်း (နှင့်ပြီးနောက်) ပိုကောင်းတယ်။
နောက်တခါ xD ပြောတဲ့အင်တာနက်ပေါ်ကလူတစ်ယောက်ပေါ့
NoFap (Data) ကျောင်းတွင်မတ်ငါ့ကိုအောင်မည်အကြောင်းတည်း
အတိတ် 12 ရက်ပေါင်းကျော်ဘာမျှငါ့ကို fapping မဟုတ်ထက်အခြားပြောင်းလဲသွားပြီ
အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်နှစ်ဦးစလုံး (သင်ယောက်ျားတွေဟာဦးနှောက်ကိုမြူသွားကြောင်းဆိုဘယ်လောက်လိုမျိုး) တိုးလာကြပါပြီ
ကတိုက်ဆိုင်မှုသို့မဟုတ်ရလဒ်များအရအိပ်ယာဖြစ်လိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမျှမ fuck ဆိုတဲ့ပေးထားပြီ
ပဟေဠိ 1 = fapped ပဟေဠိမီ, ပဟေဠိ2NoFap ၏နေ့9=
အစိမ်းရောင် = ငါ၏အရမှတ်, အပြာ = လူတန်းစားပျှမ်းမျှ
ဖုန်းနှင့်အတူကောင်လေးသတ္တုတွင်း၏မိတ်ဆွေတစ်ဦးဖြစ်ပြီး, သူကရည်းစားရှိပြီးပေမယ့်သူက porn သို့အမှန်တကယ်ဖြစ်ပါသည်။ သူကဦးနှောက်မြူ (သူခြုံငုံတစ်ဦးတော်တော်လေးကောင်းသောကျောင်းသားဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့သူကစမ်းသပ်မှုအပေါ်အနိမ့်တန်းရရှိသွားတဲ့) ၏ပြီးပြည့်စုံသောသာဓကဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်မလည်းမကြာခဏစမ်းသပ်မှုကျရှုံးဖို့အသုံးပြုပေမယ့် NoFap ပြီးနောက်အများကြီးပိုကောင်းတယ်, မသာသောကွောငျ့ကြှနျုပျ၏စိတျနှလုံး၏ပြတ်သားဖြစ်ခြင်း, ဒါပေမယ့်လည်းငါပိုကောင်းတဲ့လူတစ်ဦးကိုသင်ယူနှင့်ဖြစ်အများကြီးပိုလှုံ့ဆျောမှုရကြပြီ။ ငါထွက်အလုပ်လုပ်, ဆငျခွငျနှင့်သည်အခြားနေ့ကအအေးမိရေချိုးခန်းများ (ကျနော်ကျောင်းမှအိမ်ပြန်ပင်ပန်းလာလျှင်ပင်; ကငါ့နောက်စွမ်းအင်အပြည့်အဝခံစားရစေသည်) ။ ငါခြုံငုံ, ငါ့တိုးတက်မှုနှင့်အတူတကယ်ပျော်ရွှင်မိပါတယ်။
nofap တစ်ခု unexplainable ပေမယ့်တကယ်ကြောက်မက်ဘွယ်အကျိုးအတွက်!
အကြှနျုပျ၏စာဖတ်ခြင်းမြန်နှုန်း increases.Like ငါပိုက်ကွန်ကိုတခုတခုအပေါ်မှာဆောင်းပါးကိုဖတ်ရှုမှန်လျှင်, ကိုယ့်နည်းသည်အရေးကြီးသောစကား, ကြိယာသို့မဟုတ် preposition ရှေ့ဆက်လျစ်လျူရှု, မြေတပြင်လုံးလိုင်းကျော်ယူသွားနှင့်နေဆဲစာရေးဆရာမလို့ပြောဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်ပါတယ်အရာကိုအကောင်းတစ်ဦးသဘောပေါက်နားလည်နိုင်စွမ်းရှိလိမ့်မယ်။
ဤသည် nofap ၏အကြောင်းကို7ရက်အကြာမှာဖြစ်ပျက်စတင်သည်။
dopamine receptors, လေ့လာနေအပေါ်သက်ရောက်မှုတိုးတက်အောင်ဖြစ်ကြောင်း Sign
၎င်းသည်အရူးဖြစ်၏။ သို့သော်ငါနေ့စဉ် PMO ဖြစ်သည့်အချိန်မတိုင်မီကျွန်ုပ်၏စာရင်းကိုင်အတန်းများအတွက်စာရင်းကိုင်ပြproblemနာများကိုလုပ်ဆောင်ခြင်းသည်အမှန်တကယ်ပင်ခက်ခဲလိမ့်မည်။ ငါဒီမှာ (ငါ့အရှည်ဆုံးငါ၏နောက်ဆုံးအရှည်) အနည်းငယ်သာ Streak တည်ဆောက်ခြင်းစတင်ခဲ့ပြီးနှင့်အမျှဒါဟာငါ့အလူတန်းစားတာဝန်ကျတာမှကောင်းသောခံစားရသည်။ ငါသူတို့ကိုလုပ်ဖို့ဖိအားခံစားရ, အချိန်ဆွဲနေတဲ့ပြင်းထန်သောခံစားချက်ရှိပါတယ်, ငါ့ကိုစတင်ရန်တွန်းအားပေး။ ငါစတင်ရန်မဖိအားခံစားခဲ့ရမီ။ ငါသူတို့အပေါ်မှာအလုပ်လုပ်သောအခါငါစိတ်သက်သာရာရစတင်, ငါတာဝန်ကျတဲ့နေရာပြီးသွားတဲ့အခါကြီးမြတ်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ ငါတာဝန်ကျေပွန်လျှင်ငါဘာမျှမခံစားရဘူး, အောင်မြင်မှုမရှိအသိ, ထုံခြင်းရုံ။ ဒီဟာက NoFap နဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိလားဆိုတာမသေချာပေမဲ့၊ ဒီခံစားချက်ဟာအရူးပဲ၊
NoFAP = GPA 4.0 & တစ်ဝက်မာရသွန်
ခေါင်းစဉ်မှာပါတဲ့သူများကကျွန်တော့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်အသစ်များ၊ ကျွန်ုပ်သိသည်မှာ Nofap စိန်ခေါ်မှုကိုအနိုင်ရမှသာကျွန်တော်သူတို့ကိုလုပ်နိုင်မှာပါ။ လွန်ခဲ့သောလအနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်သည် NoFap တွင်ရှိနေခဲ့ပြီး၊ ကျွန်ုပ်သည်အစွမ်းထက်သောစိန်ခေါ်မှု၌ရှိစဉ်ကကျွန်ုပ်သည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိ 5th တက္ကသိုလ် (ဆေးပညာ) တွင်အလုပ်သင်ယူခဲ့ပြီး Med ကျောင်းသို့တက်ခဲ့သည်။ ပြေးရန်အချိန်နှင့်ငါအလွန်မြန် 12K ကို run ဖို့စီမံခန့်ခွဲ။ Med ကျောင်းမှာစိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်စေပြီးငါထပ်ခါတလဲလဲဖြစ်သွားတဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုဖြစ်စေတယ်၊ ​​ရလဒ်လား။ ကျွန်တော့် GPA က ၃.၅ အထိကျသွားပြီးကျွန်တော့်ခန္ဓာကိုယ်ကအရမ်းအားနည်းနေပါတယ်။
ဒုတိယအကြိမ် fapping ပြီးနောက်ယနေ့ငါရုတ်တရက်“ ဘာလုပ်နေလဲ !!!” “ ကမ္ဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံးဆုကျေးဇူးတွေရဖို့ကျွန်တော်ဒီအခွင့်အရေးကောင်းရရှိခဲ့ပါတယ်၊ ကျွန်တော်အမြဲတမ်းလုပ်ချင်တဲ့အလုပ်တစ်ခု၊ Med ကျောင်းတက်တုန်းကကလေးလိုငိုခဲ့မိတယ်၊ ဒီအလုပ်ကိုလုပ်ရတော့မယ်၊ အခုငါမိုက်မဲတဲ့ညစ်ပတ်စေတဲ့အကြောင်းတရားကိုထိုးဖောက်လိုက်တယ်။ ငါကလူတွေကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်ဖို့ထင်တယ် !! ညစ်ညမ်းမှုကဒီကမ္ဘာပေါ်မှာအလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေကိုရောငါတို့စားသုံးသူတွေကိုပါထိခိုက်စေတယ်။ ဒါကြောင့်ငါဟာပြေးနေတဲ့ဖိနပ်နဲ့အပြေးအကျီကိုဆုပ်ကိုင်ပြီးအပြင်ထွက်ပြီးအရမ်းမြန်ပြေးခဲ့တယ်! ငါအသက်ရှင်လျက်ခံစားခဲ့ရသည့်သဘောသဘာဝ, ဘဝ, နာကျင်မှု, လေအရမ်းလေးစားမိပါတယ်!
အပြင်ဘက်တွင်ဤအရာများရှိပါကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကြည့်သည့်ကွန်ပျူတာရှေ့တွင်ကျွန်ုပ်၏ဘ ၀ ကိုမည်သို့ဖြုန်းတီးနိုင်သနည်း။ ဘဝဟာငါ့ကိုဝိုင်းရံနေချိန်မှာ! ကျွန်ုပ်၏အစီအစဉ်သစ်မှာ GPA ကို ၄.၀ သို့ထပ်မံယူပြီး Half Marathon ကိုစတင်ရန်ဖြစ်သည်။ သင်စိတ်ဓာတ်ကျနေသည်ဟုခံစားရပါကပြင်ပသို့ထွက်သွားပါသို့မဟုတ်လမ်းလျှောက်ကာသင်နှင့်သင့်ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိဘဝကိုခံစားရလိမ့်မည်။ ကျနော်တို့ကယောက်ျားတွေလုပ်နိုင် !!! http://imgur.com/4.0ZUs0p ဒီလင့်ခ်တွင်ယနေ့ကျွန်ုပ်လေ့ကျင့်ပြီးသည့်နောက်ကျွန်ုပ်၏ပုံသဏ္,ာန်အလယ်ရှိကျွန်ုပ်၏အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံအနီးတွင်ရှိနေသည်။ my (ကျွန်ုပ်၏စာအရေးအသားကြောင့်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရသည်။ ငါ့ဦးနှောက်)
ငါအသက် ၁၇ နှစ်တောင်ရှိသေးတယ်၊ အခုဒီပြproblemနာကိုတစ်နှစ်လောက်လောက်ရှိပြီ။ ငါဘာမှမမှတ်မိနိုင်ဘူး ပိုကောင်းတဲ့မှတ်မိနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါမှတ်မိတာကငါထက်အသက်ကြီးတဲ့လူတွေထက်ပိုတိုတယ်ဆိုတာတွေ့ရှိခဲ့တယ်။ အခုတော့ငါသဘောပေါက်လာပြီ၊ ငါ့ပြproblemနာကသတိမထားမိပဲ၊ တကယ်တော့အဲ့ဒီမှာရှိနေတယ်၊ ​​အာရုံစူးစိုက်နေတယ်၊ ​​သတိထားမိလိုက်တာသတိမပြုမိအောင်လုပ်တာ၊ ရုပ်ရှင်ကြည့်တာ၊ သင်အမှန်တကယ်ပင်စိတ်ပိုင်း၌မရှိသည့်အခါသင်တစ်ခုခုမှတ်မိနိုင်ပါသလား။ ငါလှည့်ပတ်သွားလာရမယ်၊ စာသင်ခန်းတစ်ခုကနေစာသင်ခန်းကိုသွားမယ်၊
ငါမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ fuck ဆိုတဲ့ဖုတ်ကောင်ခဲ့ကြောင်းယခုငါနားလည်သဘောပေါက် ငါ nofap စလုပ်ကတည်းကငါပိုပြီးယခုအချိန်တွင်အတွက်ဖြစ်စတင်နေပြီနဲ့တူငါခံစားရတယ်။ ကျွန်ုပ်ရေးသောအရာများကိုသတိရှိရှိကြည့်သည်၊ ကြားသည်၊ လုပ်သည်၊ ပြောသည်။ ငါခန်းမတွေ၊ သူငယ်ချင်းတွေ၊ သူစိမ်းတွေကိုတောင်ဖြတ်လျှောက်တဲ့အခါလူတွေကိုမြင်တယ်။ သူတို့ကိုငါပြုံးပြုံးလေးပြောလိုက်တယ်။ ယနေ့ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ဟန်အနေအထားကို ပို၍ ပင်စဉ်းစားသည်၊ ကျွန်ုပ်သည်လူတို့အားစကားပြောသောအခါ၌လည်းကောင်း၊ ကျွန်ုပ်တစ် ဦး တည်း၌ပင်သော်လည်းကောင်းကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ခန္ဓာဘာသာစကားကိုစဉ်းစားသည်။ ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်စိတ်ကျန်းမာရေးကိုအထူးအလေးအနက်ထားသည်၊ ကျွန်ုပ်၏ ဦး နှောက်သည်အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်လိုသည်။ ငါအသက် ၂၀ အရွယ်မှာအယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါတစ်ခုခုကိုကြောက်မှာကြောက်တယ်။
အခုအသက် ၂၀ နှစ်မှာ PMOed ကိုလေးနှစ်တာမလုပ်ရင်ငါ့ ဦး နှောက်ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်ရမယ်ဆိုတာအံ့သြစရာကောင်းလိုက်တာ။
သင့်ရဲ့မှတ်ဉာဏ်ပြဿနာ fixed- ဖြစ်ပေမယ့်သင်ဟာပထမဦးဆုံးအညစ်ညမ်းမှတ်မိနေလိမ့်မည် warned- ဖြစ်လိမ့်မည်။
လူတွေအများအပြားကလူ nofap start အဓိကအကြောင်းရင်းများတဦးဖြစ်သည့်ဦးနှောက်မြူနှင့်မှတ်ဉာဏ်မရှိခြင်း, တွေအကြောင်းညည်းညူ။ ပြည်သူ့ဆိအဖြစ်မယုံနိုင်လောက်အောင်စမတ်နှင့်အမြင်ဖြစ်ခြင်းသတိရဖို့အသုံးပြုများနှင့် nofap နောက်တစ်ကြိမ်ကြောင့်အဆင့်အထိပြန်လည်ထူထောင်၏ငရဲ၌တစ်ခုတည်းသောအခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ ၆ ရက်နေ့မှာငါသဘောပေါက်ခဲ့တယ်…မင်းက porn ကိုစပြီးမှတ်မိလိမ့်မယ်။ သင့် ဦး နှောက်သည်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကစာသားအတိုင်းသင်ကြည့်ရှုခဲ့သောမြင်ကွင်းများကိုဆွဲထုတ်ရန်စတင်လိမ့်မည်၊ ရှေးအချိန်များကကြည့်ရှုရန်သို့မဟုတ်လွမ်းဆွတ်မှုကိုခံစားရန်အတွက်၎င်းကိုထပ်မံရှာဖွေရန်လှည့်စားရန်အခွင့်အလမ်းတစ်ခုအတွက်စတင်လိမ့်မည်။
အဲဒါ Fuck ဒီဟာကထပ်ခါတလဲလဲပြန်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး၊ သင့်မှတ်ဥာဏ်ပြန်လာနေသည် သင်သည်အလုပ်ခွင်၌အရေးကြီးသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များ၊ သင်္ချာအတတ်ပညာဆိုင်ရာဖော်မြူလာများ၊ နိုင်ငံခြားဘာသာစကားအတန်းများရှိဘာသာစကားပုံစံများ၊ လူများ၏အမည်များ၊ မျက်နှာများ၊ သင်ကြိုက်နှစ်သက်သည့်ထိုမိန်းကလေး၏အနံ့ကိုစတင်မှတ်မိလိမ့်မည်။
ဤအရာကိုသင်တွေ့ကြုံခံစားနိုင်ပြီးအနာရောဂါပျောက်ကင်းစေသောလက္ခဏာအဖြစ်ယူမှတ်ပါ။ ထိုမြင်ကွင်းကိုသတိရပါ၊ သို့သော်၎င်းကိုထပ်မံမရှာဖွေပါနှင့်။ ဤသည်နောက်ထပ်ဆုတ်ခွာလက္ခဏာလက္ခဏာနှင့်ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သော်လည်းလိုအပ်သောကုသမှုလုပ်ငန်းစဉ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
သင်ထိုသို့မထင်လျှင်ပင် ဦး နှောက်မှေးမှိန်ခြင်းသည်သင်၏ Streak တွင်တစ်နေ့လျှင်တစ်နေ့တိုးတက်လာသည်။
ဒီတော့ ၂ ပတ်လောက်လမ်းလျှောက်ပြီးသွားရင်ငါဟာ ဦး နှောက်နေမြဲဖြစ်နေဆဲ၊ ကံမကောင်းစွာပဲ, ငါနေ့လယ်ပိုင်း၌ပြန်လည်အသက်ပြန်ရှင်ခဲ့သည်။ သို့သော်, ငါ့ပုံမှန်အတိုင်းညဥ့်ပြန်သွားနှင့်မတူဘဲ, ငါနေဆဲလုပ်ဖို့အလုပ်ရှိခဲ့ပါတယ်။
ငါသည်အဘယ်သို့သတိပြုမိ? တစ်ဦးကိုချက်ချင်း relapse ပြီးနောက် (သာ MIN 30!) ဦးနှောက်မြူအများဆုံးအစွမ်းသတ္တိကိုဝင်တိုက်မည်! သန့်ရှင်းသောဘုရား Shit, အမှုအရာငါနှေးပြကွက်များတွင်ရွေ့လျားခဲ့သည်တူသောလူတိုင်းပုံမှန်မြန်နှုန်းမှာရွေ့လျားနေစဉ်ကခံစားရတယ်, မြူဆိုင်းသလိုခံစားရတယ်။ (က 5x ကမ်ဘာပျေါတှငျ .1x ဖြစ်ခြင်း၏ထင်) ။ ညံ့ဖျင်းသော, မေ့လျော့, ရယ်စရာစာလုံးပေါင်းအမှားများလာတော့သည်။
အမှတ်လား ဦး နှောက်မှေးမှိန်ခြင်းဟုမထင်ရသော်လည်းမည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ အဲဒါကိုငါ့ဆီကယူလိုက်ပါ ဦး ။ အလုပ်ခွင်ထဲမှာ ဦး နှောက်မြူရဲ့စွမ်းအားအပြည့်ကိုငါတွေ့ခဲ့တယ်။ မကောင်းဘူး
အိုကေ၊ လေ့လာနေစဉ်အာရုံစူးစိုက်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောအခြားအဓိကအချက်များရှိပါသလား။ ဒါကြောင့်လုပ်နေတာစဉ်ဇွဲအဖြစ်? ၁၅ မိနစ်ကနေ ၂၀ မိနစ်လောက်စာမဖတ်ခင်လိုပဲကျွန်တော်တစ်နာရီလောက်အနိမ့်ဆုံးဖတ်နိုင်ပါပြီ။ ဒါဟာကျွန်တော့်ရဲ့ ၁၁ ရက်မြောက်နေ့ဖြစ်ပြီး၊ ဒီနေ့ငါသတိထားမိခဲ့တဲ့အကြီးမားဆုံးနှင့်အကောင်းဆုံးကွာခြားချက်ပါ။
တစ်လ, brainfog သွားပြီ - သေး flatline နေဆဲဖြစ်သည်
သင်တို့ထဲကတချို့ဟာငါ့ကိုသိပြီးသားဖြစ်ပေမယ့်အချို့ကတော့မသိဘူး။ ဒါပေမယ့်ငါ PMO စွဲလမ်းမှုကိုအနည်းဆုံး ၂ နှစ်လောက်တိုက်ခိုက်နေတယ်။ တစ်ချိန်က၎င်းကိုရက်ပေါင်း ၆၀ (ပြန်လည်အသက်သွင်းခြင်း) ဖြင့်ပြုလုပ်ပြီး ၁၁၈ ရက် (ပြန်လည်အသက်သွင်းခြင်း) ဖြင့် ၆၅ ရက် (ပြန်လည်အသက်သွင်းခြင်း) ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ဒါကြောင့်ငါဒီတိုကျပှဲတှငျအခြို့သောအတွေ့အကြုံရှိသည်ဆိုသညျကားရန်၎င်း၏တရားမျှတတဲ့ထင်, ငါသည်ကိုယ်အခြားသူတွေကိုထုတ်ကူညီပေးဖို့, တစ်ဦးကြီးတွေအစ်ကိုကို restart အတွက်ဝါရင့်စဉ်းစားပါ။
နောက်ဆုံးတစ်လ။ ကွဲပြားခြားနားမှုများမှာအလွန်ကြီးမားသည်၊ PMO စွဲလမ်းမှုသည်အမှန်တကယ်ပင်ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော့် ဦး နှောက်ထဲမှာမြူသွားတဲ့အလားငါဟာပုံမှန်လို့ခံစားရတယ်။ ရက်အနည်းငယ်အတွင်းကျောင်းစဖွင့်သည့်အတွက်ကျွန်ုပ်၏တရားရုံးရက်စွဲအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ငါခဏတစ်ဖြုတ်ထောင်ထဲသွားရလိမ့်မယ်။
Brainfog ရုံဦးယေဘုယျအားဖြင့်စိတ်ဓာတ်ကျစေသည်, PMO စွဲနှင့်ဆက်စပ်အဆိုးဆုံးအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်သည် flatline တွင်ရှိနေဆဲဖြစ်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်သည်အနည်းဆုံးနေ့ ၅၀ မှ ၇၀ အထိဖြစ်မည်၊ fapstronaughts နှင့်မတူသည်မှာ flatline သည် rebooting လုပ်ငန်းစဉ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးကြောက်စရာအကြောင်းမရှိပါ။
ကောင်းအဆင့်စေချင်သလား? NoFap ။
ငါဒီ post ကိုတောင်းစားခြင်းမှရှင်းရှင်းလင်းလင်းသွားပါလိမ့်မယ်။ ငါဝါကြွားခြင်းမဟုတ်ပါ၊
ထို့ကြောင့် NoFap သည်သင်၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှင်းလင်းမှုကိုတိုးပွားစေသည်။ ငါအတွက် ၂၄ ရက်ရှိပြီ။ ငါဘာသာရပ်အပေါ် 24 နာရီလေ့လာနိုင်ခဲ့သည်။ ယနေ့ကြီးမားသောစမ်းသပ်မှုတစ်ခုကိုရေးခဲ့သည်။ အဲဒါ SMASHED ။ 13/100 (အလေးအနက်) ။ NoFap သည်လေ့လာမှုပြုရန်နှင့်သင်၏အာရုံစူးစိုက်မှုကိုတိုးမြှင့်သွားမည်။ မယုံကြည်သူများအတွက် NoFap ကိုစမ်းကြည့်ပါ။ ဒီဖိုရမ်မှာငါတို့မလိမ်ပါဘူး လေးစားစွာဖြင့်။
အားလုံး 14 မင်္ဂလာပါ ငါသာ PMO မသွားပြီးနောက်ငါ Uni အလုပ်အပေါ်ဤမျှလောက်ပိုပြီးအာရုံစူးစိုက်မှုထားနှင့်မမှန်ကြောင်းလွယ်ကူစွာသတင်းအချက်အလက်အများကြီးကိုစုပ်ယူနိုင်ပါတယ်ပြောချင်တယ်။ ငါ့ ဦး ခေါင်းကပိုပြီးရှင်းလင်းတယ်၊ ငါလေ့လာသင်ယူရတဲ့အရာအများစုကတော့ငါ့ရဲ့ခေါင်းထဲမှာရှိနေတယ်။ စာမေးပွဲတိုင်းကိုအဆက်မပြတ်အောင်ပြီးဆုံးသူတစ် ဦး အဖို့ဤခံစားချက်သည်လက်တွေ့မကျပါ။ လာမယ့်သီတင်းပတ်မှာစာမေးပွဲတွေရပြီးကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမလေ့လာနိူင်တဲ့လေ့လာမှုပမာဏကိုရခဲ့တယ်။
အစဉ်မပြတ်ငါ fapping တက်အဆုံးသတ်ပြီးတော့နေ့၏ကျန်များအတွက်လှုံ့ဆျောမှုဆုံးရှုံးပြီးတော့မနက်ဖြန်စတင်ပါလိမ့်မယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြောပြပါ။ ငါယနေ့ ၁၂ နာရီတွင်ပြန်လည်တည်းဖြတ်ခြင်းစတင်ခဲ့ပြီး၊ ယူကေတွင်ည ၇း၃၀ နာရီဖြစ်သည်။ ငါစာမေးပွဲတွေတက်လာပေမဲ့ငါ့ရဲ့ ဦး ခေါင်းကပိုသန့်ရှင်းလတ်ဆတ်လွန်းတယ်၊ ငါ့ဘ ၀ မှာပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်စာသင်ကြားနေတယ်လို့ခံစားရတယ်။ ကျွန်တော်အစောပိုင်းကလုပ်ခဲ့သင့်ပါတယ်
ဦးနှောက်လေ့လာ Fog နှင့်စမ်းသပ်မှု
ဒါနဲ့ No-Fap ကိုပြန်လုပ်ပြီး (၅၆ ရက်ဆက်တိုက်) ။ ငါပြန်ဖြစ်သွားပြီ၊ WAY မှာ ဦး နှောက်မြူလွန်းတာ၊ လေ့လာတာကိုအာရုံစိုက်လို့မရဘူးဆိုတာမှတ်မိသေးတယ်။ ငါအခု ၁၈ ရက်ရောက်နေပြီ။ အဆိုပါစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားရယ်စရာပါ! ငါမနေ့ကမရေမတွက်နိုင်တဲ့နာရီတွေကိုလေ့လာခဲ့တယ်။ ဒီနေ့ငါကြီးကျယ်တဲ့စမ်းသပ်မှုတစ်ခုလုပ်ခဲ့တယ်။ No-Fap သည် ဦး နှောက်မြူပျောက်ကွယ်စေသည်။ No-Fap စတင်ရန်နောက်ထပ်ကောင်းသောအကြောင်းပြချက်။ ၎င်းသည်သင့်အားထိုစွမ်းအင်အပိုများနှင့်များစွာပိုမိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေသည်။ ဆင်ခြေမလိုချင်ဘူး။ အားတင်းထားသည်။
ကျွန်ုပ်သည်ခုနစ်ရက်မြောက်နေ့တွင် ဦး နှောက်မြူထွက်သွားသည်ကိုသတိပြုမိသည်။ PMO ပြီးတဲ့အခါကျွန်မစိတ်ဟာအပိုင်းအစတစ်သန်းခွဲကွဲသွားသလိုခံစားရတယ်။ အခုတစ်ခုပဲရှိတယ်။ ကျွန်တော့်စိတ်အေးဆေးတည်ငြိမ်ပြီးအာရုံစိုက်ရတာလွယ်ကူတယ်။
မျှော်လင့်အခြားသူများကိုလှုံ့ဆျောမှုအတိုင်းဤသုံးနိုင်သည်။ ငါ 30ish ရက်ပေါင်းမှာဖြစ်ကြောင်းကိုသူ, နောက်ဆုံးသောစုံတွဲရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းဤသုံးပါးအတွက်ကြီးမားတဲ့တိုးသတိပြုမိကြပါပြီတံဆိပ်လျစ်လျူရှုပါ။ အထူးသသစ်ကိုသတင်းအချက်အလက်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်နှင့်ကျွန်မသင်ယူနေပါတယ်ဘာသာစကားအသစ်ဘာသာစကားသဘောတရားများကိုဆုပ်ကိုင်ငါ့စွမ်းရည်ပါ။ ဒါဟာယောက်ျားတွေကယ့်ကိုစောင့်ရှောက်လုံးဝတန်ဖိုးရှိပဲ!
ကျွန်မအလွန်ခက်ခဲစဉ်းစားနဲ့ကျွန်မဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အားလုံးစိတ်ဖိစီးမှု၏စာသားငိုနှင့် fapping ၏ခါနီးပေါ်ခဲ့ကြောင်းကျောင်းကို၌ငါ့စီမံကိန်းကိုလုပ်နေတာခဲ့သည်။ porn မှငါ့ကံနဲ့ကကြားနေဖို့, ငါသည်ယခု 8 / 10 ငါ၏အစီမံကိန်း၏ NoFap ကျေးဇူးတင်လက်စသတ်နေပါတယ်။ ငါ FAP လုပ်ခဲ့တယ်လျှင်တဖန်ငါ့ကုန်ထုတ်စွမ်းအားအချိန်ထက်ဝက်ကျော်ကိုလောင်ကြလိမ့်မယ်!
ကျွန်တော့်ဘဝဟာ ၁၈၀ ပြည့်နေပြီ။ စိုးရိမ်ပူပန်မှု၊ စိတ်ဓာတ်ကျမှုနှင့် ADHD မရှိတော့ပါ။ ဆေးပြားနှင့်အရက်မသောက်တော့ပါ
အနည်းဆုံးတော့ငါမှတ်မိနိုင်ကတည်းကငါ့စိတ်နှင့်ကိုယ်ခန္ဒာသည်တစ်ခါမျှမခံစားခဲ့ရဖူးပါ။ ဒီ subreddit နဲ့ယေဘူယျအားဖြင့်ငါ့ရဲ့ Reddit စွဲလမ်းမှုကနေရွေ့ဖို့အချိန်ရောက်လာပြီ။ နှုတ်ဆက်ပါတယ်သူငယ်ချင်းတို့။
ငါ (ယခုတစ်ချိုးတွင်) ကျောင်းမှခဲ့ရပြီးသည့်အခါကျွန်မလေ့လာရန်မလိုသောဆန္ဒပင်ပန်းခဲ့, ငါ့အဆင့်ငါလုပ်နိုင်မှာအကောင်းဆုံးကောင်းသောခဲ့ကြသည်မဟုတ် fapped ။ ပြီးနောက်တစ်ပါတ်သို့မဟုတ်2ရက်သတ္တပတ်များကဲ့သို့လေ့လာငါ့အလိုဆန္ဒပိုမိုမြင့်မားခဲ့သည်။ ကျွန်မသင်ယူဖို့လိုငါလျော့နည်းဦးနှောက်မြူ, ပိုကောင်းတဲ့မှတ်ဉာဏ်, မြန်တုံ့ပြန်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါကပိုခက်ခဲဘာသာရပ်များ (ငါ့ကိုသည်သင်္ချာခဲ့, ငါ FAP မသောအခါငါပိုကောင်းနားလည်) နားလည်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်။ ဒီတော့ငါ့အဘို့ကကျိန်းသေငါ့ကိုကူညီပေးခဲ့သည်။
ဟုတ်တယ် အဲဒါကိုကျွန်တော့်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်စေပြီးအရာရာကိုလုပ်ဖို့လှုံ့ဆော်ခံရတယ်။ ငါစွဲနေတုန်းကဒါကိုသတိမပြုမိခဲ့ပေမယ့်အရာရာတိုင်းဟာအရမ်းမှိုင်းပြီးနှေးကွေးနေတယ်။ ငါစိတ်ခံစားမှုကင်းမဲ့ဖုတ်ကောင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ နောက်တစ်ခါထပ်ပြန်ဖြစ်ပြီးနောက်ငါထပ်တူခံစားရတယ် ပျော်ရွှင်မှု ၃ စက္ကန့်သာမတန်ဘူး။ ညစ်ညမ်းမှုနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုကျွန်ုပ်ဘဝမှဖြတ်တောက်လိုက်သည်နှင့်အတန်းကိုမကျော်ဘဲ Bs နှင့်အထက်နှင့်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်အတန်းတစ်ခုပျက်ကွက်ပြီး Cs နှင့်အနိုင်ယူသူတစ် ဦး ထံမှလာသည်။ ကျိန်းသေကသွားလာရင်းပေးပါ။
ya bro pmo တကယ်တော့စာလေ့လာခြင်းရဲ့လမ်းကိုသင်ရနိုင်တယ်။ တကယ်တော့မင်းကမင်းကိုဖြန့်ချိဖို့မလာတော့ဘူးဆိုတာနင်သိလာရင်ငါနofapကိုရောက်နေတာပဲ။
Nofap နှင့်ဦးနှောက်မြူ, သင့်ရောဂါလက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ?
ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်သို့မဟုတ်လအနည်းငယ်ကြာပြီးနောက်သူတို့၏ ဦး နှောက်မှေးမှိန်သွားသည်ကိုလူအများတွေ့မြင်နေရသည်။ သို့သော်သင့် ဦး နှောက်မြူ၏အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကားအဘယ်နည်း။
ငါစကားမပြောနိုင်၊ တော့ဘူးအာရုံစူးစိုက်လို့မရဘူး အခြားလူများပြောတာကိုနားမလည်နိုင်ဘူး
သေးငယ်သောအရာများကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျယူခြင်း၊ မှားယွင်းသောဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းများ၊ လူမှုရေးစိတ်ပူပန်မှုတိုးပွားလာခြင်း၊ အဆင်မပြေသောခန္ဓာကိုယ် (ကျွန်ုပ်၏လက်ကိုအဘယ်နေရာတွင်ထားရမည်ကိုမသိရှိခြင်း)၊ လူများအားမျက်စိထဲသို့မကြည့်နိုင်ခြင်း၊ အားလုံးအေးဆေးတည်ငြိမ်အေးဆေးလူတို့နှင့်စကားပြောနေစဉ်။
ကွဲပြားခြားနားတဲ့လူတွေက“ ဦး နှောက်မြူ” အမျိုးမျိုးကိုတွေ့ကြုံခံစားကြရတယ်၊ ဒါပေမယ့်မင်းအသံကအရမ်းဆိုးတယ်။ ယောက်ျားဘယ်လိုနေတာလဲ
ငါတကယ်ကောင်းတာပေါ့ ငါမကြာသေးမီကကောင်းမွန်သောအလေ့အထအချို့ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည် (အခြားပြန်ကြားချက်ကိုကြည့်ပါ) ။ ငါပြန်ကျင့်ပြီးတဲ့နောက်မှာသူတို့ကိုဆက်ပြီးလုပ်နိုင်တယ်။ ငါနှစ်ပေါင်းများစွာဖုတ်ကောင်ဖြစ်ခဲ့ပေမယ့်ယခု NoFap သွားကြဖို့လမ်းဖြစ်ပါတယ်။ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှတကယ်ပိုကောင်းလာပြီလို့ထင်ရတယ်။
ငါ့အဘို့အဘယ်သူမျှမ relapses ၏ 2-3 ရက်သတ္တပတ်တွေအကြောင်းကအနည်းဆုံးကြာပါသည်။ ငါသည်လည်းဤအချက်မှာမှန်မှန်အိပ်မက် / နံနက်သစ်သားရှိခြင်းကိုစတင်ပါ။
မဲပေး Up ကိုနိုင်အောင်ကတခြားပွူဒီကြည့်ပါ။
၁၂.၅ ကတည်းကနေ့တိုင်းလိုလိုခဏခဏဖြစ်ခဲ့ရတယ်၊ တခါတရံတစ်နေ့မှာများပြားလာတဲ့အတွက်“ Normal” ဆိုတာဘာလဲမသိဘူး။ လတ်တလောနေ့ (၁၀) ရက်လောက်မှာ၊ ငါဟာကွဲပြားခြားနားမှုတွေကိုတကယ်သတိမပြုမိပေမယ့် ၁၀ ရက်မှာပဲ၊
ငါအလုပ်ကိုပြီးစီးရန်သို့မဟုတ်စတင်ရန် ပို၍ ပျင်းရိ။ လှုံ့ဆော်မှုနည်းသည်။ ကျွန်တော့် ဦး နှောက်ကအေးတာကိုဘာကြောင့်ဘာကြောင့်အဆင်ပြေတာလဲ (အကျိုးမရှိတဲ့အချိန်ဖြုန်းတီးခြင်း) နဲ့အကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုမရှိတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေကိုစပြီးလုပ်တယ်။ ဒါ့အပြင်ငါအတော်လေးမကြာခဏမူးရူး faping စတင် ... ။ ဦး နှောက်မြူစိတ်ကိုတစ် ဦး fucked တက်ပြည်နယ်ဖြစ်ပါတယ်
focus.Doing သင်္ချာမှ fog.Hard ဦးနှောက်ကငါ့ကိုခဏယူပါလိမ့်မယ်သို့မဟုတ်ကိုယ်ယူနိုငျမဆိုဖြည့်စွက်ရှိ it.If ဖြေရှင်းနိုင်အတွက်မရှိမဖြစ်ပင်၎င်း၏ရိုးရှင်းသောတွက်ချက်မှုသော်လည်းငါ့အဘို့ခဲယဉ်းပါလိမ့်မည်ကိုမုန်း, pls ငါ့ကိုဖျားနာခြင်းနှင့်ငြီးငွေ့ယောက်ျားတွေ, အကြံပြု ဦးနှောက်မြူ။ တခါတရံသူကငါ့ကိုကြောက်မက်ဘွယ်သောခေါင်းကိုက်ခြင်းကိုငါပေးမည်။
ငါ့ရဲ့နောက်ဆုံးကောင်းတဲ့အချိန်ကတည်းကတော်တော်လေးခဏပဲ။ သို့သော်အခြားသူများ၏အတွေ့အကြုံများနှင့်ကျွန်ုပ်၏ဝေးလံသောအမှတ်ရစရာများအရ ဦး နှောက်မှေးမှိန်သွားသောအခါသင်ပိုမို "ခဏတာ" ဖြစ်လာသည်၊ ကမ္ဘာကြီးကိုပိုမိုကောင်းမွန်သောအမြင်ဖြင့်သင်၏ဘ ၀ ကိုမြင်တွေ့နိုင်သည်။ သင်မမြင်ဖူးသေးသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသတိပြုမိရုံသာမကသင်နားမလည်သောအရာများကိုသင်ရရှိသည်။ မှတ်ဉာဏ်နှင့်သိမြင်မှုစွမ်းရည်များပိုမိုကောင်းမွန်စေခြင်း၊ ထို့အပြင်အချို့ကသူတို့၏အမြင်အာရုံတိုးတက်လာသည်ဟုဆိုကြသည်၊ ထို့ကြောင့်သင်သည်စာသားများကို ပို၍ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်တွေ့နိုင်သည်။
ငါပိုကောင်းတဲ့အရာတွေကိုမှတ်မိနိုင်ပြီးအတိတ်ကအမှတ်တရတွေအများကြီးပေါ်လာတယ်။ ငါ PMO ကိုတစ်လလောက်ပိတ်ထားလိုက်တယ်။
ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံအရ PMO သည် ဦး နှောက်ကိုမြုံ့စေသည်။ ငါကရက်သတ္တပတ်နှစ်ပတ်အကြာမှာနေပြီးနောက်ဆုံးရက်အနည်းငယ်မှာနေမကောင်းဖြစ်ပေမဲ့၊ မနေ့ကငါခေါင်းကိုဘယ်လောက်ရှင်းတယ်ဆိုတာသတိထားမိတယ်။ ဖော်ပြရန်ခဲယဉ်းသောအရည်အသွေးတစ်ခုရှိပါသည် - သင်၏ ဦး ခေါင်းသည် ပို၍ နူးညံ့ပြီးကြည်လင်ပြတ်သား။ ပို၍ အတူတူဖြစ်သည်။ သငျသညျလူအပေါင်းတို့သည်အချိန်ပိုမိုအာရုံစူးစိုက်နေကြသည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတိမပြုမိလျှင်လူအများစုကသတိမထားမိကြပါ။ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော့်အတွက်တော့ကွာခြားချက်ကနေ့ရောညပါပါ။ ၎င်းသည်သင်ခဏတာမဟုတ်ဘဲစူပါ ဦး နှောက်ဆေးပြားတွင်ရှိနေသည့်အလား၎င်းနှင့်တင့်တယ်သည်။
ဒီတစ်ခုတည်းလုံလောက်တဲ့အကြောင်းပြချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ငါသတိထားမိသည့်အခြားအကျိုးကျေးဇူးများမှာသဘာဝစွမ်းအင် (ကျွန်ုပ်သည်အခြားနည်းဖြင့်လေ့ကျင့်ခြင်းမပြုပါ)၊ သင်နှစ်သက်သောအရာအားအမှန်တကယ်လုပ်ဆောင်ရန်အခက်ခဲဆုံးသောခုခံမှုကိုကျော်လွှားရန်ခိုင်မာသောလှုံ့ဆော်မှုဖြစ်သည် မင်းကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့အရာတွေအကြောင်းမင်းကိုမပေးလိုက်တဲ့စကားလုံးတွေ။ ဤအရာသည်သဘာ ၀ ကျပြီးသင်အလုပ်လုပ်သောအရာမဟုတ်၊ ကျွန်ုပ်တို့အမှန်တကယ်ပင်သူဖြစ်သည်။ PMO မှလွတ်မြောက်ခြင်းသည်မည်သည့်အကျိုးကျေးဇူးကိုမျှမပေးကြောင်းထပ်ခါတလဲလဲလှည့်စားခံရသည်ကိုကျွန်ုပ်စိတ်ကူး။ မရပါ။ နေ့ရောညပါ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာယုံမှားစရာမရှိဘူး
porn စွဲ / ADHD ရောဂါလက္ခဏာတွေ add ပိုမိုဆိုးဝါးလာနိုင်သလား?
PMOing ကိုကျွန်တော်ရပ်လိုက်ပြီးကတည်းကကျွန်မရဲ့ ADHD လက္ခဏာတွေ (အာရုံစူးစိုက်မှု / လှုံ့ဆော်မှု / စည်းကမ်းချက်) တိုးတက်လာတာကိုသတိပြုမိပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒါကအတည်ပြုခြင်းဘက်လိုက်မှုနှင့် / သို့မဟုတ်လူနေမှုပုံစံစတဲ့ပြောင်းလဲမှု NoFap နဲ့အတူပဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒါကပြောတယ်၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ထွက်ခြင်းကမင်းရဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေကိုပိုဆိုးစေလိမ့်မယ်လို့မထင်ဘူး။
ငါ့အဘို့၌နေ့ညဉ့်, ကိုယ့် adderall ရပ်တန့်ခြင်းနှင့်ပေါ်မှာနေဆဲ im တူသောခံစားရပေမယ့်သဘာဝကျကျ, ကယ့်ကိုအံ့သြစရာဖြစ်ပါတယ်။
အတိအကျ။ ညစ်ညမ်းတဲ့စွဲလမ်းနေတဲ့အချိန်မှာငါလုံးဝအာရုံမစိုက်နိုင်တော့ဘူး။ အပြည့်အဝပြန်လည်ကောင်းမွန်လာခြင်းမရှိသော်လည်းယခုကျွန်ုပ် ပို၍ ပို၍ အာရုံစူးစိုက်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ညစ်ညမ်းသောစွဲခြင်းနှင့် dopamine နည်းခြင်းလက္ခဏာများဖြစ်သည်။ ဆက်လုပ်ပါ ဦး ။
adhd လူတွေသူတို့နှစ်သက်တဲ့သူတို့ရဲ့လှုံ့ဆော်မှုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒီတော့ဟုတ်ကဲ့လျှင် adhd ရောဂါလက္ခဏာတွေပိုဆိုးလာနိုင်ပါတယ်။ adhder's အတွက်အရှည်ဆုံးခရီးတစ်ခုမှာကျန်းမာသောလှုံ့ဆော်မှုအချို့ကိုမည်သို့ရှာဖွေရမည်ကိုလေ့လာခြင်းဖြစ်သည်။
ငါ MY စာမေးပွဲအံ့သြစရာခဲ့ပါဘူး!
အကယ်၍ ဤအရာသည်ကျွန်ုပ်ကိုအိုခဲ့ပါကကျွန်ုပ်သည် ၈၀% ရပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဖြစ်နိုင်သည်မှာ NOFAP (၄၀ မှ ၅၀) ထိရှိနိုင်ပြီး NOFAP သည် EPIC ဖြစ်သည်။
လုံးဝဦးနှောက် Fog နှင့်အတူ DONE
ခေါင်းစဉ်သည်ဤကဲ့သို့သောအသံဖြစ်ကောင်းဖြစ်မည်ဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်နိုးကြားသော post တစ်ခုသာဖြစ်သည်။ ငါမကြာသေးမီက nofap ဖြင့် ၃၂ ရက်လုပ်ခဲ့သည်။ ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ကအဝတ်အချည်းစည်းမရှိသောအမျိုးသမီးတစ် ဦး ကိုမကြည့်ဘဲမကြည့်မိဘဲကြာရှည်စွာပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်ဆက်စပ်နိုင်သူအားလုံးအတွက် ... လုပ်ဖို့ခဲယဉ်းသော်လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူး။ ငါနှစ်ပတ်အတွင်းတစ် ဦး fuck ဆိုတဲ့ Champ တူသောခံစားခဲ့သည်။ ငါငါ့ဗီဒီယိုအလုပ်အတွက်အပေးအယူလုပ်နေတာ, ငါသတ်မှတ်ရက်မတိုင်မီလုံးဝစီမံကိန်းများကိုခဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပိုပြီးဖြစ်ခြင်းခဲ့ငါသိတယ်။
ကောင်းပြီငါနောက်ဆုံးညဥ့်ကိုငါ့စောင့်ကိုယ်နှိမ့်ချ "မင်းကဘာလဲဆိုတာမင်းသိတယ်၊ မင်းကြိုးစားပြီးကြိုးစားခဲ့တယ်။ ဘာလို့ဒီပုံဟောင်းတွေမှာထိပ်ဆုံးကိုမတက်ကြတာလဲ။ မင်းအဆင်ပြေမယ်လို့မင်းမစိုးရိမ်ပါနဲ့။ ငါ fapped အရမ်းပျော်တယ်။ ငါလိမ်မသွားဘူး၊ ဒါကတကယ့်ကိုပျော်စရာကောင်းတယ်၊ ငါ system ကိုအနိုင်ယူချင်လို့လား၊ ကောင်းပြီဒီမနက်မှာငါလုံးဝအမှိုက်သရိုက်သလိုခံစားရတယ်။ အချိန်တန်ရင်နိုးလို့မရဘူး၊ တစ်နေကုန်လုံးလုံးအာရုံစိုက်ပြီးလှုံ့ဆော်ခံရတယ်လို့မခံစားရဘူး။ ဒါကငါ့ကိုရူးသွပ်စေတာပဲ။
မေ့မေ့မျောနေတာပဲဖြစ်စေ၊ ငါကိုယ်တိုင်ဒီခံစားချက်ကိုဘယ်တော့မှခွင့်မပြုတော့ဘူး။ ၃၂ ရက်တာကြာခဲ့ပြီဖြစ်ပေမယ့်ဒီဆိုးရွားတဲ့ချိုင်းထောက်ကိုကျွန်တော်ကုစားဖို့မလုံလောက်သေးပါဘူး ကျွန်တော့်ခေါင်းထဲကထိုအသံလေးဟာသူ့အသံအနည်းငယ်ထက်ပိုကြီးလာအောင်ဘယ်တော့မှခွင့်မပြုတော့ဘူး။ ငါ nofap လုပ်ခြင်းမှအံ့ benefit ဖွယ်ကောင်းသည့်အကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုကိုသာရွေးနိုင်လျှင်ပင်ဤတန်ဖိုးမရှိသောကာလတိုအပျော်အပါးကိုစွဲလမ်းစေသောဆုံးရှုံးမှုခံစားချက်ကိုကျွန်ုပ်ယူမှတ်လိုက်သည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိ၊ အဲဒါမာရသွန်ပဲ။ အားလုံးရတယ်။
နေ့ 60 အစီရင်ခံစာ
အာရုံစူးစိုက်: ကျွန်ုပ်၏အာရုံစူးစိုက်မှုသည်လည်းသိသိသာသာတိုးတက်လာသည်ဟုစစ်မှန်သောပြောနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တွေးတောဆင်ခြင်စဉ်ကာလအတွင်းကျွန်ုပ်စိတ်ထဲ ၀ င်ရောက်လာသည့်ကျပန်းအသုံးမကျသောအူကြောင်ကြောင်အတွေးများကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိရန်ပိုမိုလွယ်ကူကြောင်းသတိပြုမိသည်။ ငါသည်လည်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိထိပ်တန်းအင်ဂျင်နီယာကျောင်း ၅၀ တွင်အင်ဂျင်နီယာကျောင်းသားတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၌လုပ်စရာများစွာရှိသည်။ ကျွန်ုပ်၏လေ့လာသင်ယူမှုစွမ်းရည်သည်အလွန်ကောင်းမွန်ပြီးကျွန်ုပ်သည်ယခင်ကထက်ပိုမိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းပြီးအာရုံစိုက်မိသည်။ နေ့စဉ်စာအုပ်တွေဖတ်တယ်၊ ဘယ်သူမှသင့်ကိုမသင်ကြားပေးတဲ့အရာတွေကိုငါသင်ယူခဲ့တယ်။
ထိပ်ဖျား: စာအုပ်များကိုဖတ်ပါ၊ လူတစ်ယောက်ကသူတို့တစ်သက်တာလုံးအဲဒီအရာထဲမှာထည့်ထားခဲ့တဲ့ဗဟုသုတကိုသင်ယူဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်၊ အဲဒါကမင်းအောင်မြင်ချင်တဲ့အရာတွေကိုအောင်မြင်ဖို့ကူညီပေးနိုင်တယ်။ သင်အလုပ်များလွန်းပါကအသံထွက်သွားပြီးသူတို့၏အခမဲ့ရုံးတင်စစ်ဆေးမှုကိုရယူပါ။ သင်ခရီးသွားနေစဉ်စာအုပ်ကို 1.5x မြန်နှုန်းဖြင့်နားထောင်ပါ။ သင်နှစ်သက်သောအရာ၊ အချစ်၊ အမျိုးသမီး၊ အလုပ်၊ သမိုင်း၊ ဘာသာ၊ ငွေ၊ လူမှုရေး၊ အလေးအနက်ထားပြောရရင်သင်တစ်ခုခုကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်စာအုပ်ကောင်းတစ်ခုရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်။
သို့ပြန်သွားရန်လာကလေးဘဝ မှစ. အမှတ်တရများ
ယခုငါတစ်ပါတ်နှင့်တစ်ဝက်ခန့်သန့်ရှင်းသော (လုံးဝ PMO မရှိ) နှင့်ယနေ့နံနက်နိုးသောအခါငါနှစ်ပေါင်းများစွာစဉ်းစားမရသေးသောဆိတ်သငယ်အဖြစ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းအမှတ်တရများရှိခဲ့သည်။
ငါအံ့ was နေရုံသာမကအခြားမည်သူမဆို PMO မပါဘဲသင် ပို၍ ကြာသွားသည်နှင့်သူတို့ပျောက်ဆုံးသွားပြီသို့မဟုတ်မမှတ်မိနိုင်ကြောင်းအမှတ်တရဟောင်းများစုဆောင်းနေပုံရသလား။
၇ လအကြာမှာငါနောက်ဆုံးမှာ GED ကိုပြီးသွားပြီ။ NoFap နဲ့အဲဒီမှာရှိတဲ့သူတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဤရွေ့ကား GED အပေါ်ငါ့ရမှတ်များဖြစ်ကြပြီးငါကအရမ်း 8th တန်းမှအောင်ဘယ်တော့မှကြားမှနောက်ဆုံးတော့ငါထိုကဲ့သို့သောရမှတ်နှင့်အတူရှောက်သွားနိုင်ခဲ့အလွန်ပျော်ရွှင်အလွန်ဝမ်းသာတယ်။
ကိုယ်ကတန်း 8th စေဘယ်တော့မှသောကြောင့်, ငါမတိုင်မီ algebra, ဂျီသြမေတြီ, ဘူမိဗေဒနှင့်အခြားအဆင့်မြင့်သည့်အကြောင်းအရာများနှင့်တူသိတယ်ဘယ်တော့မှအသစ်သောအရာတို့ကိုအများကြီးသင်ယူခဲ့ရတယ်။ ငါအကြောင်းအရာများအပေါငျးတို့သလေ့လာနေသို့အလုပ်တွေအများကြီးထားကအလွန်ခက်ခဲခဲ့ပါတယ်။
NoFap မှဒီအောင်မြင်မှုကိုအများကြီးခံစားခဲ့ရတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါကငါ့ ဦး နှောက်ရဲ့မြူမှုန်ကိုတကယ်ကူညီပေးခဲ့တယ်၊ ပြီးတော့ငါ့ရဲ့စမ်းသပ်မှုတွေကိုလေ့လာဖို့နဲ့အာရုံစိုက်ဖို့လွယ်ကူစေလို့ပဲ။ NoFap ကကျွန်တော့်ကိုစာမေးပွဲအောင်ပြီးကျွန်တော့်ရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုအရတကယ်ကူညီပေးခဲ့တယ်၊ အဲဒါအတွက်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ NoFap မပါဘဲကျွန်တော်ဖြတ်သန်းနိုင်လိမ့်မယ်လို့မထင်ပါဘူး၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲဒါကကျွန်တော့်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့လတစ်လတည်းကအများကြီးအထောက်အကူပြုခဲ့ပါတယ်။
နောက်ထပ်ကြီးမားတဲ့ကျေးဇူးတင်စကားအဘို့ငါမေးသော်အခါတိုင်းအကြံဉာဏ်နှင့်အကြံပေးချက်များကိုပူဇော်သက္ကာဘို့များအတွက် NoFap အသိုင်းအဝိုင်းကိုယ်တိုင်ကမှတတ်၏။ တဦးတည်းမှာကိုယ့်ကြောင့်လည်းခက်ခဲကြောင့်အရှုံးမပေးသွားပေမယ့်ခဲ့သည် / u / Eternal_Horizon ကနေတချို့စာမကျြနှာမှအကြှနျုပျကိုချိတ်ဆက်ဖြင့်ငါ့ကိုထုတ်ကူညီပေးခဲ့သည် www.yourbrainrebalanced.com သူတို့ငါ့ကိုကြီးတွေနဲ့အံ့သြဖွယ်နည်းလမ်းတွေနဲ့တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ကူညီပေးခဲ့သည်ပါပြီ။ ငါကအဘယျအဘို့ဤအသိုင်းအဝိုင်းကိုချစ်ကြောင့်ငါ reddit အကောင့် created အဘယ်ကြောင့်တဦးတည်းအကြောင်းပြချက်ဖြစ်ခဲ့သည်။
ငါခံစားခဲ့အဘယျသို့ 10 နေ့ရက်များသည်ရှောင်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ၏ 30 နှစ်များ,,!
ကျွန်တော့်ကိုယုံပါ၊ အဲဒါကသင့်ရဲ့မှတ်ဥာဏ်ကိုပိုကောင်းစေပါတယ် (စကားလုံးများနှင့်အမည်များကိုမှတ်မိဖို့မကြိုးစားတော့ပါ၊ သင်ထင်ပြီး၎င်းအတွက်လည်းသင့်အတွက်ပါ။ ) ပိုကောင်းသောအာရုံစိုက်မှုနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှု, ငါသည်သင်ယခုအချိန်တွင်အသက်ရှင်နေထိုင်အစောပိုင်းကပြောခဲ့သကဲ့သို့, သင်တစ် ဦး ဖုတ်ကောင်ကဲ့သို့အရာတစ်ခုခုကိုကြည့်ခြင်းထက် (သင်၏ဆိုလိုတာကယခုအချိန်တွင်အသက်ရှင်နေခြင်းအားဖြင့်ဆိုလိုတာက) သင်၏မျက်စိမြင်သောသတင်းအချက်အလက်အားလုံးကို process လုပ်ဖို့ကြိုးစားပါ။ ခင်ဗျားတို့ကငါချဲ့ကားပြောဆိုနေတာလို့ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်။ ဤအရာသည်ကျွန်ုပ်ယခုထိခံစားခဲ့ရသောအရာဖြစ်သည်။ မိန်းကလေးမရှိသေးပါ။ (ဆဲဆဲ) …… .. 😉
ဒါဟာတကယ်ဘဝယောက်ျားတွေရန်သင့်လမ်းတိုးတက်ကောင်းမွန်ဒါရဲ့တစ်ဦးချင်းစီကတခြားလှုံ့ဆျောမှုကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်အသက်အဘို့ဒီနည်းကို Shit အတော်လေးပါစေ!
Nofap ပြီးတော့လေ့လာ! HOLYBRAIN!
ဒါကကိုယ့်ယခုအထက်တန်းကျောင်းငါကို AT အလွန်ဆိုးထားတဲ့ IM ကျောင်းမှာတစ်နှစ်ပျက်ကွက်ကြောင့်ဆရာ SO အံ့အားသင့်စရာငါ့ကို AND ထားတဲ့ IM ချီးမွမ်းယနေ့လျော့နည်းဦးနှောက်မြူနှင့်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ရှိခြင်း IM nofap ရှာဖွေတွေ့ရှိ နေ့မှစ. လုံးဝအံ့သြဖွယ်ယောက်ျားတွေပါ! im အသစ်တစ်ခုကိုခရီးစတင်ပါတော့မယ်! သင်တို့ရှိသမျှအဘို့အကျေးဇူးတင်ပါသည်!
ယခုတွင်ငါသည် fuck ဆိုတဲ့ဓာတ်ပုံပြပွဲမှတ်ဉာဏ်ရှိသည်! ဒီ Read
NoFap နေ့ 55: ဒါနဲ့ကျောင်း Chem လူတန်းစားများနှင့်ဆရာများအတွက်ဓာတ်ခွဲခန်းလုပ်နေခဲ့ whiteboard ပေါ်တွင်ဓာတ်ခွဲခန်းများ၏သီအိုရီအကြောင်းကိုအချို့သောအရေးကြီးသောပစ္စည်းပစ္စယဆွဲသည်။ ငါဂုဏ်နဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြောင်း shit သတိရ, ငါအိမ်ပြန်နောက်ပိုင်းမှာရလာသောအခါကျွန်မစိတ်ထဲအတွက် whiteboard မှတ်တမ်းတင်ဓါတ်ပုံများရိုက်ကူးကြတာပါသိကြနဲ့တူရဲ့, လူတိုင်းကသူတို့ noteblocks ရဖို့ပြေးပေမယ့်လိုက်တယ်တစ်ခုခုခံစားရသည်။ အဲဒီမှာတိုင်း fuck ဆိုတဲ့အရာသတိရ😀
စိတ်၏ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာအကြွင်းမဲ့အာဏာအကောင်းဆုံးအကျိုးကျေးဇူးဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော့် ဦး နှောက်ဟာပုံမှန်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ငါတွေ့တဲ့အမျိုးသမီးတိုင်းကိုလိင်ကိစ္စပြုခြင်းအကြားစစ်ပွဲတွေအများကြီးမကစားခဲ့ဘူး။ ငါဝါသနာပါရာများ၊ ဆက်ဆံရေးများ၊ ကျောင်းများစသည်တို့ကိုအာရုံစိုက်ရန်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းအင်များပိုမိုရရှိခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်ဆေးလိပ်ဖြတ်ပြီးသောအခါညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကျွန်ုပ်ကြည့်ရှုသောအခါအံ့အားသင့်မိသည်။
ကျွန်တော့်အတွက်အရိုးရှင်းဆုံးနဲ့အကြီးမားဆုံးတိုးတက်မှုကတော့ငါပိုပြီးအိပ်စက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ ညအိပ်ရာဝင်ချိန်မှာတော့ဒီပြီးပြည့်စုံတဲ့ဗွီဒီယိုကိုကြည့်ဖို့ကျွန်တော်အချိန်မဖြုန်းပါဘူး။ ငါကြည့်တာကတော့ညအချိန်မှာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုမကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ငါဘယ်တော့မှပြန်လာရမယ်။
၂၀၁၅ ကျဆုံးခြင်း။ နွေ ဦး ရာသီ 2015. ဒင်းရဲ့စာရင်း။ ငါ့ဘဝမှာအမြင့်ဆုံး GPA
ငါတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်အချိန်တွင်မမှတ်မိနိုင်ပါ (၆ တန်း၊ ၁၂-၁၃ တန်းထင်သည်) ဒါပေမယ့်ငါကအလယ်တန်းကျောင်းတက်တုန်းကဒီနှစ်ခရစ်စမတ်အချိန်အထိ (တဖြည်းဖြည်းပိုဆိုးလာလာတယ်) (ကောလိပ်မှာရှိတဲ့အသက် ၂၀ အရွယ်အငယ်တန်း) ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်အချို့ကြောင့် Nofap ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏အတွေးအခေါ်ကိုပြောင်းလဲစေခဲ့သည်။ ငါခရစ်စမတ်ကတည်းကဒီရှာပုံတော်အပေါ်ခဲ့ပါတယ် ငါနှစ်ကြိမ်မအောင်မြင်ဘူး၊ ငါပြန်မတ်တပ်ရပ်ခဲ့တယ်။
ငါနောက်ဆုံးစာသင်မတိုင်မီအစဉ်အမြဲငါလျှောက်ထားကျောင်းသားဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါရတယ်ငါရှင်းလင်းသောနိမ့်ဆုံးကိုပြု၏။ သို့သော်လည်းကျွန်ုပ်သည်ရပ်တန့်သွားပြီး ၂၀၁၅ ၏ကျဆုံးသောစာသင်ပြီးနောက်နောက်ဆုံးတွင်ကျွန်ုပ်၏ကျောင်း၌ Acbicbb Probation ကိုရောက်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏အတန်းကိုနောက်နှစ်ဝက်အတွင်းကျောင်းမတက်လျှင်ကျွန်ုပ်ကိုကျောင်းမှထုတ်ပစ်မည်ဟုဆိုလိုသည်။ ဒါကကျွန်မရဲ့စွဲလမ်းမှုအထွတ်အထိပ်ရောက်နေချိန်ဖြစ်တယ်။ ငါနာရီပေါင်းများစွာနေ့တိုင်းစောင့်ကြည့်ခဲ့သည်။ ပုံသဏ္outာန်ထဲကဖြစ်ခဲ့သည်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဂရုမစိုက်ဘူးလား၊ ငါ့ရဲ့လေ့လာမှုတွေလည်းမလုပ်ခဲ့ဘူး၊ ပြီးတော့ငါမပတ်ချင်တော့ဘူးလားဆိုတာသိချင်လာတဲ့အထိစိတ်ဓာတ်ကျလာတယ်။
ဒါပေမယ့် NoFap ကငါ့ဘဝထဲကို ၀ င်လာတာနဲ့အမျှမင်းတို့အားလုံးဆီကနေသင်ယူခဲ့သမျှကိုငါ့ဘဝမှာအသုံးချခဲ့တယ်။ ဤစာသင်ခန်းသည်ကျွန်ုပ်သည် ၃.၄၅ GPA ရရှိခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်သည် Academic Probation မှမဟုတ်ဘဲတစ်နှစ်ခွဲအကြာကျွန်ုပ်သည် Dean ၏စာရင်းတွင်ပါ ၀ င်ပါသည်။ ငါသင်ယူခြင်းနှင့်ငါ့ဘဝကိုချစ်ကြတယ်။ ငါ့မှာလှပတဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်ရှိတယ်။ သူကလက်တွေ့မကျတဲ့မိန်းကလေးတွေရဲ့မျက်နှာပြင်တစ်ခုပဲမဟုတ်ဘူး၊ ငါ့ကိုတကယ်ချစ်တာကိုပြတယ်။ အခုငါ porn ဟာငါမရှိရင်အသက်ရှင်နိုင်ပြီးငါမရှိရင်အသက်ရှင်ဖို့လိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတာတကယ်သိပြီ
ဒါကကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့အခါပြန်လာဖို့အဟန့်အတားပဲ။ စိတ်ပျက်အားလျော့နေတဲ့စိတ်ကိုငါကြာမြင့်စွာခံစားခဲ့ရတယ်။ ထို့နောက်ငါရက်ပေါင်း ၅၀ ကျော်သွားပြီးအားကစားခန်းမသို့သွားသည်၊ ကျန်းမာစွာစားပြီးအပြုသဘောဆောင်သောအတွေးအခေါ်ကိုပေါင်းစပ်လိုက်သည်။ သေချာသည်မှာကျွန်ုပ်၏ရှင်းလင်းသော ဦး ခေါင်းသည်ကျွန်ုပ်သတိပြုမိခဲ့သောအဓိကအကျိုးကျေးဇူးဖြစ်သည်။ ဒီဟာကိုကြာမြင့်စွာမထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ဘူး။ အကြောင်းပြချက်တခုခုကြောင့် ၅၅ ရက်ကျော်ရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ခွင့်ပြုလိုက်တယ်။ ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်တော့အဲဒါတောင်မဆိုးပါဘူး။ ဒီနေရာမှာငါနှင့်အတူသဘောမတူ, ဒါပေမယ့်ဒီငါ့အတှေ့အကွုံမြား။
တစ် ဦး တည်းပြန်ဖြစ်တစ်ခုငါ့ကိုထိခိုက်ခဲ့ပါဘူး ငါပထမ ဦး ဆုံးပြီးနောက် 10 ရက်အကြာမှာဒုတိယမထင်ခဲ့ကြ ငါ့ကိုစိတ်ထိခိုက်စေတဲ့အရာကဒါကငါ့ရဲ့အတွေးအမြင်ကိုဖွံ့ဖြိုးစေတယ်။ တကယ်တော့ငါမစခင်ကတည်းကငါပြန်စဖို့အချိန်နည်းနည်းလေးအတွင်းမှာပဲရက်တွေနည်းနည်းနဲ့ထပ်ခါထပ်ခါထပ်ခါထပ်ခါထပ်ခါထပ်ခါပြန်ဖြစ်မိစေတဲ့ညစ်ညမ်းတဲ့အတွေးအခေါ်ကိုငါဖြစ်ပေါ်လာစေတယ်။ အဘယ်အရာကိုခန့်မှန်း? ကျွန်တော့်စိတ်သည်ယနေ့ခေတ်အလွန်မြူဆိုင်းနေသောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်မည်သည့်အရာကိုမဆိုအာရုံစိုက်ရန်ခဲယဉ်းသည်။ ငါနောက်ဆုံးရက်အနည်းငယ်ငရဲကဲ့သို့အိပ်ခဲ့ရတယ်။ ငါအကြောင်းပြချက်မရှိတနေ့လုံးဝမ်းနည်းတယ်။ နောက်ဆုံးမှာတော့အခြေအနေတွေပိုကောင်းလာပါလိမ့်မယ်။ ငါကိုယ်တိုင်မြင်ခဲ့ပြီးပြီဆိုတာငါသိတယ်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပြန်တွန်းလှန်ဖို့လိုတယ်။
porn ထံမှ abstinence သင့်ရဲ့မှတ်ဉာဏ်ထက်မြက်ခဲ့သလား
မင်းရဲ့မှတ်ဥာဏ်ကိုချွန်သည်ဟုမထင်ဘူး၊ မင်းကအာရုံပျံ့လွင့်မှုနည်းတယ်၊ ပိုပြီးအာရုံစူးစိုက်ပြီးမှတ်မိနိုင်တယ်။
ငါကအတွေး၏ရှင်းလင်းပြတ်သားအဖြစ်ဖော်ပြရန်ချင်ပါတယ်။ ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ပုံမှန်အားဖြင့် hypersexual စိတ်ဓာတ်ကိုဖြစ်စေ၊ ဆိုလိုသည်မှာ ဦး နှောက်သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရအတွင်းပိုင်းအတွေးများ (သို့) ပြင်ပပတ်ဝန်းကျင်ရှိလှုံ့ဆော်မှုများကြောင့်မကြာခဏအာရုံပျံ့လွင့်စေသည်။ သူတို့အားမကြာခဏအာရုံပျံ့လွင့်ခြင်းနှင့်၎င်းတို့၏ပူးတွဲဖြစ်ပေါ်ဇီဝကမ္မတုံ့ပြန်မှု [mini ကို "အမြင့်ဆုံး" မရှိရင်, ဦး နှောက်လုပ်ငန်းဆောင်တာချောချောမွေ့မွေ့။
ငါလည်းဆက်စပ်မှုကဒီကြောင်းထင်ပါတယ် သင်သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေးများနှင့်အာရုံမပျံ့လွင့်ပါ။ ထို့ကြောင့်“ နေရာ” ကိုအသုံးဝင်သောအရာများဖြင့်ဖြည့်စွက်ထားသည်။
ဟုတ်ပါတယ်။ သာမှတ်ဉာဏ်သော်လည်းပိုမိုကောင်းမွန်စေတယ်။ ငါ၏အယုတ္တိဗေဒနှင့်ဆင်ခြင်ခြင်းစွမ်းရည်အဖြစ်ကောင်းစွာတက်သေနတ်ကဲ့သို့အကျွန်ုပ်ခံစားရသည်။ ကျွန်မဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်သောအခါငါဒီနှစ်သင်္ချာမှာအလွန်ကောင်းတယ်။
ဟုတ်ကဲ့ porn, ကစာသားကဦးနှောက်ကျုံ့သငျ့စိတျ numbs အကျိုးကိုစင်တာ, hippocampus, တိုကျရိုကျပေါ်၌ရှိသောအမြှေးတက် fucks ။
ADHD နဲ့ nofap ။
မင်္ဂလာပါ ကျွန်ုပ်၏ ADHD ကိုကုသရန် nofap ကိုစတင်ခဲ့သည်။ အခုတော့ငါကအစပိုင်းမှာသံသယရှိခဲ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာ Wikipedia ကိုသုတေသနပြုခဲ့တယ်။ ငါ Strattera နှင့် Wellbutrin ယူလေ့ရှိတယ်။ Sttratera သည် norepinephrine ကိုတိုးပွားစေပြီး Wellbutrin သည်သင့် ဦး နှောက်တွင် norepinephrine နှင့် dopamine တိုးပွားစေသည်။ (သင့် prefrontal cortex တွင် norepinephrine နှင့် dopamine နိမ့်ကျသောအခါ ADHD ဖြစ်တတ်သည်။ )
ထိုအခါငါသည်သင်တို့အနေနဲ့အော်ဂဇင်ကိုခံစားတဲ့အခါမှာသင့်ဦးနှောက်ထဲမှာဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတာကိုသုတေသနပြု။ orgasm အခြေခံအားဖြင့်သင့်ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောတစ် dopamine နဲ့ norepinephrine အဘို့ဆောင်သောပွဲဖြစ်ပါတယ်။ (တစ်အော်ဂဇင်ပြီးနောက်, norepinephrine သင့်ရဲ့သွေးကြောထဲမှာရှာဖွေတွေ့ရှိတာဖြစ်ပါတယ်တိုးမြှင့။ )
ငါအစက်တွေချိတ်ဆက်နှင့် nofap ကြိုးစားရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ PMO နှစ်များကြာပြီးနောက်ကျွန်ုပ်၏ norepinephrine နှင့် dopamine receptors များသည်မှေးမှိန်သွားပြီး ADHD ၏လက္ခဏာများဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ငါစိတ်ရောဂါဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ပြီးသူမသံသယဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်ငါကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြိုးစားရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ငါ ADHD ဆေးလိပ်ဖြတ် nofap စတင်ခဲ့သည်။
ပထမ ဦး ဆုံးရက်အနည်းငယ်အကြွင်းမဲ့အာဏာငရဲဖြစ်ခဲ့သည်။ အကြှနျုပျ၏ ADHD steroids အပေါ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ၃ မိနစ် YouTube ဗီဒီယိုကိုတောင်မကြည့်နိုင်သေးဘူး။ ငါဟာနာတာရှည်ပြီးတစ်မိနစ်ထက်ပိုပြီးနေလို့မရဘူး။ ငါ့နှာခေါင်းကအရမ်းဆိုးပြီးငါမနေနိုင်ဘူး။ ငါအနိုင်နိုင်တည်ဆဲဖြစ်ခဲ့သည်။
ရှည်လျားသောဇာတ်လမ်းတို၊ ကျွန်ုပ်သည် ၄၆ ရက်နေပြီးကျွန်ုပ်၏ ADHD ပျောက်ဆုံးသွားပြီ။ အလုပ်တွေကိုငါပြီးအောင်လုပ်နိုင်တယ်၊ ဒါကငါ့ဘဝမှာမကြားဖူးဘူး။ ကျွန်ုပ်သည် GPA သည်အလွန်ဆိုးသောကြောင့်အထက်တန်းကျောင်းတက်စဉ် nofap ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်ဆန္ဒရှိသော်လည်းကျွန်ုပ်၏အသစ်ရှာဖွေတွေ့ရှိချက်ဖြင့်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်ဘဝကိုတည်ဆောက်ရန်အလွန်စိတ်ရှုပ်ထွေးနေပါသည်။ ဤအတောအတွင်းကျွန်ုပ်သည်ကုဒ်ရေးတတ်ရန်သင်ယူပြီးရိုးရှင်းသောအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အားနေ့စဉ် ၀ င်ငွေအနည်းငယ်ပေးသည်။ ဒါဟာတကယ်ကိုဘာမှမဟုတ်ပေမယ့်အဲဒါကငါ့ဘဝမှာပထမဆုံးအောင်မြင်မှုပါ။
ငါမိန်းကလေးများရတဲ့သို့မဟုတ် alpha သို့မဟုတ်ဘာမှဖြစ်ခြင်းကိုဂရုမစိုက်ပါဘူး။ ADHD တစ်ယောက်တည်းကနေလွတ်မြောက်ခြင်းသည်ကျိုးနပ်ပါသည်။ NoFap အလုပ်လုပ်သည် ငါအသုံးမကျဝက်ဘ်ဆိုက်များအင်တာနက်ပေါ်မှာ browsing နာရီဖြုန်းတော့ဘူး။ ထိုအခါငါရိုးရှင်းစွာချင်ကြဘူး။ ငါ Reddit သမျှသောအရာတို့ကိုမ browse ပါဘူး။ ငါနေ့တိုင်းအချိန်အများကြီးရှိသည်။
မူလကကျွန်ုပ်သည်ရက် ၉၀ အမှတ်အသားကိုရောက်သော်ဤစာမူကိုရေးသားခဲ့ခြင်းဖြစ်သော်လည်းယနေ့ပြုလုပ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
သင့်ရဲ့ခရီးအပေါ်ကံကောင်းပါစေ, fapstronauts ။